General Chemistry III - Chem 323 - Jimma College of Teachers Education
Moojulli Koorsii Keemistirii Kanaa kan of keessatti haammatu qabiyyeewwan gurguddoo kanneen akka keemistirii elementoota muraafama S(S-block)keesumattuu sodiyemii fi Potasiyemii ilaalchisee amaloota fiizikaalaa fi keemikaalaa; akkasumas, kompaawundoota isaanii; argama, adda baasuu, qophii fi faayidaalee isaanii. Keemistirii elementoota garee IIIA Aluminiyemii irratti xiyyeeffachuun,Keemistirii Elementoota garee IV Karbonii fi Silikenii irratti xiyyeeffachuun amaloota fiizikaalaa fi keemikaalaa; akkasumas, kompaawundoota isaanii; argama, adda baasuu, qophi fi faayidaalee isaani kan ilal atu ta’a.Kunis boqonnawwan sadan jalqabaa keessatti kan xumuramu yeroo ta’u boqonnaa afur keessatti keemistiri Organikii ilaalchisuun waa’ee kompaawundoota organikii Alkeenota cancala dheeraa fi maramoo,alkiinota,alkaayinoota,kompaawundoota dhaalamota beenzinaa,aldihayidotaa fi kitoonii,karbogiziliik asiidota ,Isarii fi itarii akkasumaas alkoolota ilaalchisuun amaloota fiizikaalaa qophii fi walnyaatiinsota bebbekamoo isaanii kan barannu ta’a.Boqonnaa shanaffaa keessatti waa’ee zayita fi coomaa akkasumaas karbohaydireeti fi pirotini kan barannu ta’a.Boqonnaan dhumaa rakkoo addunyaa keenyaa yeroo ammaa kan ta’e waa’ee olka’i nsa ho’a addunyaa fi taatee mana magariisaa akkasumaas marsaa albudotaa uumama keessatti kan keessatti barannu ta’a. Koorsotni keemistiri kanneen kanaan dura fudhattan BSC-101 fi BSC-102 kessumattu Chem-222’n akka yaad-rimee bu’uuraatti koorsi kana keessatti isin fayyadu.
Kaayyoo Waliigalaa Koorsichaa
Xumura koorsii kanaatti barattoonni;
Pirinsippiloota bu’uuraa kemistiri organikii barachuuf maqaa kompaawundoota organikii moggaasuu,caasaa kompaawundoota orgaanikii fakkeessuu,qophii mana yaalii kompawundoota organikii addan nii baafatu.
Keemistirii elementoota murna hundee A ilaalchisuun argama, addaan baasuu, amaloota fiizikaalaa fi keemikaalaa elementoota kanneenii fi kompaawundoota isaanii fi faayidaalee isaan jiruuf jireenya keessatti qaban nii hubatu.
Ibsa Keemistirii Elementoota Bu’uuraa
Xumura boqonnaa kana booda leenjifamtootni
Haala argama fi baay’ina elementootni bu’uura uumama keessatti qaban ni ibsu.
Haala elementootni kun kompaawundota isaanii keessaa adda itti baahan ni ibsu.
Amaloota elementoota bu’uuraa ni ibsu.
Kompaawundoota Murteessoo Elemetootaa bu’uuraa irraa uumaman ni beeku.
Elemetootni kun elementooota garee IA’ isaani s Li,Na,K,Rb,Cs fi Fr dha. Haala baay’i nan argamu fi faayidaa qaban irratti hunda’uun Na fi K’i n akka bakka bu’ee gare IA tti fudhachuun amala fiizikaalaa , amala keemikaalaa, adda baasuu, argama fi faayidalee elementoota hundee kana haa ilaallu.
Keemistirii Soodiyeemii fi pootaasiyeemii
1.1.1 Caasaa Elektiroonawaa
Raabsi elektiroonii soodiyeemii fi pootaasiyeemii
11Na:1S2 2S2 2P63S1 ykn 11Na :[Ne] 3S1
19K: 1S2 2S2 2P63S2 3P64S1 ykn 19K :[Ar] 4S1
Walnyaatiinsa keemikaalaa keessatti elektiroonii tokko waan kennanuuf , kaatayoonii chaarjii tokko qabu uumu. Kanaafuuu lakkoofsi oksideeshinii isaanii +1 dha
1.1.2 Amaloota waliigalaaAmala fiizikaalaa
Na fi K sibiilota waan ta’aani f amaloota sibiilaa agarsi su. Amalootni fiizikaalawaa Na fi K muraasni
Ho’aa fi elektirikaa of keessaa dabarsuu
Sibiloota lallaafoo dha
Calaqqisummaa olaanaa qabu.
Qabxii baqinaa fi danfinaa gadaanaa qabu.
Rukkina gaadaanaa qabu.
Amaloota Fiizikaalaa Na fi K
Elementii Na K
Raadiyeesii atoomawaa(nm) 0.19 0.24
Raadiyeesii ayoonawaa(nm) 0.102 0.138
Elektiroo negaativiitii 0.9 0.8
Annisaa ayooneessu jalqabaa(KJ/mol) 496 419
Qabxii baqinaa (oC) 98 63
Qbxiii danfinaa (oC) 883 760
Rukkina(g/cm3) 0.93 0.86
Na fi K elementoota baay’ee si’aawoo ta’ani dha. Salphaatti elektirooni tokkoo kennuun kaataayonii uumu. M→ M+ +e- M= Na/K dha.
Na → Na++ e- K → K++e-
Kanaafuu sibiiloota kanneen akka haayidiroojinii salfarii fi haalojinoota ni rideeksu.
Na fi K rideeksota cimoo dha.
Kaataayonoota Na + fi K+ uumu.
Amaloota keemikaala Na fi K muraasa
Walnyaatiinsa oksijinii wajjin.
Soodiyeemiin yommuu oksijinii gaazawoo wajjin walnyaatu soodiyeem peroksaayidii uuma.
2Na (s) + O2(g) → Na2 O2(s)
Potaasiyeemiin yommuu oksiijinii gaazawoo wajjjin walnyaatu supparoksaayidii uuma. K(s) + O2(g) →KO2(s)
Salfarii waliin salfaayidii uumu. 2Na (s) + S(s) →Na2S(s)
2K(s) + S → K2S(s)
Walnyaatiinsa haalojinoota waliin
Haalojinoota waliin walnyaachuun kompaawundota ayoonawaa Halayidoota jedhaman uumu.
Fkn :- 2Na(s) + Cl2(g) → 2NaCl(s) 2K(s) + I2(g) → 2KI(s)
Walnyaatiinsa hayidorojinii wajjin
Haayidirojinii wajjin walnyaachuun kompaawundoota ayoonawoo Haayidiraayidota uumu.
Walnyaatinsa bishaan wajjin.
Sibilootni kun bishaan wajjin waan si’aayinan walnyaatani f bishaan keessatti kuusuun hin danda’amu bishaan wali n beezi fi gaazi haayidiroojinii uumu.
2Na(s) + 2H2O(l) → 2NaOH + H2(g)
2K(s) + 2H2O(l) → 2KOH + H2(g)
Walnyaatinsa asiidii wajjin
Sibilootni kun haayidiroojini caalaa waan si’aawoo ta’ani f asi dii keessaa haayidirojinii gadi lakkisisuu
Na(s) + 2H+(g → 2Na+(aq) + H2(g) K(s) + 2H+(aq) → K+(aq) + H2(g)
Walnyaatiinsa ammoniyaa wajjin
Ammoniyaa rideeksuun ammayidota uumu.
Fkn. 2Na(s) + 2NH3(g) → 2NaN H2(s) +H2(g)
Oksaayidoota adda addaa rideeksisuu keessatti Al2O3 +6Na → 2Al + 3Na2O
SiO2 + 4Na → Si +2Na2O
3CO2 +4Na → 2Na2CO3+C
1.1.3 Qoodama Oksaayidootaa Lakkofsa Oksideeshinii irratti hundaa’uun.
Sodiyem oksaayidii (Na2O)oksaayidiin walnyaati nsa armaan gaditi n qophaa’uu danda’a.
2NaNO2 + 6Na à4Na2O + N2
Sodiyeem oksaayidiin bishaan waliin walnyaachuun NaOh uuma.
Sodiyeem per oksaayidii(Na2O2)
Sodiyemii oksijinii ga’aa keessatti gubuun qophaa’a.
2Na + O2 àNa2O2
Sodiyeem peroksaayidiin asiidii waliin walnyaachuun H2O2 uuma Na2O2 + H2SO4à Na2SO4 + H2O2
Kan qophaa’u haala armaan gadiitiin ta’a.
2KOH + 2K à 2K2O +H2
Potasiyeemiin supper oksaayidii uuma.
K +O2 àKO2
Elementootni kun si’aayina olaanaa waan qabani f bilisaan hin argaman.
Elementoota daran elektirooposativi waan ta’aani f uumamaan akka kaataayonoota anaayonoota daran elektiroo negaativii ta’aan wajjin kompaawundota uumun argamu.
Soodiyeem kilooraayidoo, bishaan galaanaa fi dachee keessatti argama.
Soodiyeem salfeetii (Na2SO4.10H2O)
Soodiyeem kaarbooneetii (Na2CO3)
Boraaksii (Na2 B4O7.10H2O) Pootaasiyeemiin akka albuuda
Kaarnaalaayitii (KCl. MgCl2.6H2O)
KCl.KNO3 kkf keessatti argama.
Na fi K kuusaa elektiroodii daddeessaa negaativii olaanaa waan qabaniif elektiroolisiisii baqaa ashaboolee isaanitin qofa adda bahu. Haala kanaan Na fi K yeroo jalqaaf kan adda baasee ‘Dvy’ dha.
Adeemsa kana keessatti
Soodiyeem kilooraayidiin 800oC irratti baqa qabxi baqinaa isaa gadii hir’isuuf jecha CaCl2 itti dabalama ,.kaalsiyeem kilooraayidiin yoo itti dabalamu 600oC irratti baqa. Meeshaan kanaaf fayyadu “Doowns Seeli ” jedhama.
Anoodiin giraafaayitii dha
Kaatodiin istilii dha Walnyaatiinsa
Na+ (l)+e- → Na(l) 2Cl- (l) →Cl2(g) + 2e- Walnyaatiinsa waliigala
2N aCl(s) Baasuu elektiroolisiiss
Haaluma kan sodiyemii armaan olitiin qophi ‘K’ ibsi. Walnyaatiinsa kaatodii, anoodii fi kan walii galaa barreessi.
1.15. Faayidalee Na fi K
Kompaawundoota Na fi K barbaachisoo ta’aan oomishuuf.
Fkn : NaOH,KOH, NaCl,KNO3, K2So4,NaH, Na2O2, Na2O, KH, KKf
Oomishaa qalamaa, dawaa , shittoo
Laaqaa potaasiyeem fi soodiyeemii oomishuuf
Potaasiyeemiin soodiyeemii bakka bu’uun tajaajila.
Soodiyeemiin laaphisii fi gommaa oomishuuf fayyada.
Laaqni Na fi K termoometira tempireecharaa olaanaa safaran omishuuf tajaajila.
1.2 Sibilota Alkalayin Dachee Keemistirii Maginisiyeemii fi Kalsiyeemii
Mg fi Ca’n miseensota elementoota garee II A sibiloota alkaalaayinii dachee jedhamanitii
1.2.1. Caasaa elektiroonawaa
12Mg =1S22S22P63S2 ykn Mg= [Ne] 3S2
20Ca=1S22S22P63S2 3P6 4S2 ykn Ca= [Ar] 4S2
Lamanu kaataayonota chaarjii 2+ qabu uumu. Kanaafu Lakk. Oksideeshinii isaanii +2 dha.
1.2.2 Amaloota Waliigalaa
Elementii Mg Ca
Raadiyeesii atoomawaa(nm) 0.16 0.20
Raadiyeesii ayoonawaa(nm) 0.072 1.100
Elektiroo negaativiitii 1.2 1
Annisaa ayooneessuu jalqabaa (kJ/mol) 738 590
Annisaa ayooneessuu 2ffaa (kJ/mol) 1451 1154
Qabxii baqinaa(oC) 649 839
Qabxii danfinaa(oC) 1107 1484
Rukkina(g/cm3) 1.74 1.54
Elementootni kun elektirooposativii waan ta’aani f kaataayonota chaarji +2(divalent ion) uumu.
Mg → Mg2+ +2e- Ca →Ca2+ +2e-
Si’aawoo waan ta’aani f wantoota adda addaa wali n walnyaatiinsa ni gaggeessu.
Mg(s) + 2H2O(g) → Mg(OH)2 + H2(g)
Kalsiyeemiin bishaan qabbana’aa wali n walnyaata Ca +2H2O(l) → Ca(OH)2 +H2
Oksijinii waliin oksaayidii uumu. 2Mg +O2 → 2MgO
Mg’n naayitiroojinii wali n naayitiraayidii uuma 3Mg +N2 → Mg3N2
Haayidiroojinii waliin haayidiraayidii kennu Mg +H2 → Mg H2
Ca +H2 → Ca H2
Asiidota cal aba’oo wali n gaari H2 uumu. Mg + H2SO4 → MgSO4 +H2
Ca+ 2HCl → CaCl2
Mg + CO2 → MgO +C
5Ca + 2CO2 → 4CaO +CaC2
1.2.3 Argama fi addaaan baasuu
Argama :- Argamni Mg dachee keessatti sadarkaa 5ffaa dha sibilootni kun bishaan hin aragamanu. Kompaawundota keessatti qofa argamu.
Albudoonii Mg fi Ca beekamoon
Mg CO3= Maaginesaayitii CaCO3, MgCO3 =Dolomaayitii
MgSO4,7H2O =Ipsomaayitii CaCO3 = Dhagaa ofii MgCl2,KCl,H2O =Kaarnalaayitii CaSO4.2H2O = Gipsamii Ca3(PO4) 2 =Dhagaa fosfeetii CaMg3(SiO3)4=Asbeestosii Addaan baasuu
Mg fi Ca adeemsa adda addaatiin kompaawundota isaanii keessa addaan baasuun ni danda’ama.
MgCl2 baqsuu fi humna elekitikaa keessa dabarsuu
2→ Mg +2Cl
Walnaatiinsa kaatodii Mg 2+ +2e- → Mg
Walnyaatiinsa waliigalaa Mg Cl2 → Mg +Cl2
MgO +C → Mg + CO
MgCl2 + CaC2 → Mg +CaCl2 +2C
Hojii piroojektii – adeemsa addaan baasuu Ca kitaabota wabii eerga dubbiste booda dareef gabaasa dhiheesii.
1.2.4 Kompaawundoota magnisiyeemii fi kalsiyeemii barbaachisoo tokko tokko
1. Oksaayidotni Mg fi Ca haala armaan gadiitiin qopha’uu ni danda’u
Walnyaatiinsa oksijinii waliin 2Mg +O2 →2MgO
Kaarboonetoota isaanii ho’isuun diiguu
→ MgO +CO2
Ca CO3 → CaO +CO2
Haayidiroksaayidota ho’isuun diiguu Mg(OH)2→ MgO +H2O
Ca(OH)2→ CaO +H2O
Amaloota Oksaayidota idilee
Jajjaboo ,kiristaalawaa, ayoonawoo adii dha
anni saa uumamiinsa olaanaa waan qabuuf sukka’oo dha
Annisaa laatisii olaanaa qabu.
Qabxii dandinaa fi baqinaa olaanaa qabu.
Haayidiroksaayidota Qophii –walnyaatiinsa oksaayidota idilee fi bishaanii CaO + H2O → Ca(OH)2
Mg(OH)2 fi Ca(OH) 2’n bishaan keessatti ni bulbulamu
Bulbulii Ca(OH) 2 alkaalii laafaa dha. Bishaan Laayinii jedhame waamama.
Haayidiroksaayidotni kun CO2 waliin kaarbooneetii uumu Mg(OH)2 +CO2 → MgCO3 + H2O
CaCO3 yoo bishaan keessatti bulbulame CO2(g) xuxuun Ca(HCO3)2
Qophii – Mg fi Ca haloojinota waliin halaajidota uumu Fkn Mg + Br2 → MgBr 2
Ca +Cl2 → CaCl2
Amaloota Haayidrayidota Mg fi Ca
Yeroo hedduu, bishaan qabeessa ta’ani argamu
Fkn CaCl2 bishaaniif jaalala cima qaba. Kanaafuu akka goggogsitutti tajaajila.
Qophii fi amaloota haayidiraayidoota Mg fi Ca irratti gabaasa qopheessuun dareef dhiyeessi.
1.2.5 .Faayidaalee Sibiilota Alkalayin Dachee
Laaqota ulfaatina salphaa qaban qopheessuuf Mg (OH)2 ruqoolee qulqulleessituu ilkaanii “tooth paste” ta’a
CaO, Ca(OH)2 fi CaCO3 asiidummaa biyyee hin baabseessuuf.
Kompaawundota barbaachisoo ta’an kan akka Mg(OH)2, CaO, Ca(OH)2,MgCl2,CaC2
,Ca(NO3)2,CaSO4,2H2O fi kkfoomishuuf.
Aluminiyeemi n elementoota garee III A keessaa isa tokko Baay’inaan elementi sadarkaa 3ffaa irratti argamuu dha. Elementoota garee isaa wajjin walitti dhufeenya fi adda addummaa qaba.
13Al = 1S22S22P63S23P1 Al → Al3+ +3e-
Lakk. elektirooni vaalanti isaa 3. Kanaafuu chaarji +3 qabaata Baay’inaan elementoota garee isaa keessaa 1ffaa dha.
1.3.1Amaloota Fiizikaalaa AluminiyeemiiHaalluu qalama adii birrummaa qaba.Sibiila salphaa rukkina 2.7g/cm3 qabu dhaQabxii baqinaa 6590CQabxii danfinaa2,327g’cm3Aluminiyeemiin ho’aa fi elektiriikii ni dabarsa.
Amaloota Keemikaala Aluminiyeemii
Oksijinii wajjin walnyachuun Al2O3 uuma. 4Al +3O2 → 2Al2O3 + ho’a
Bishaan waliin walnyaata
2Al +6H2O → 2Al(OH)3+3H2
Asiidii waliin Ashaboo fi H2 uuma. Fkn 2Al + 6HCl → 2AlCl3 +3H2
2Al +3H2SO4 → Al2(SO4)3+3H2
Oksaayidota Sibiilota waliin walnyaata.
Fkn 8Al+3Fe3O4 → 9Fe + 4Al2O3 + ho’a 2Al + Cr2O3 → 2Cr + Al2O3
Haloojinota waliin ashaboo uuma.
Fkn 2Al + 3Cl2 → 2AlCl3
1.3.2 Argama fi addaan baasuu Aluminiyeemii Al
Aluminiyeemiin bilisaan hin argamu. Elementoota biroo waliin kompaawundota uumuun argama.
Booksaayitii (Al2O3. H2O)
Suphee (kaawoliinii Al2 Si2Of2H2O
Limerii (makaa Al2O3 fi Fe3O4)
Addan baasuu Aluminiyeemii
Maddoota isaa keessaa Aluminiyeemiin haaloota armaan gadiin addaan baasuu ni danda’ama.
Fkn AlCl3 +Na → Al+ 3NaCl
Omishni industirii Aluminiyeemii adeemsa armaan gadiin gaggeeffama.
Aluminiyeemii Booksaayitii keessa jiru makoota isaa irraa adda baasuu dha. Kun kan ta’u
NaOH cunqoo dhaan ukkaamsaniiti.
Al2O3(s) + 2NaOH(l) + 3H2O(g) → 2NaAl(OH)4(s)
Aluminiyeem oksaayiditti makamuun kan argamu NaOH keessatti hin bulbulaman. Kanaafuu dhimbiibbaan adda baha?
NaAl(OH)4 dhimbiibamee adda bahe gara Al(OH)3(s) fi NaOH(aq) tti jijjiirama. NaAl(OH)4 (aq) → Al(OH)3(s) + NaOH(aq)
Aluminiyeem haayidirooksaayidii irraa Al2O3 argachuu. Kunis kan ta’u dhimbiibuun
eerga addaan baasani booda ho’isuu dhaani.
Adeemsa elektiroolaayisiitiin Al2O3 irra Aluminiyeemii qulqulluu argachuun ni danda’ama.
𝐵𝑎𝑎𝑞𝑠𝑢𝑢 3+ 2-
2 3 → Al + 6O
Kaatodii 4Al3+ +12e → 4Al Anoodii 6O2- → 3O2+12e- Walnyaatiinsa waliigalaa
2Al2O3 → 4Al +3O2
1.3.3.Kompaawundoota oksijinii, Haayidiroojinii fi haloojinoota wajjin.Aluminium Oksaayidii (Al2O3)
Jabaa bifa adii qabu dha.
Tempireecharaa 200 0C irratti baqa
Aluminiyeemiin Oksijiniin yemmuu gubatu uumama. 4Al +3O2 → 2Al2O3
Al(OH)3 ho’isuudhaan qophaa’u ni danda’a 2Al(OH)3 → Al2O3 +3H2O
Uumaman akka booksaayitii (Al2O3.XH2O) ykn akka korandamitti (Al2O3) argama.
Asiidotaa fi beezota waliin waan walnyaatuf amala oksaayidii asiidawoo beezawoo qaba
Fkn Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 +3H2O Beezii waliin
Fkn Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 +H2O
Aluminiyeem Haayidiraayidii (AlH3) Aluminiyeemiin Haayidiroojinii waliin aluminiyeem haayidiraayidii uuma.
2Al+3H2 → 2AlH3
Aluminiyeemii ho’e kal atiin haloojinii gogaa wajjin walnyaachisuun uumamu.
Fkn 2Al(s) +3Cl2(g) → 2AlCl3(s)
Karaa biraatiin halaayidotni Aluminiyeemii walnyaatinsa Aluminiyeemii fi Halaayidoota Haayidiroojinii gogaa wajji n gaggeeffamanis uumamu ni danda’u.
Fkn 2Al(s) + 6HBr(g) → 2AlBr3 +3H2(g)
Amaloota halaayidoota Aluminiyeemii.
Haalayidota Aluminiyeemii keessaa ayoonawaan AlF3 dha. Halaayidootni Aluminiyeemii biroo AlCl3,AlBr3,AlI3 koovalanti dha.
AlF3 – Bishaan keessatti nii bulbulama.
Qabxiin danfinaa 12900C qaba
AlCl3 jajjaboo hurka dha. Qabxiin sablimeeshinii isaa 2000C dha.
AlCl3 yeroo sablimeeffamu hurki uumamu daayimaroota (Al2Cl6) qaba.
Tempireechara olaanaa irratti AlCl3 akka monomeeriitti, AlCl3 jiraata.
AlCl3 akka Liwus asiiditti tajaajila
Aluminiyeemi n dabarsoo ho’aa fi elektiriikaa gaarii dha.kanaafuu meehsaalee nyaatni ittin bilchaatu fi shiboo elektiriikaa qopheessuuf ni gargaara.
Aluminiyeemiin sibiila salphaa waan ta’eef,
qaamota Xiyyaraa ,Saatelaayitoota,konkolaatoota adda addaa tolchuuf ni gargaara.
Sibiilota biroo kan akka Fe,Cr fi Mn oksaayidota isaanii keessaa adda baasuuf ni tajaajila.
Aluminiyeemiin laaqota adda addaa kan akka duraaluminii(Al,Cu,Mg) magnaliyeem (Al,Mg) qopheessuuf oola.
KOMPAAWUNDOOTA INORGAANIKII BARBAACHISOO TOKKO TOKKO
Boqonnaa tokkoffaa keessatti waa’ee elementoota bu’uuraa filatamoo tokko tokko ilaalle jirra.Boqonnaa kana keessatti ammo kompaawundota in-orgaanikii barbaachisoo ta’an kan ilallu ta’a.As keessatti amala fi zikaalaa, amala keemikaalaa , mala addaan baasuu fi argama isaanii gadii fageenyaan baranna.
Erga boqonnaa kana xumuuranii booda barattootni
Adeemsa naaytrikii asiidiin, salfarikii asiidiin fi ammoniyaan induustrii keessatti ittin qophaa’uun ni eeru.
Allotirooppota kaarbonii, salfarii fi foosfarasi adda ni baasu,
Argama elementoota inorgaanikii barbaachisoo ta’ani ni tarreessu.
Amaloota fi faayidaalee kompaawundoota haaloojinootaa, foosfarasii,salfari,oksijiinii,naaytroojinii, silikeenii fi kaarboonii ni addeessu.
Amaloota fi faayidaalee giraafaayitii fi diyamendii ni ibsu
Amaloota waliigalaa elementota maatii kaarbonii ni tarreessu,
2.1. Keemistirii elementoota maatii Kaarboon
Elementtootni garee IVA, maatiin Kaarbooni jedhamu. Isaanis kaarboon Silikeenii, Jermaniyeemii,Tiinii fi Liidii dha.kaarbooni sibilaala yommuu ta’u, Silikeeniin fiJermaniyeemii garii sibilaloota, Liidiin fi Tiiniin ammo sibilota .
Maatiin Carboon Sheelii xumuraa irraa raabsa elektiroonii ns2np2 qabu.
Lakk Elemeenitii Bakka bu’ee Lakkoofsa atoomawaa Raabsaa eleekitroon
1 kaarboon C 6 [He] 2s2p2
2 Silikeenii Si 14 [Ne] 3s23p2
3 Jermaniyeemii Ge 32 [Ar] 3d104s24p2
4 Tiinii Sn 50 [Kr] 4d105s25p2
5 Liidii Pb 82 [Xe] 4f145d106s26p2
Amaloota waligalaa maatii Kaarboon
Qabxiin danfinaa fi baqinaa garee kanaa kan maatii booronii ni caalaa. Garuu garee kana keessaa gubbaa gadi qabxi n baqinaa fi danfinaa hir’ataa adeema.sababin isaa humni walharkisaa molakiyuulii gidduu jiru waan hir’ata adeemuuf. Elektiroonegitivitii fi Anni san ayoonessuu jalqabaa (KJ/mol) Kaarbooni gara Li dii hira’ataa adeema.Haata’u malee jijjiramni seer- malee (irregularities) ni mul’ata.
Raadiyesii atoomii Kaarboonii gara Liidii ni dabala sababin isaa gubbaa gadi yemmuu deemuu lakkoofsi sheelii haaraan dabalaa waan adeemuuf.
Amala wali galaa elementoota garee kanaa gabatee armaan gadii irraa hubachuun ni danda’ama.
Elementii C Si Ge Sn Pb
Raadiyeesii Atoomawaa (Picm) 76 111 120 139 146
Elektiroo negetivitii 2.55 1.9 1.8 1.8 1.8
Qabxii baqinaa /(K) 4373 1693 1218 505 600
Qabxii danfinaa (k) – 3550 3123 2896 2024
Rakkina /gcm-3 3.5 diyemand 2.0 giraafaaytii 2.34 5.32 7.26 11.3
Lakkoofsa okisideeshiinii +2,+4 +2,+4 +2,+4 +2,+4 +2,+4
2.1.. Kaarboonii fi Silikeenii
2.1.2. Amaloota walii gala Kaarboonii fi Silkeenii
Silikeeniin cimaa fi keeristaala calaqqisaa dha.Teempirecharaa dareetti dandeettiin dabarsuu elektirikaa isaa gadaanaa dha. Garuu teempireecharaa baayyee olaanaa irratti dabarsoo elektirikaa garii dha. Walumaagalatti silikeenii gariin dabarsoo elektirikaa fi gariin sibila ti.
Karbooni n elementoota garee isaa keessaa sibilaala yommuu ta’uu bifa al otiroppii garagaraan argama.
Allotiroppii jechuun elementiin tokkoo haala murtawaa fizikaalaa keessatti faalkaa isaa osoo hin jijjirin bifoota adda addaan argamuu dha.Kaarbooniin bifa allotiroppota afuriin argama.Isaanis allotiroppii kiristaalawoo, (diyaamandii fi giraafaayiti),Amoorfasii (Boocaa sirrii hin qabne): kookii, kaarboon gurrachaa fi chaarkolii dha.
4ffaan ammoo bakministerfulerinii (Buckeyballs) carboon nam -tolchee yeroo baayyee C60
argama. Kan umamuu atimoosfeerii heeliyemmiin ulee giraafaayiti (graphite rod) hanga
hurkuutti ho’isuun .C60 miseensa maatii koomppawundii fulerensii (fullerenes) jedhamuu ti.miseensii maatii kanaa kaneen biroo C32, C44, C50, C58,fi C70 dha. Allootirooppiin kun kubbaa kan fakkaatuu dha caasaa isaa akka armaan gaditti
Diyaamandii Diyaamandiin bifa hawwataa kan qabu fi wantoota ciminaan beekaman keessa isa tokkoo dha.Alootiroppi kaarboon keessaa diyaamandiin baayyee qulqulluu dha.
faayidaalee isaa;Faayaa, muruu(kuutuuf) fi daakuuf hoo’a niqabata.
Giraafaayitiin gurrachaa, lallaafaa fi mucucaataa dha.akka sibiloota elekitroonotaa bilisa ta’an waan qabuuf dabarsoo elektirikaa fi hoo’aa ti.
Faayidaan isaa: qubeessa, giriisii, elekitroodii dhagaa baatirii fi mootoroota keessati.
Garagaarumaa diyaamandii fi giraafaayitii
Wantoota ciminaan beekaman dha Giraafaayitiin lallaafaa dha
mit-dabarsoo ho’aa fi elektirikaati dabarsoo elektirikaa gaarii dha
ifa kan of-keessa dabarsu gurraachaa fi mit-dabarsoo ifaa ti
rukkinaa 3.5 g/cm3 rukkinaa 2.5 g/cm3
caasaa kiriistaalaa Teetirahediraalii qaba caasaa kiriistaalaa Okteehediraalii qaba
Qilleensaa keessatti 900oC yemmuu gubaatu CO2 kenna. Qilleensaa keessatti700- 800oC yemmuu gubaatu CO2 kenna.
2.1.3. Argamaa fi Addaan baasuu Kaarboonii fi silikeenii
Teempireechara dareetti kaarbooniin faalkaa jajjaboo bifa sadiin argama.Isaanis diyaamandi,giraafaayitii fi fulerensii dha.Gaasiin ammo qilleensa naannoo keessatti bifa kompawuundii kaarboon daayoosayidii fi kaarboon monooksaayidii argama. Karaa biro ammoo kompaawundiin kaarboonii kan akka CaCO3, baayikaarbooneetotaa fi kaarbayidoota sibilotaa keessattis ni argama.
Argama fi addaa Silikeenii
Silikeniin hedduminaan dirra lafaa keessatti elementota hunda keessaa oksiijiniitti anuun sadarkaa lammaffaa irratti argama. Silikenii Walabaa ta’e bifa elementiin hin argamu. Yeroo baayyee bifa oksaayidiin argama, oksaayidiin isaa baayyee beekamoon silikaa (SiO2) dha. albuudota silikeetii kan akka Spodumene LiAl(SiO3)2 ,beeriiylii Be3Al2( SiO3)6 fi “ micas “(KAlSi3O8) keessatis ni argama. silikaa (SiO2) oksaayidii Silikenii baayyee suka’oo ta’e dha.
Addaa baasuu Silikeenii
Elemeentiin Si kan argamu SiO2 (Cirrachaa) ykn kuwartizii 3000oC kookiin farnaasii elekitrikaa keessatti ho’isuuni.
SiO2(s) + 2C à Si(l) + 2CO(g)
Cirrachaa kookii kaarboonii
Silikeeniin haala kanan qophaa’e qulqullinni isaa 98% dha. Elemeentiin silikeenii Induustrii koompitaraatiif oolu kana caalaa qulqullaa’uu qaba.kanaaf dabalataan adeemsaa armaan gadii keessaa darbuu qaba.
Si(s) + 2Cl2(g) à SiCl4(l)
SiCl4(l) + 2Mg(s) à Si(l) + 2MgCl2(s) 3. SiCl4(l) + 2H2(g) à Si(l) + 4HCl(g)
2.1.4. Kompaaundoota Oksijiinii, hayidiiroojinii fi halojioota wajjin Kaarbaayidoota
Tempeerechara dareetti kaarbooniin sukawaa dha.garuu tempreechara olaanaa irratti eleementoota elekitooronaagetivii gadi aana qaban wajjiin walnyaatinsa gaaggeessun kompaawundii kaarbayidii jedhaman uuma.kaarbaayidi jechuun kompawundii karbooniin sibiilota waliin uumu.Yemmuu kaarbooniin elementoota hammi fi eleektroo nagativiin isaanii kan isaa wajjiin walgitaan waliin walnyaatinsaa gaggeessu kompaawundii kaarbaaydoota kovalantii kenna. fakkeenya
kaarbooni fi sibila si’awoo yemmuu walnyaatan karbaayidii ayoonawa kennu. Isaniis CaC2 fi BeC2 dha. fakkeenya
karbaayidotni ayoonii C4-qaban.yemmu bishaan wajjin wal-nyaatan miiteenii kennu.
karbaayidotni ayoonii C22- qaban ammoo yeroo bishaan wajjin walnyaatu asetalaayinii
Kaarbonii tempireechera olaanaa irratti oksijinii waliin oksideeshiinii gaggeessun karbondayoksaayidii fi karbonmonoksaayidii kennu:
2C(s) + O2(g) ® 2CO(g) (oksijiin muurasaa) C(s) + O2(g) ® CO2(g) ( oksijiin irra darbaa) Amala fizikaalaa CO fi CO2
Karbonmonoksaayidii gaasii summawaa, haalluu dhabbeesa fi foolii dhabbeessa dha. Qabxiin danfinaa –
Faayidaa CO oksaaydii ayiiraan gara sibila ayiiranittii ni rideeksaa. Fe2O3(s) + 3CO(g) ® 2Fe(l) + 3CO2(g)
Yommuu haaydroojiinii wajjiin walnyaatu CH3OH kenna.
Karbondaayoksaayidii halluu fi foolii dhabeessa,asidaawaa dha. Jajjabboon isaa _78.5oC gara gaasiitti sablimeeffama. Qilleensaa naannoo rukkinaan harkaa 1.5 ni caala. Karbondaayoksaayidiin bishaan keessatti ni bulbulama.
Kanaafu Karbondaayoksaayidiin bishaan galanaa keessa harkaa 60% n Karbondaayoksaayidii atmoosfeerii keessa jiru ni caalaa.
Faayidaa Kaarbondayoksaayidiin abidda dhaamstuu, akka qorrisiistuutti CO2 gogaa,Dhugaati lallaafaa litira tokkoo keessatti CO2 litrii 3.5 tu bulbulama.
Kaarboon yemmuu haalayidoota waliin walnyaatinsa gaggeessu tetiraahaalaayidoota (MX4 ) umaama .
Tetiraahaalaayidootni bishaan wajjin haaydiroolaysiisi hingaggeessan. sababin isaa kaarbooniin waan orbitaalaa d hin qabneef.
Teetiraahaalaayidoota: CF4, CCl4, CBr4 fi CI4
Haaydiraaydoota Kaarboonii fi Silikeenii; Kompaawundoota Kaarbooniin fi Silikeeniin haaydiroojinii wajji n uumu danda’an kitaabolee wabii dabbisuun dareef gabaasi.
Silikeeniin wal-nyaatinsa keessatti hirmaachuu irratti dadhabaa haa ta’u malee tempireechera olaanaa irratti wal-nyaatinsa ni geggeessa.
Si(s) + O2(g) 1000C SiO2(s)
Silikendayoksaayidiin(SiO2)yeroo baayyee silikaa jedhamee beekama. silikeniin oksijinii waliin
hidhoo kovalentii cimaa Si-O uuma. Silikeniin kompaawundii walxaxxaa netiiworkii ta,ee (SiO4)4- uumu danda’a.Isaan kanaa keessatti silikeniin tokkoo atoomota oksijinii afuritti hidhamti. Caasaa isaa akka armaan gadii ilaaluun ni danda’ama.
Silikendayoksaayidiin wal-naatinsa irratti baayyee dadhabaa yommuu ta’u haydiroofiloorik asidii ykn baqa soodiyeem kilooraayidii waliin garuu wal-nyaatinsa gaggeessa.
SiO2(s) + 6HF(aq) à H2SiF6(aq) + 2H2O(l) SiO2(s) + 2NaOH(aq) à Na2SiO3(s) + H2O(g)
Silikeeniin yommu haalojinoota wajjiin walnyaatisa gageessan koompawundii SiX4 ummu. Bakka bu’een X=(F,Cl, Br, I)
Si(s) + 2Cl2(g) → SiCl4(l) Si(s) + 2F2(g) à SiF4(g) Si(s) + 2Br2 (l) → SiBr4 (l)
Teempireechara dareetti SiF4(g) gaasii haalluu dhabbeesa
SiCl4fi SiBr4 dhangaala’oo haalluu dhaabbeessa yommuu ta’aan SiI4 garuukiristaalaa haalluu dhaabbeesaa dha. SiF4 fi SiCl4 guutummaan guutuutti haaydroolaysiisi kan gaggeesaan yommuu ta’an SiBr4 garuu gaariin haaydroolaysiisi gaggeesaa. Yeroo Silikeni tetra kiloorayidiin bishaan wajjiin walnyaatinsa geeggeessu silisik asidii, Si(OH)4,umamaa.
SiCl4(g) + 4H2O(l) à Si(OH)4(aq) + 4HCl(aq)
2.1.5. Faayidaa Kaarboonii fi silikeenii;
Faayidaalee silikeenii fi Kaarboonii kitaabolee wabii dabbisuun dareef dhiyeessi.
3. Keemistirii Tiinii fi Liidii
Tiinii fi liidiin elementoota garee IV A dha. Raabsaa elektiroonii sheelii alaa ns2 np2 qabu. Lakkoofsa oksideeshinii isaanii +4 qabu.
Pb akka olaantummaatti lakkoofsa oksideeshinii +2 qaba.
Element Sn Pb
Raadiyeesii atoomawaa (Ao) 1.4 1.46
Raadiyeesii ayoonawaa (Ao) 0.71 0.84
Qabxii baqinaa (oC) 231.9 227.4
Qabxii danfinaa(oC) 2337 1750
Annisaa ayooneessa jalqabaa(kj/mol) 707 715
Elektiroonegativiitii 1.8 1.8
Argamaa fi adda baasuu tiinii fi liidii
Tiiniin oorii kaasiteraayitii ykn dhagaa tiinii (SnO2) jehamu keessatti argama.
Addaan baasuu Sn
Kaasiteraayitiin (SnO2) wantoota adda addaa kan akka oksaayidota sibiilaa, oksaayidotaSibilaalotaa irraa waadduun ykn asiidoota tii fayyadamuun eerga qulqulla’e booda walnyaatiinsa armaan gaadiitiin adda baha.
SnO2(s) + 2Cl(s) → Sn +2CO(g)
Li dii fi oorota beekamoo kan ta’an
Isaan kana keessaa olaantummaan kan oomisha pb ‘f oolu.
Liidii adda Baasuu
Madda Pb waaduun oksaayidii Pb(II) argachuu
Fkn 2PbS(s) + 3O2(g) → 2PbO(s) + 2SO2(g) ∆H= 710.4kJ
PbO(s) argame makaa cilee fi daakuu ayireenii bilaast faarnesii keessatti yoo gubate Pb nu laata.
PbO(s) + C(s) → Pb(s) + CO(g), ∆H= 106.8kJ PbO(s) + C(g) → Pb(s) + CO2(g), ∆H= 65.7kJ
Liidiin haala kanaan argamu Cu,Sb,As fi Bi fi kkf walmakee argama. Makaa kan irraa Pb adda
baasuuf baqsuun makaa irraa oksaayidoota Sb, As fi Bi uumne olkaasuun pb gad dabarfannaa.
Li diin baqee darbe keessaa ammas makaa Ag fi Au qabaachuu waan danda’uuf adeemsa paarkitti fayyadamuun barbaachisaa ta’a.
Gaaffii Adeemsa parkii fi Adeemsa Beetii irratti kitaabolee wabii dubbisuun gabaasa isaa garee fi dhiyeesii
Kompaawundota oksijinii, haayidiroojinii fi haloojinoota wajjin.
Tiiniin oksaayidota lama qaba isaaniis tiinii II fi tiiniii IV oksaayidii dha
SnO- staanes oksaayidiin gurraaacha ykn magariisa ta’e mul’ata.
Kompaawundoota Sn+2, kaarbooneeti alkaali ni n walnyaachisuun argamu ni danda’a. Sn2+ + CO32- → SnO(s) + CO2 ti n oksaaleeti bakka qil eensi hin jirreetti ho’isuun ni argama.
Sn[C2O4] → SnO(s) + CO2+CO
SnO2 –Istaanik Oksayidiin qilleensa keessatti Sn gubuun argama. Sn(s) + O2(g) → SnO2(S)
SnO2 – Dilalla keessatti adii
Ho’a keessatti keel oo dha.
Oksaayidota isaa keessatti lakkoofsi oksideeshinii liidii Pb2+ fi Pb4+ ta’a
PbO- Liidii qilleensa keessatti gubuun argama.
2Pb + O2 → 2PbO halluun isaa keelloo dha,daakuu dhas.
PbO2 – daakuu halluu chokolaataa fakkaatu qabuu dha.
– Oksiideessituu cimaa dha
liidii diimaa (Pb3O4) naayitiriik asiidii waliin walnyaachisuu Pb3O4 + 4HNO3 → PbO2 + 2Pb(NO3)2 +2H2O
Walnyaatiinsa PbO fi NaClO
PbO + NaClO → PbO2 +NaCl
Baatiriwwan liidii hammatan hunda keessatti PbO2 ni argama.
Pb3O4 Liidii diimaa Pb3O4
PbO Tempireechara 400oC hanga 500oC ta’en ta’en eeggannoon qil eensa keessatti ho’isuun aragama.
Asiidoota waliin walnyaata.
Pb3O4 + 8HCl → 3PbCl2 + 4H2O +Cl2 2Pb3O4 + 6H2SO4 → 6PbSO4 + 6H2O + O2
Gaaffii – Haayidiraayidotaa fi Halaayidoota Sn fi Pb irratti kitaabolee wabii dubbisuun gabaasa isaa dareef dhiyeessi.
Faayidalee Sn fi Pb
Ti niin uwwisa ittistuu istilii ta’ee fayyada.
Tiiniin laaqota oomishuuf tajaajila Fkn:- – Biroonzii (cu,Sn)
Sibiila qawwee (Cu, Zn,Sn)
Sibiila Biritaaniyaa (Sn,Pb, Cu)
Ujummoo bishaanii fi uwwisa keebiloota
Raasasa liidii (lead shot) oomishuuf
Laaqota liidii adda addaa keessatti
Fkn Sibiila taayipii (Pb, Sb,Sn)
Kompaawundoota liidii kan akka PbSO4, Pb(NO3)2
Qalama (pigments) oomishuuf
Baatirii liidii oomishuuf
2.2 NAYTIROOJINII fi FOOSFARASII
2.2.1.Amaloota Walii galaa Naayitroojiin fi foosfarasii
Naayitirojiniin elemeentii atoom-lamee(N2), gaazii halluu dhabeessa, foolii dhabeessa fi dhandhama dhabeessaa dha. Qabxiin danfinaa fi qabxiin baqinaa isaa walduraa duubaan 77K fi 63K dha
Teempireechara dareetti naayitirooji ni n oksiji ni irraa baay’ee suka’aa dha. Kanaaf wantoonni qilleensa keessatti yoo ho’ifaman naayitirooji ni irra oksiji ni wajjin caalaatti walnyaatu.Naaytirooji ni n hidhoo sadee uumu waan danda’uf tempireecharaa dareeti suka’aa dha.
Amaloota waligalaa foosfeerasi
Foosfeerasiin jajjoobo adii bifa gagaa faakkatu qaba.qabxiin baqinaa fi danfinaa isaa duraa dubaan 44.1oC fi 287oC dha.
Foosfarasiin allootirooppii beekamoo lama qaba.
Bishaan keessatti hinbulbulamu.
qil eensa keessatti si’aayinaan oksi ji ni wajji n walnyaachuun balaa ibiddaa uumuu waan danda’uuf , bishaan keessatti tursiifamuu qaba.
Baayyee summawaa dha.
CS2 keessatti ni bulbulama.
Foosfarsi adii irraa si’aayina gadaanaa qaba
Akka foosfarasii adiitti sumawaa miti
Bakka qilleensi hin jireetti 565k irratti ni sablimeeffama
CS2 keessati hinbulbulamu.
2.2.2.Argama fi addaan baasuu Nayitiroojinii fi Fosifarasii
Argamaa Naayitroojinii fi Foosfarasii
qilleensi 4/5ffaan hangaan naayitiroojinii dha. Kanaafuu qilleensi atimoosfeera madda naayitiroojinii gaarii dha. Naayitroojiiniin biqiloota fi beeladoota keessati ni argama.
Naayitirojiniin dachee keessatti kompaawundoota naayitirojinii qaban keessatti argama. Isaanis ( KNO3), ( NaNO3 ) fi Ashaboolee amooniyeemii dha.
Foosfarasiin yeroo baayyee bifa kompaawundoota fosfeetii jedhamaniittiin argama.Madda foosfeetii beekama kan ta’e kaalsiyeem foosfeetii Ca3(PO3)2 dha.
Naayitroojiniin laabraatoorii keessatti maloota armaan gadii keessaa tokkon qophaa’u danda’a..
I. Diigamuu amooniyeem naaytiraayitii
Naaytirooji ni baayyee qulqul uun laaboraatoori keessatti amooniyeem naaytiraayiti ho’isuun qophaa’a.
NH3NO2(s) → N2 + 2H2O.
2NH3 + 3CuO→ N2 +3H2 O + 3Cu
Adeemsa firaakshinaalaa distileeshinii
Adeemsi kun qilleensa keessaa kanneen akka CO2 fi O2 dhabamsiisuun N2 qopheessuuf gargaara(qabxiin danfinaa dhangaalaa’oo Naayitroji n fi dhangaalaa’oo Oksiji n duraa dubaan – 196oC fi-183oC dha.)
III.Addaan baasuu Foosfarasii
Foosfeerasi n Oori isaa irraa adda baasuun kan danda’amu teemprechara olaana irratti kaalishiyemmii foosfeetii kaarbooniin rideeksuun yemmuu ta’u walnyaatinsa kana keessatti jirachuun silkaa (SiO2) baay’ee barbaachisaa dha.
Kompaawundoota Hayidiroojinii fi Oksijinii wajjiin
Naaytirojiiniin lakkoofsa oksideeshinii pozitivaa +1 hanga +5 qaba.
Kompawundi Lakk okideeshiin ∆Hof (kJ/mol)
N2O(g) 1 82.05
NO(g) 2 92.25
NO2(g) 4 33.18
N2O3(g) 3 83.83
N2O4(g) 4 9.16
N2O5(g) 5 11.35
Naaytires oksaayidii (N2O )
Gaazii halluu dhabeessa fi foolii bareeda qabu dha Caasaan Luus N2O
:N = N= O: « :N = N – O:
Qophii Naaytires oksaayidii (N2O)
Naaytires oksaayidii (N2O) kan qophaa’uu diigamuu ashaaboo amooniyeem naaytiraayiti irraa dha.
NH4NO3(s) N2O(g) + H2O(g)
(II) Naaytirik oksaayidii (NO)
Naaytirikoksaayidiin gaazii halluu dhabeessaa fi paaraa maaginataawaa dha Caasaa liiwusi isaa barreesi.
Laaboraatoori keessatti, naaytirik oksaayidiin kan qophaa’u sibila koopperii naaytirik asiidii cal abbaa’aan waalnyaachisuun.
3Cu(s) + 4HNO3 (cal aa) → 3Cu(NO3)2(aq) +4H2O(l) +2NO(g)
(II) Naaytiroojiin daayoksaayidii (NO2)
Naaytiroojiin daayoksaayidii gaazii sumawaa fi haalluun isaa diimaa- daami ta’e dha
Caasaa liwusii Naaytiroojiin daayoksaayidii
Qophii Naaytiroojiin daayoksaayidii (NO2)
Yeroo naayitiriik oksaayidiin oksijiinii wajjin walnyaatu naayitiroojiin daayoksaayidiin ni uumama
Labraatorii keessati Naytireetota sibiilota tokko tokkoo ho’aan diigudhaan qophaa’a.
Karaa biroon ammoo sibila koopperi naaytirik asi dii cunqoo wali n walnyaachisuun qophaa’a. Cu(s) +4HNO3 (cuunqoo) → Cu(NO3)2(aq) + 2H2O(l) +2NO2(g)
(IV).Daaynaaytiroojiin tiraayoksaayidii (N2O3)
Daaynaaytirooji n tiraayoksaayidiin dhangala’aa cuquli sa.makaan NO fi NO 2 yeeroo dilal aa’u
Caasaa liiwus N2O3 barreessi.
(V) Daaynaaytiroojiin tetra oksaayidii (N2O4) gaazii haalluu dhaabeessa Faalkaa gaaziin molakiyulotni NO2 lama wal qabachuun N2O4 uumu.
Kaanaafuu molakiyulii NO2 teemprechaara gad aanaa irratti daayimariizii geggeessuun N 2O4
2NO2(g) → N2O4(g) ∆H = 57KJ
Caasaa liiwus daaynaaytiroojiin tetra oksaayidii (VI)Daaynaaytiroojiin pentaa-oksaayidii (N2O5) Daaynaatiroojiin pentaa oksaayidiin jajjaboo halluu dhabeessa dha.
Caasaa daaynaaytiroojiin pentaa-oksaayidii
Walnyaati nsa naayitiri k asi dii cal abbaa’aan foosferas peenta oksaayidii wajjin taasisuun N 2O5
Amooniyaan gaazi hal uu dhabeessaa fi fooli ajaa’aa qabu dha. Qabxiin danfinaa fi qabxiin qorrinaa isaa walduraa duubaan -33.35oc fi -77.7oc dha.
Amooniyaa warshaadhaaf adeemsa habari jedhamuun si’eessituu elementi Fe faayyaadamun qophaa’a.
Labraatorii keessaati amooniyaan ashaboolee amooniyeemii kiilorayidii sodiiyem haaydroksayidii wali n ho’isuun qophaa’a.
NH4Cl(s) +NaOH(aq) → NaCl(aq) + H2O + NH3(l)
Hayidraaziniin foormulaa N2H4 qaba. Hayidraazini n kan qophaa’uu ayoonii hayipookilooraayitii amooniyaan oksideessun.
Hayidraaziniin baayyee summawoo dha Hayidiraaziniin rideeksaa dha.
FKN:- N2H4+2I2 + 4OH- → N2+4H2O+ 4I-
Hayidiraaziniin oksijinii keessatti yommu gubatu anniisa olaanaa baasa
N2H4(l) + O2(g) N2(g) + 2 H2O(g) Ho = -666.6 kJ/mol N2H4
Oksii – Asiidota Naayitiroojinii
Wa’ee Naayitiras Asi dii ( HNO2) fi Ashaboolee Naayitiraayitii ( NO2–) faayidaa fi qophii isaanii kitaaba waabii dubbisuun dareef dhiheesa.
Naayitiriik Asiidii ( HNO3) fi Naayitireetii ( NO–3)
Naayitiri k Asi diin keemikaalota addunyaaf barbaachisaa ta’an keessaa isa tokko waan ta’eef baay’inaan Oomishama.
4 NH3(g) + 5 O2(g) 4 NO(g) + 6 H2O(g) 2 NO(g) + O2(g) 2 NO2(g) 3 NO2(g) + H2O(l) 2 HNO3(aq) + NO(g)
Faayidaan isaa inni guddaan xaa’oo naayitiroojini , amooniyeem naayitireeti Omishuudhaa fi Naayitiriik Asiidii gabaaf oolu adeemsa Ostiwaaldiin Oomishama.kuniis sadarkaa sadii keessa darbaa.
danda’a. kunis sababa isaa oksideessaa cimaa waan ta’eef.
Naayitiriik asiidiin asiidii cimaa dha. Siibiilota asiidota kan akka HCl keessatti hin bulbulamne bulbuluu ni
3Cu(s) + 4HNO3 (cal aa) → 3Cu(NO3)2 (aq) +4H2O (l) +2NO (g)
Cu(s) + 4HNO3 (cuunqoo) → Cu(NO3)2 (aq) + 2H2O (l) +2NO2 (g)
Waliigala sibiilotnii HNO3 cal abbaa’aa wali n NO kennu, HNO3 cuunqoo waliin immoo NO2
Foosfarasiin oksaayidoota beekamoo lama qaba.isaaniis tetraaFoosfaraas dekaa oksaayidii(P4O10) fi tetra foosfaraas heeksaa oksaayidii(P4O6) dha.oksaaydooni kannen kan argaman duraa dubaan foosfarasii adii qilleensaa oksijiin irra darbaa fi muraasa keessati gubuun.
Foosfarasii adiin yommuu oksijiinii darbaa keessatti gubatu, tetraaFoosfaraasii dekkaa oksaayidii arganan.
P4(s) + 5O2 (g) → P4O10 (g)
P4(s) + 3O2 (g) → P4O6 (g) (oksijiin muraasa).
Okaayidooni lameen amala asiidumma qabu.yommuu bishaan wajjin walnyaatinsa geggeessaan asiidii umuu.Tetraafoosfaraasii dekaa oksaayidii(P4O10) Bishaaniif jaalala cimaa qaba.yommuu bishaan wajjin walnyaatu foosfariik asiidii , H3PO4 uuma.
P4O10 (g) + 6H2O (ℓ)→ 4H3PO4(ℓ)
Lakkoofsota Oksideeshinii kompaawundoota foosfaresi fi Naayitrojinii Kompawundoon Foosfaresi fi Naayitrojini kompawundoota gara garaa ta’aniMuraasin isaan lakkoofsa oksideeshiin walfakkaatu qabu.lakkoofsi Oksideeshiin foosfarasii beekamoon 3 fi 5n dha.
Lakk oksideeshinii Kompawundii Naayitrojinii Kompawundii Foosfaresi
+3 HNO2 H3PO3
+5 HNO3 H3PO4
+5 NaNO3 Na3PO4
Haaydiraayidii foosfarasii baayyee barbaachisaa ta’e foosfiinii (PH3) dha.
Foosfiinii gaazi hal uu dhabeessaa fi baay’ee sumaawaa dha.foosfi ni qopheessuun kan danda’amu foosfarasii adii soodiyeem haaydrooksaaydii cunqoo wali n ho’isuun.
P(s) + NaOH(aq)+3H2O → 3NaH2PO2(aq)+ PH3(g)
Foosfiiniin rideeksaa cimaa dha. Yommuu gasiin kun qilleensa keessati gubaatu akka armaan gadiitti H3PO4 kenna.
PH3(g) +2O2(g) → H3PO4 (s)
2.2.4. Faayidaalee Kompaawundoota Foosfarasii
Faayidalee gurguuddoo kompaawundota foosfaraasii kitaabolee wabii dabbisuun dareef gabaasi.
2.3.Oksijiinii Fi Salfarii
2.3.1. Amaloota Walii galaa Oksijiinii fi Salfarii
😯 = [He] 2s2 2p4
Oksijiiniin gaasii halluu dhabeessa, foolii dhabeessaa fi dhandhama dhabeessa.
Oksijiini allootippii lama qaba isaanis oksijiin molekiyuulii (O2) fi Ozonii (O3) dha.amaaloota fizikaalaa O2 fi O3 akka ramaan gadii ti.
Amaloota Fiizikaalaa Okisijiin (O2 ) Ozonii (O3 )
Qaabxii baaqinaa -218.75oC -192.5oC
Qaabxii daanfinaa -182.96oC -110.5oC
Rukkinaa ( 20oC) 1.331 g/L 1.998 g/L
O-O dheerina hidhoo 0.1207 nm 0.1278 nm
Ozooni n gaazi cuquli saa fi sumaawaa dha.sukka’ini isaa kan oksiji n gadii.caasaa liwuusin akka armaan gadii barreefamu ni danda’a.
Tempireechara olaana irrattii salfaariin atom-lamee (S2) argama. Garuu tempeecharaa daree irratti S8 argama. Salfariin jajjaboo, kiristaalawoo cabuu danda’u dha. Salfari n al oofirooppii sadi qaba
Salfarii Roombikii :- jajjaboo, halluu keelloo, foolii dhabeessaa fi dhandhama dhabeessa. Tempireechara daree irratti sukka’oo dha. Qabxi baqinaa 112OC qaba.bishaan keessati hin bulbulamu.kaarbooni daaysalfayiidi (C2S) keessatti garuu ni bulbulama.
Salfarii Monokilinikii:-Roogonni S8 caasaa kiristaala monokilini kii akka kennan ta’ani ijaaraman.
Yeroo salfari n dhangala’aa furdaa ho’e hatattamaan bishaan qorraa keessatti akka qorru yoo taasifame saffariin boca dhaboo ni argama.
Salfariin boca dhaboo amala gommaa qabu dha. Yeroo turuu suuta gara salfarii roombikiitti jijjiirama.
2.3.2. Argama fi addaan baasuu oksijiinii fi salfariiArgama oksijiinii fi salfarii
Oksiji n uumama keessatti akka elementi tti bilisa ta’e ni argama Kompaawundiiti s ni argama. Atimoosfeerii nu irra jiru tokko – shanaffaan(1/5) bilisa ykn elementii oksijinii dha. Oksijiiniin bifa kompaawundii bishaan keessatti ( 89% hangaan) dacheen ( nannoo 50%) , maashaan biqilootaa fi birreensota ( O-70%) argama. Salfariin bilisaa fi bifa kompaawundootatin ni argama.kompaawundiin irraa caalaa jiipsamii ( CaSO4.2H2O) keessatti argama.Mineeraala FeS2, gas umama H2S fi SO2 keessatis ni argama.
Addaan baasuu Oksijiinii fi salfarii
Labraattoorii keessatti oksiji n Kan qophaa’uu pootasiyemii kilooreti ho’isuun
Oksijiin qulqulluu Kan argamuu elektroolaysiisi bishaantin
Industi ri n ammo oksiji n kan qophaa’uu qil eensaa keessaa karaa firaakshinaali distileeshiniitin.
Adda Baasuu (extraction) salfarii adeemsa firaashi kitaabaa wabii dubiisuun dareef gaabasi.
2.3.3. Kompaawundoota Haadroojiinii fi Haalojiin wajjin.
Hayidiroojin salfaayidii ( H2S); Kompaawundii salfariin haaydroojiin waliin uumu keessaa baay’ee bekamaan H2S dha.Hayidiroojin salfaayidiin gas halluu dhabeessa, baayyee summawaa, foolii akka killee tortooree qabu, qabxii danfinaa -60.2oC qabuu fi asiidii pirooton lamee baayyee dadhaaba ta’e dha.Qophi n isaa akka armaan gadiitti
FeS (s) + H2SO4 (aq) → FeSO4(aq) +H2S (s)
H2S rideeksa cimaa dha.
Salfariin Filooriin waliin kompaawondii lama uuma.isaanis salfar tetraFiloorayidii(SF4) fi salfar HeeksaFiloorayidii(SF6) dha. Haalli qophii isaa akka walnyaatinsa armaan gaditti
Salfarii heeksafloorayidiin, foolii dhaabbesaa fi qabxii danfinaa -63.8oC qabu dha.kompaawundotaa salfarii uumaman keessa baayyee sukka’aa dha.
Salfariin oksijiinii yookiin qilleensa keessati ni gubata. Gubiinsa isaa keessati oksaayidoota lama uumuu ni danda`a. Oksaayidootni kunis salfardaay oksaayidii fi salfartiraay oksaayidii dha. Oksaayidootni lamaanuu halluu dhabeeyyi dha. Salfardaayoksaayidiin foolii nama axxifachiisu qaba. Bishaan keessatti ariitiin bulbulama.
S + O2 → SO2 (salfardaay oksaayidii) 2S +3O2 → 2SO3 (salfartiraayoksaayidii
Salfarik asiidii, H2SO4
Salfarik asiidiin qilleensa keessaa jiidhina ni xuuxa. Qabxiin dandinaa isaa 338oc dha. Qabxii kana irratti aara adii ni uuma. Rukkinii isaa 1.84 dha.
Qophii salfarik asiidii
adeemsa salfarik asi dii ittin qopha’uu adeemsa kontaakti jedhama.Haala kanan salfarkii asidiin qopha’uu sadarkaa afuri keessa darbaa isaaniis akka armaan gaditti.
1. S + O2 → SO2 ΔH = -300 kJ mol-1 2. 2SO2 + O2 V2O5 2SO3 ΔH = -100 kJ mol-1
SO3 + H2SO4 → H2S2O7 (Ooliyemii).
Ooliyemiin yommuu bishaaniin cal abbaa’ee salfarik asi dii cunqina barbaadamu uuma. 4. H2S2O7 + H2O → 2H2SO4 (98% H2SO4).
Kompaawundoota Okisijiiniin haalojiin waliin umuu kitaabolee wabii dabbisuun dareef dhiyeessi.
Faayidaa Salfarii fi Oksijiinii
Salfariin kompawuundoota baayyee barbaachisoo akka CS2,H2SO4,MgSO4 fi kkf Oomishuuf gargaara.
· Qonnaa kessaatti salfariin guddina biqilootaaf ni gargaara.
Salfarii yommuu gommaa wajjin hoo’ifamu, gommicha ni cimsa.
Oksiijiiniin gubiinsaa wantootaaf ni faayyada.
Haala dhangalaa’aatiin oksiji niin akka boba’aa rookkeeti tti ni faayada.
Dhukubsatoota mana yaalaatti ni kennama.
2.4. KEEMISTIRII ELEMENTOOTA GAREE VII 2.4.1.Amaloota Waliigalaa Halojinotaa
Elementootni gareen- 17 gabatee peeredikii keessaatti argamaan haalojiinii jedhamuu.Haalojiinii hiikaan isaa ashaboo gaalanaa jechuu dha.sababiin isaa ashabooleen garee kanaa galaana keessatti waan argamaniif.Haalojiinooni hundi isaanii atom-lameen (F2, Cl2, Br2, I2, and At2) uumu danda’u.keemistri ni haaloji nootaa Astaatini hin dabalatu sababiin isaa Astaatini radio akitivi dha. Akaasumas laboratoori keessatti qo’chuu f ulfaataa fi gati n isaa baayyee mi’aa (expensive) waan ta’eef.
Tempirechara daree irratti Filoori ni fi Kiloorini n gaasota yommuu ta’an Biroomini n ammoo dhangalaa’oo, Ayoodini n jajjaboo cuqulisa.Haaloji notni hundinuu si’awoo fi summawoo dha.Si’ayinni fi summa’inni isaani Filoorini irra gara Ayoodini tti hir’ataa adeema.Raabsaan elekitroonota sheelii alaa garee kana ns2np5 dha.
Akka gabaate armaan gadii ilaalun ni danda’ama.
Elementii Bakka bu’e Lakkoofsa atoomawaa Raabsa Elektiroonii
Filoorinii F 9 1s2 , 2s2, 2p5
Kiloorinii Cl 17 1s2 , 2s2, 2p6, 3s2 , 3p5
Biroominii Br 35 1s2 , 2s2, 2p4, 3s2 , 3p6, 3d10, 4s2 , 4p5
Ayoodinii I 53 1s2 , 2s2, 2p4, 3s2 , 3p6, 3d10, 4s2 , 4p6,4d10,5s2,5p5
Astaatinii At 85 1s2 , 2s2, 2p4, 3s2 , 3p6, 3d10, 4s2 ,4p6, 4d10, 5s2, 5p6, 5d10, 6s2, 6p5
Garee keessaa Filoorini gara Ayoodini anni saa ayooneessu, elekitroonagativi fi Si’aa’nni hira’ataa adeema. Garuu qabixi baqinaa, qabxi danfinaa, raadiyeesii atoomi fi raadiyeesii ayoonii dabaala adeema.
Anniisni ayoonessuu halooojinota baayyee olaanaa dha. Kun kan agarsiisuu dandeetti eleektiroonii kennu xiqqaa qabaachuu isaani ti.Annisni ayoonessuu filoorini olaanaa yeroo ta’u kan ayoodini garuu gadaanaa dha. Sababni isaas filoorinii hamma xiqqaa yommu qabu ayoodiniin garuu hamma guddaa qaba.
Gaabateen armaan gadii amala fizikaalaa haalojinoota agaarsiisa.
Molakiyuulota Qabxii baqnaa (oC) Qabxii danfnaa (oC) Anniisaa ayoonessu (kJ/mol) Jalaala elekitrooni (kJ/mol) Raadiyeesi ayoonii (nm) Rukkinaa (g/cm3)
F2 -218.6 -188.1 1680.6 322.6 0.133 1.513
Cl2 -101.0 -34.0 1255.7 348.5 0.184 1.655
Br2 -7.3 59.5 1142.7 324.7 0.196 3.187
I2 113.6 185.2 008.7 295.5 0.220 3.960
Si’aa’nni haloojinota garee keessatti hir’achaa deema F2 >Cl2 > Br2 > I2
2.4.2. Argamaa fi Qophii Halojinootaa
Haaloji noon baayyee si’awoo waan ta’ani f bilsaan akka elemeentitti hin argamaan.Haalojinoon hundinuu bifa kompaawundiin argamu.Oorotaa beekamoon Filoorinii Bishaan galaanaa, Filoraayitii (CaF2) fi Kirolaayitii ( Na3AlF6) dha. Kiloorinii ammoo baay’inna bishaan gaalanaa, NaCl,MgCI2, fi CaCI2 keessatti yommuu argamuu,Oorota isaa irraa adeemsa elektirolaayisisiin adda baafama.Ayoodinii bishaan gaalanaa fi NaIO3 keessatti argamaa. Ooronii beekamoo Biromiinii ammo bishaan galaanaa NaBr,KBr,MgBr2 fi CaBr2 dha. Garuu Ayoodinii fi Biromiinii bishaan gaalanaa keessatti muraasatu argama.
Filoorini n gaasi haal uu dhabbeesa, baayyee summaawaa fi si’ayinnaan walnyaatinsa gaggeesuu dha.baayyee si’aawoo waan ta’eef meeshaan itti kuufamu rakkisaa dha. Filoorini n oksiddeessaa cimaa dha elementoota biroo gara lakkofsaa okideeshiin olaanatti oksiddeesa.fkn AgF2, PtF6 fi IF7.Filoorinii fi Kiloorinii oksideessaa cimaa waan ta’ani f adeemsi elektrolaaysi sin ayoonotaa Filoorinii fi Kiloorinii oksideesuu caalaa filaatama dha.
Adeemsa elekitroolaysiisin Filoorinii Oorrii isaa irraa addaa baasuun ni danda’ama.
Elekitroolaysiisi baqaa sodiyeemii kilooraydiiykn bulbula cunqoo(birne) Nacl irraa Kiloorinii qopheessuun ni danda’ama.
2 NaCl(l) → 2 Na(s) + Cl2(g)
Ayoodini kan qophaa’uu Ayoodini ayooni Biroomini ykn Kiloorini wal nyaachisuun.wal nyaatinsaa armaan gadii ilaaluun ni danda’ama.
Biroominii kan qophaa’uu ayooni Biroominii Kilooriniin walnyaachisuun.
2.4.3. Kompaawundoota Haadroojiinii fi Okisijiini wajjin Halaayidoota haaydiroojiinii
Asiidumman haalayiidoota haaydrojiin HF gara HI dabalaa adeema.
Filoorini Haaydroojiin wajiin duukanaa keessati walnyaatinsaa gaggeessaa, Kiloorinii ifa aduu barbaada,
Biroomini haaydroji ni wali n kompaawundii kan umuu ho’isuun, Ayoodini ammo ho’isuu fi si’eesti ittidabaluun hayidiiroojin ayoodaayidii ( HI) umuun ni danda’ama. Walnyaatinsaa armaan gadii ilaaluunn ni dand’ama.
Cimini asiidummaa halaayidoota haayiroojiinii akkaataa armaan gadiin dabalaa adeema.HF << HCl < HBr< HI
Karaa biroon ammo labratoorii keessati, haaydiroojiin filooraayidiinii fi haaydiroojiin kilooraayidiin kan qophaa’an halaayidoota sibilaa salfariki asi dii cunqoo wali n walnyaachisuun.
CaF2(s) + H2SO4 (cunqoo) → 2HF(g) + CaSO4 (s) 2NaCl (s) + H2SO4 (cunqoo) → 2HCl(g) + Na2SO4 (s)
Haaydiroojiin biroomaayidii fi haaydiroojiin ayoodaayidiin adeemsa kanaan hin qophaa’ani. Sababnisaas gara elementii biroomiinii fi ayoodiiniiti waan oksideeffamaniif.
Biroomiinii jalqabaa forsfarasii (P4)waliin walnyaachisuun foosfarasii tiraayii biroomaayidii uumu.
P4 (s) +6Br2(l) → 4PBr3(l)
. PBr3 bishaan waliin wal nyaachisuun HBr uumama.
PBr3( l ) + 3H2O( l )→3HBr (g) + H3PO3(aq)
Haaydiroojiin ayoodaayidiinis haaluma wal-faakkatuun qopheessuun ni danda’ama.
Akkuma elementotaa biroo haalojinoon oksijiini wajjiin walnyaatinsaa gaggeessun oksaayidoota X2O hanga X2O7 uumu ni danda’u. Garuu okisaayidoon kun sukka’oo miti.
Fkn Kiloorinii,Cl2O, Cl2O3, ClO2, Cl2O4, Cl2O6, fi Cl2O7.
Filoorinii,OF2 fi O2F2 uuma. Ayoodinii fi Biroominii ammo duraa dubaan I2O5, Br2O BrO2, fi BrO3 uumuu danda’uu.
Kompaawundoota halojiinii waliif waliinii uuman
Haloji notni wali n walnyaachuun haalojiinii sukaa’oo ta’ee uumu. Gabatee armaan gadii ilaalun ni danda’ama.
ClF, BrF, BrCl, ICI, IBr, IF CIF3, BrF3,IF3, ICI3 BrF5 IF7
Faayidaalee Haalojinoota Filoorinii
kilooroo filooroo kaarboonii keessatti faayida qaba.
Qulqulleessuu yuraaniyeemii keessatti OOmisha UF6 tiif
Bishaan dhugaatii baakteriyaa irra qulqulleessuuf
Gaasota sumawoo fkn Cl2 mustaard gaasii ( ClCH2Cl)
Biroomoo kilooroomiteeniin ( CH2ClBr) dhamsituu ibiddaatiif fayyada
Silver Biroomaayidiin fiilmii footoogiraafiif fayyada.
Bulbulii ayoodiniin alkoolii keessatti akka antiseptikitti fayyada
3.Keemistirii sibiilota Ce’umsa(Muraafama-d) Filatamoo Tokko Tokko
Boqonnoota darban lamaan keessatti waa’ee elementoota murna hunde A(representative elements) muraasa fi amaloota kompaawundoota isaanii gad-fageenyaan ilaallee jira. Boqonnaa sadaffaa kan keessatti immoo waa’ee sibiilota ce’umsa filatamoo tokko tokkoo ilaal a. Akkuma beekamu elementootni ce’umsaa elementoota muraafama-d keessatti argammanii dha. Elementoota kanneen keessaa kanneen filatamoo ta’an kan akka Ayiranii ( Fe) , Kopparii ( Cu), warqee ( Au) fi silvarii (Ag) ilaalla. Akkuma waliigalatti, boqonnaa kana keessatti keemistirii ayiranii,kopparii,warqee fi silvarii amaloota waliigalaa isaanii, argamaa fi qophii isaanii kompaawundoota elementootni kun uuman danda’an ilaala.
Dhuma boqonnaa kanatti isin leenjifamtoootni
-Amaloota fiizikaalaa fi keemikaalaa sibiiloota Fe, Ag, Au ni ibsitu
-Argama Fe, Ag, Au addaan baasuun ni addeessitu.
– Oorotaa Fe, Ag, Au addaan baasuun ni tarreessitu.
-Laqiin(alloy) maal akka ta’e ni himtu
3.2 Amaloota waliigalaa Elementoota muraafama-d
Elementootni kun elementoota muraafama–d jedhamuun beekamu. Elementoonni muraafama–d elementoota gabatee raabsa elementootaa ammayyaa keessatti kanneen elementoota garee IIA fi IIIA jidduutti argamanii dha. Akkuma elementoota hundee (elementoota muraafama –s fi p), elementoonni muraafama –d baay’een garee keessaa gubbaa gadi amaloota fi zikaalaa fi keemikaalaa walfakkaatu qabu. Kanaafii garee adda addaa, kan garee B jedhamanitti qoodamu. Isaanis garee IIIB gara harka bitaa irraa eegaluun garee elementoota sagal kan walitti qabatu garee VIIIB keessa darbuun xumura irraatti elementoota garee IB tu argama. Lakkoofsi elementoota garee kanaaf kenname lakkoofsa oksideeshinii ol aanaa isaan qabaachuu danda’an irratti hundaa’a.
Elementoonni muraafama-d elementoota hundee irraa kan adda isaan taasisu amaloota heddu qabu.
Elementoonni ce’uumsaa hundi sibiilota.
Elementoota garee IIB irraa kan hafe hundi isaanii qabxii baqinaa fi danfinaa olaanaa qabu.
Merkurii irraa kan hafe hundinuu Jajjaboo dha.
Elementoonni garee IIIB fi IIB irraa kan hafe, tokkoon tokkoo elementoota ce’uumsaa lakkoofsa oksideeshini baay’ee qabu. Fakkeenyaaf, Vaanaadiyeemi n, bulbula bishaanii keessatti lakkoofsa oksideeshinii +2 hanga +5 qabaachuu danda’a.
Lakkoofsa Oksideeshinii Elementoota Ce’uumsa
Kompaawundoonni elementoota ce’uumsaa yeroo baay’ee hal uu qabeeyyi fi paaraamaagneetawaa dha.
Fkn: CuSO4 halluu cuquliisa qaba.
: [Ni(H2O)6]2- halluu magariisa qaba
Elementoonni ce’uumsaa amaloota dabarsoo elektriikaa gaarii waan qabaniif, nibatteeffamu, nishiboofamu, nicalaqqisu, sheelii hingunne keessatti cita-sheelii d irratti elektirooniin argaman hidhoo sibiilaa irratti waan hirmaataniif walumaagalatti qabxii baqinaa fi danfinaa akkasumas rukkina olaanaa qabu ( kan adda ta’e garuu ‘Hg’n qabxii baqinaa fi danfinaa gadi aanaa qaba).
Elementoonni ce’uumsa hundi isaani wali isaaniti fis ta’e sibiilota murna hunde A wajjin laqaa(alloy) ni uumu.
Kompaawundota wal xaxxoo(complex compound) ni uumu.
Elementootni muraafama- d keessatti argaman fi raabsa elektiroonota sheelii alarraa guutuu qaban garee meeqaffa dha ?
Muraafama -d keessaa elementi n sibiila ta’e fi tempireechera dareetti dhangala’aa ta’e eenyu dha?
Elementiin ce’umsaa maalif lakkoofsa oksideeshinii(vaalansii) garaa garaa qabaatan?
3.3. Keemiistirii Ayiranii (Fe)
Aluminiyemitti aanee ayiraniin sibiila dachee keessatti baayyinaan argamu dha. Ayiraniin dachee keessatti tamsa’ee argamuun(abundance) isaa sadarkaa 4ffaa yoo ta’u, naannoo 5% ta’a. Sababa jaalala(affinity) oksijini olaanaa qabu irraa kan ka’e uumamaan bilisa ta’e hin argamu,bifa kompaawundiitiin argama, fakkeenyaaf bifa oksaaydiin. Ayiraniin haala salphaadhaan qilleensa ji dhaan hubaamuu danda’a. walumaagalatti, ayirani n sibiilota kanneen akka koppari , kobaalti
fi niikeelii wajjin wal makee(associated) argama. Ayiraniin yeroo baayyee akka oksaayiditti argama, harkii muraasni moo akka sulfaayiditti yeroo argamu baayyee xiqaate moo bifa kaarboonetiin argama.
3.3.1. Amaloota Waliigalaa Ayiranii
Gaaffii Marii:-Caasaa elektiroonii ayiranii cita sheelii fayyadamuun barressi.
Amalootni fiizikaalaa ayiranii muraasni kanneen armaan gaditti.
Ayiraniin siibiila maagineetawoo dha
Ayiraniin rukkina 7.86 g/cm3 qaba
Qabxiin Baqina ayiranii 1535OC dha
Qabxiin danfina ayiranii 3000 OC dha.
Ayiranii qulqulluun sibiila adii fi cululuqaa dha.
Ayiraniin ho’aa fi elektiriikii of keessa dabarsa\_
Ayiraniin kaarboonii of keessa qaba. Ciminnii fi jabinnii ayiranii hamma kaarboonii ayiranii keessaa jiru irratti hundaa’a.
Amaloota keemikaalaa Ayiranii
Ayirani n yoo ho’i itti dabalame boba’ee ayiran ( II)-(III) oksaayidii ( Feerosoo- feerik oksaayidii ) kenna. Feerosoo- feerik oksaayidiin makaa feeras oksaayidii ( FeO) fi feerik oksaayidii ( Fe2O3) dha
FeO + Fe2O3 à Fe3O4
3Fe + 2O2 à Fe3O4 ( FeO + Fe2O3)
Hurki bishaan ayirani hoo’ee diimate irra yoo darbe ayirani oksaayidii maagineetawoo fi haayidiiroojinii ni uumama.
3Fe + 4H2O à Fe3O4 + H2
Ayiraniin HCl fi H2SO4 cal abaa’oo wajjin walnyaatinsa yoo gaggeesse ashaboo kenna. Fe + HCl à FeCl2 + H2 (g)
Fe + H2SO4 à FeSO4 + H2 (g)
Naayitriik asiidii(HNO3) qorraa fi cal abaa’oo wajji n ayirani n walnyaatinsa yoo gaggeesse feeras naayitireeti fi ammooniyem naayitireeti uuma. Yoo hoo’ifame garuu, gara feerik naayitireetii ni oksideeffama.
HNO3 qorraa fi cal abaa’oo wajjin walnyaatinsa armaan gadii gaggeessa.
4Fe + 10HNO3 à 4Fe(NO3)2 + NH4NO3 + 3H20
HNO3 hoo’aa fi cal abaa’oo wajjin walnyaatinsa armaan gadii gaggeessa.
Fe + 4HNO3 à Fe ( NO3)3 + NO + 2H2O
Ayiraniin salfariik asiidii cunqoo keessatti bulbulamuun SO2 kenna. 2Fe + 6H2SO4 à Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 3H20
3.3.2. Argama fi qophii AyiraniiArgama Ayiranii
Ooronni ayiranii gurguddoo fi beekamoon:-
Maagineetaayitii ( Fe3O4)
Heemaataayitii ( Fe2O3)
Liimoonaayitii ( 2Fe2O3. H2O)
Siideraayitii ykn ayiranii sipaatikii( FeCO3)
Ayiiran Paayraayitii ( FeS2)
Ayiran salfaayidii ( Fes)
Oorota armaan olitti tuqaman keessaa kan oomisha ayiraani f baay’ee barbaadamu
heemaataayitii , Fe2O3 dha.
Ayiraniin irra caalaa kan oomishamu oksaayidii beekama heemaataayitii jadhamu irrayyi. Oorootni salfaayidii kan baay’inaan argaman oomishaa ayirani kanaaf hin ta’an. Fakkeenyaaf oksaayidiin siidiraiyitii(CuFeS2) yeroo baayyee oomisha ayiraniif hin oolu, sababni isaas salfariin sibilicha keessatti yoo hafe waan caccabu danda’uuf .
Adeemsi Oomishuu ayiranii kan adeemsifamu Farnasii bilaastii(Blast furnace) keessatti dha. Farnasii bilaastiin irri isaa istiil pileetiin(steel plates) fi keessi isaa moo xuubbii( fire bricks) irraa hojjatama.
Dhawaattoota ayiraniin itti oomishamu kanneen armaan gaditti:
Meeshaaleen dheedhiin kan akka oorii ayiranii, kookii ( cilee) , dhagaa hoofii gara gubba farnaasichaatiin ni galu.
Qil eensi hoo’aan kara ura jalaatiin itti ol afuufama.
Oksijiniin qilleensa keessa dhufe kookii wajjin walnyaachuun kaarboon daayooksaayidii ni uuma.
CO2 ‘n uumame kookii irra caalan walnyaachuun kaarboon moonooksaayidii ni uuma. CO2 ( g) + C(s) → 2CO(g)
Kaarboon moonoksaayidiin akkuma uumamaa deemuun sadarkaa adda addaa irratti ayiran oksaayidiin gara ayiranitti jijjirama.
Fe2O3 + CO → 2Fe3O4 + CO2 , temp . 3000C
Fe2O4 + CO → 3FeO + CO2 , temp . 6000C
Fe O+ CO → Fe+ CO2 , temp . 800 – 16000C
Hoo’i gara jala guddaa waan ta’eef ayiraniin baqee gara jala farnaasichaatiin ni yaa’a.
Dhagaan hoofii, CaCO3 farnaasitti galee hoo’a farnaasi keessa jiruun diigamuun CaO fi CO2 kenna.
CaCO3 hoo’a CaO + CO2
Kaalsiyem oksaayidiin, uumame kun wantoota akka silikaa jedhaman wajjin walnyaachuun Islaagii(slag) uuma.
CaO + SiO2 → CaSiO3 ( islaagii)
Islaagiin farnassi gara jalaatiin yaa’a CaO islaagii uumuuf nu faayadu filaaksii jedhama. Ayiranii fi islaagiin baqan walitti hin makaman, islaagiin waan hin ulfaaneef ayiranii gubbaa bololi’a. isaan lamanu qaawwaa adda addaati n farnaasi keessa yaa’uun kuufamu
Fakk. Farnasii bilaastii(Blast furnace) Akaakuu Ayiiranii
Ayiranii akaakuu hedduu qaba. Isaanis:- pig ayiranii, kaastayiranii, Root ayirani fi istiilii dha.
Pig ayiraniin ayiranii farnasii keessaa bahee dha. Innis sirritti kan qulqullina hin qabnee dha.
Ayiraniin kun Fe( 92%-95%), C(2.5%-4.5%), Si(0.7%-3%), P(0.5%-1%),
Mn(0.2%-1%) fi S(0.1%-0.3%) ofkeessaa qaba.
Kaast ayiraniin piigayiranii boca barbaadameen qopha’ee dha.
Kaast ayiraniin haala salphaan kan caccabuu fi waalda’uu kan hin dandeenye dha. Kanaafuu meeshaalee cimoo hin taane qopheessuuf gargaara.
Akaakuu ayiranii hunda irra qulqul uu kan ta’ee fi kaarbooni 0.2% gadi kan of keessaa kan qabu dha.
Qabxii baqinaa olaanaa(15000C) qaba.
Kan lalaafu, diri ruu fi shi bbooffamu danda’u dha.
Kan hin caccabnee fi akka salphaatti kan hin daandoofne dha
Waalda’uu ni danda’a.
Cancaala,shiboo, dandii hadiida fi kkf oomishu fayyada.
Istiilii ( hadiida) :
Istiiliin ayiranii hunda irra faayidaa qabeessaa dha.
Istiiliin laaqa ayiiranii fi kaarboonii 0.2% – 0.25% ta’u of keessa qabu dha.
Amalli isaas parsantii kaarboonii irratti kan hundaa’eedha. Kanaafuu hagi kaarboonii keessaa jiru madaalame beekamu qaba.
Malootni isti liin ittin Oomishamu danda’an sadituu jiru. Isaanis:-
Adeemsa Oopen Heerzii
Adeemsa Arkii fi
Adeemsa Oksijinii beezawaa ti
Ayiraniin baqaan farnasii bilaastii keessa bahu, soqaan ayiranii fi dhagaan hoofii farnasichatti akka galan godhaman. Makaan kun baquun gara CO2 ni oksideeffama. Oksaayidootni S, P fi kkf kaalsiyem oksaayidii wajjiin walnyaachuun islaagii uumu. Kaarbooniin gara hanga parsantii barbaachisuutti ni hir’ata, yookiin hunda isa keessa baasuun hamma barbaachisuu herregan itti dabalama. Adeemsi oopen Heerzii qusannaaf gaarii dha.
Adeemsa Arkii Elektiriikii
Farnasicha kanatti soqaan Istiilii, dhagaan hoofii fi ayiran oksaayidiin farnasii keessatti annisa ho’a elektiriikiitiin baqanii walnyaatinsa hin barbaachifne istiilii keessaa bahanii islaagii uumu. Istiilichi fi islaagiin kara gara garaatiin farnnsii keessa bahu.
Adeemsa oksijinii Beezawaa
Adeemsa kana keessatti farnasii keessatti soqaa ayiranii fi ayiiranii baqaa itti naqama. Oksijiniin qulqul uun saffisa ol’aanaan gara sibiilotaatti afuufama. Oksijinichi kaarbooni fi qulqul u dhabee asiidawoo ( oksaayiidoota S,P ) wajjin walfudhata. Isaanis dhagaa hoofii wajjin islaagii kennuuf walnyaatinsa adeemsiisa. Sababa dhagaan hoofii beezawaa fi oksijiniin farnasichatti dabalamuuf adeemsichi adeemsa oksisinii beezawaa jedhama.
3.3.3. Faayidalee Ayiranii
Kaastayiraniin ujummoo bishaan tortoraan keessa darbu, utubaa elektiriikaa, utubaa dalla,hadiidaa fi kkf ittiin hojjachuuf ni fayyada.
Root ayiraniin cancalaa fi cufaa karraa hojjachuuf ni fayyada.
Istiiliin meeshaa harkaa maashinoota, karraa baaburaa fi kkf hojjachuuf ni fayyada.
Dandaa’uu Ayiranii(Rusting of Iron)
Ayiraniin tempireecharaa dareetti qil eensa ji dhaa keessa yoo kaa’ame golgaa diimaa- magaalawaa(brown) dandii jedhamuun uwwifama. Dandiin kunnis ayiranii baayyee baleessa. Kanaafuu, dandii ittisuuf ayiranii bishaanii fi qilleensaan akka wal- hin tuqnee gochuu dha. Kunnis karaa adda addaatiin gaggeeffama.
Maloota ayiraniin dandii irra ittifamu:-
Diba halluuwwanii:- Yommuu ayiraniin halluu dibame dandii dhowwuu irra darbee meeshaaf bareedina kenna.
Dibata uffisu:- Dibatni ayiranii yoo dibame bishaanii fi qilleensi akka hin tuqnee gochuudhaan dandaa’uu irra hambisa.
Gaalvaanaayizeessu:- Gaalvaanaayizeessuun ayiranii ykn istiilii golga haphii ziinkiitiin uffisuu dha.
Tiinii offisuu:- Tiinii akkuma Ziinkiitti ayiranii irratti uffisuudhaan akka hin daandoofne gochuu dha.
Elektiroopileetii gochuu:- Annisaa elektiriikiitti fayyadamuun sibiila hin dandoofne ayiranii irratti uffisuu dha.
Gocha:-Maloota biroo ayiranii daandii irraa ittisan beektu eeri.
3.4. Sibiilota Kopparii, Warqii fi Meetii
Elementootni koppari , warqii fi meeti n sibiilota saantima jedhamani waamamu. Kunis kan ta’eef saantimoota adda addaa tolchuuf waan gargaaraniif, elementootni kun cita garee IB keessatti argaman.
3.4.1. Amaloota Waligalaa Kopparii, Meetii fi Warqii
Kopparii, meetii fi warqiin rukkina guddaa qabu.
Au,Ag fi Cu sirritti baxxachuu fi shibooffamu ni danda’u.
Dandiin isaan hin tuqu. Kanaafuu, hojii saantimootaa fi elektiroopileetingiif ni fayyadu.
Amaloota Kopparii(Cu) Meetii (Ag) Warqii(Au)
Lakk. Atoomawaa 29 47 76
Hanga atoomawaa 63.55 108 197
Raabsaa elektiroonii [Ar]3d10 4s1 [Kr]4d105s1 [xe]4f145d106s2
Lakk.Oksideeshinii +1,+2 +1,+2 +1,+3
Rukkina (g/Cm3) 8.94 10.5 19.32
Qabxii danfina 183OC 960OC 1063OC
Qabxii baqina 2312OC 1950OC 2600OC
Elektiroo negativiitii 1.9 1.9 2.4
Gabatee:- Amaloota Fiizikaalaa Cu,Ag,Au
3.4.2 . Amaloota keemiikaalaa kopparii, Meetii fi Warqii
Sibiilotni kunni n walnyaatinsa keessatti si’aawoo miti, Cu,Ag fi Au walnyaatinsa keessatti dadhaboo waan ta’ani f Sibiilota luujii jedhamu.
Warqii fi Meetiin Oksijinii wajjin walnyaatinsa hin taasisan garuu, koppariin tempireecharaa olaanaa irratti yoo hoo’ifame CuO,yoo hoo’i kana caalaa irratti dabalame immoo Cu2O ni uuma.
2Cu + O2 hoo’a 2CuO
4Cu + O2 hoo’a guddaa 2Cu2O
Cu fi Ag asiidota oksideessota kanneen akka HNO3 fi H2SO4 hoo’aa fi cunqoo wajjin walnyaatinsa ni taasisu
Cu + 4HNO3 ( cunqoo ) → Cu (NO3)2 + 2NO2 + 2H2O Cu + 2H2SO4( cunqoo ) → CuSO4 + SO2 + 2H2O
2Ag+ 2H2SO4( cunqoo fi hoo’a ) → Ag2SO4 + SO2 + 2H2O
Warqii fi pilaatiniyeemiin akuwaareejiyaa ( makaa 3HCl fi HNO 3) keessatti qofa bulbulamu
Au+3HCl + HNO3 → AuCl3 + NO +2H2O
3.4.3.Argama fi Oomisha Kopparii, Meetii fi Warqii ( Cu,Ag,Au)
1.Argama Kopparii, Meetii fi Warqii
Argama Kopparii, Cu
Koppari n ardii irra faca’ee dhagaa, biyyee, bishaan galaanaa fi haroo keessatti xiqqoo ta’ee argama.
Oorotni beekamoon kapparii :-
Kuparaayitii ( Cu2O)
Kopparii diimaa ( CuO)
Chaalkoosaayitii ( Cu2S- koppar paayiraayitii)
Koppar gilaansii ( CuFeS2- chaalkoo paayiraayitii)
Maalaachaayitii ( Cu2(OH)2CO3
Azuuraayitii ( Cu3(CO3)2(OH)2
Argama Meetii ( Ag)
Oorotni Meetii beekamoon:-
Arjentaayitii ( silvar gilaansii) ( Ag2S)
Paayraagraanitii ( 3Ag2S,Sb2S3)
Meetii gaanfaa ( horn silver ) (AgCl)
Meetii fi warqiin wayitii kopparii fi liidiin Oomishaman akka Oomishaa dabalataatti ta’ani ni bahu.
Argamsa Warqii ( Au)
Warqiin ardii kana irratti uumamaan bilisaan ni argama. Warqiin akka kompaawundiitti albuuda saayilvaanaayitii keessatti akka tulluu raayidiitti ( Au Ag) Te2 argama
3.4.4.Oomishaa kopparii, meetii fi warqiiOomishaa Kopparii
Koppariin gara irra jiru paayiraayiitii irraa oomishama.
Paayiraayiti n qil eensa hanga xiqqaa tokko keessatti hoo’ifama wayita kana ayirani n gara ayiran (III) oksaayidiitti jijjiirama
Achumaanis koppar ( I) salfaayidiin hanga tokko gara oksaayidiitti jijjiirama.
Akkuma hoo’i itti fufuun koppar (I) salfaayidiin gara kopparitti jijjiirama. Cu2S + 2Cu2O → 6Cu + SO2
Koppariin sadarkaa kanatti oomishame kopparii bilistar(blister copper) jadhama.
Koppariin argame qulqullina hin qabu, kunis elektirooliisisiin qulqulleeffama.
Oomishaa Meetii ( Ag)
Meetiin kan omishamu Oorii arjentaayitii ( Ag2S) irraa yoo ta’u walnyaatinsa soodiyem saayaanaayidii cal abaa’aa wajji n adeemsisuu gaggeefama.
Ag2S+ 4NaCN → 2Na [Ag(CN)2] + Na2S
Bulbula argame calaluun Zn wajjin akka walnyatu yoo ta’e meeti jajjaboo argana. 2Na[Ag(CN)2] + Zn → Na2[Zn(CN)4] + 2Ag(ppt)
Warqiin gara irra jiru bilisa ta’ee waan argamuuf, oomishinni isaa cirrachaan adda baasuu ta’a.karaa birati n warqiin adeemsa saayinayideshini n(cyanadation process) qulqul aa,uu ni danda’a. Adeemsichi kan raawwatu oori warqii bulbula cal aabbaa,aa NaCN ykn KCN fi oksijinii murta’aa ta’e keessatti bulbuluun ta’a. walnyatinsi akka armaan gadiitti raawwata.
2Au + 4KCN + O2 + 2H2O → 2KAu(CN)2 + 2KOH + H2O2
2Au + 4KCN + H2O2 → 2KAu(CN)2 + 2KOH
4Au + 8CN- + O2 → 4Au(CN)2 + 4OH-
3.4.5.KompaawuundootaKoparii, Meetii fi Warqii haayidiroojinii fi Oksijinii waliin
Sibiilootni Cu,Ag fi Au haayidiroojinii waliin walnyaatanii haayidiraayid ii uumu. Cu + H2 → CuH2
2Ag + H2→2AgH.
2Au + 3H2 → 2AuH3
Sibiiloota Cu,Ag fiAu keessaa koppari n Oksijini wali n bakka hoo’i jirutti oksaayidii koppari ni uumama. Haa ta’u malee Ag fi Au oksijini wajjin walnyaatinsa hin gaggeessan. 2Cu + O2 hoo’a 2CuO
Koppariin industirii elektiriikaa keessatti meeshaalee akka keebilii, sahaanii baatirii mootoraa, jeenereetaroota, tiraanisfoormarootaa fi kkf oomishuuf ni oola.
Koppariin saantima tolchuuf ni fayyada.
Meeshaalee nyaataa ittiin bilcheessan tolchuuf ni oola.
Kopparii laaqa adda addaa qopheessuuf ni tajaajila
Koppariin elektiroo pileetingiifis ni fayyada.
Faayidaawwan meetii fi warqii
Meetii fi warqiin meeshaa barreedummaa hojjachuuf fayyada
Meetii fi warqiin saantima tolchuuf ni fayyada
3.5. Laaqota ( alloys)
Laaqni ( alloy ) makaa ykn bulbula sibiilota lamaa ykn lamaa olii, sibiila fi sibiilaalaa ti . makaan kunis kan hojjatamu ruqoolee baqan walitti makuudhaani.
Gaaffii :- Sababni Laaqa qopheessuun barbaachiseef maalii? Laaqa qopheessuun kan barbaachiseef:
Cimina dabaluuf: ciminni laaqaa kan ruqoolee ni caala
Qabxii baqinaa xiqqeessuuf: qabxiin baqina laaqoota kan ruqoolee irra xiqqaa dha.
Dabarsuu elektiriikii xiqqeessuuf : laaqotni elektiriikii sirritti akka ruqoolee isaanii hin dabarsan.
Maqaa Laaqaa Qabiyyee Faayidaa
Biraasii Cu(60-70%) Zn ( 40-30%) Meeshaalee elektiriikaa hojjachUjummoo fi meeshaalee muziuuf hojjachuuf
Biroonzii Cu 75%) Sn ( 25%) – Saantimoota, meedaliyaa siidaa hojjachuuf
Soldarii Pb(50-80%), Sn (50-20%) – Sibiilota adda addaa walitti weeldeessuuf tajaajila
Duraalaminii Al(95%), Cu(4%), Mg(1%) – Xiyyaaraa hojjachuuf
Sibiila qawwee Cu(88%), Sn (10%) Al (2%) – – Qawwee fi qaamaa maashinoota hojjachuuf
Sibiila taayipii Pb(70-75%), Sn ( 5-10%) Sb(20-18%), Cu ( 3-2%) – Taayipii hojjachuuf
Maagnoliyum Al(70-90%) Mg ( 30-10%) – Meeshaalee saayintifikii ta’an hojjachuuf
Gabatee-7 : Laaqota beekamoo fi faayidaawwan isaanii
Elementoota ce’umsaa keessaa teemp. dareetti kan qabxi baqinaa olaanaa qabu adda baasi.
Elementootni ce’umsaa maaliif lakkoofsa oksideeshinii baayyee qabaachuu danda’an?
Ayirani n bishaani fi oksijini yoo argate ni dandaa’aa, garuu warqiin immoo hin dandaa’uu. Maaliif?
Warqiin bifa oksaayidiin argamu ni danda’aa? Maali f?
Laaqa jechuun maal jechuudha? Akkamittiin uumamu? Fkn kenni.
SEENSA GAREE MA’II BAASTOOTA ORGAANIIK KEEMISTIRII FI WAL- NYAATINSA ISAANII
Leenjifamtoota! Boqonnaa kana keessatti hiika keemistirii orgaanikii, kompaawundoota organikii kanneen akka alkeenotaa, Alkiinoota, Alkaayinoota, kompaawundoota aromatikii, Alkoolota, Itaroota, Istaroota, Kitoonota, Aldihayidoota, Karbogziliik asiidota fi amiinota ilaalchisee garewwan murteessoo isaanii, moggasa maqaa, amaloota fiizikaalaa, amaloota keemikaalaa, maloota isaan ittiin qophaa’an fi kkf gad fageenyaan baranna.
Leenjifamtoonni:Xumura Boqonnaa kana booda:
• Hiika keemistirii orgaaniikii fi qoodama isaa ni ibsu.
• Garee ma’i bastotaa adda addaa ni tarreessu.
• Foormulaa waligalaa kompaawundota orgaanikii adda addaa addaan ni baasu.
• Maqaa kompaawundoota orgaanikii adda addaa ni moggaasu.
• Kompaawundota orgaanikii garee ma’i baastoota isaanii irratti hunda’uun ni ramadu.
• Amaloota fiizikaalaa fi keemikaalaa komaawundota orgaanikii adda addaa ni tarreessu.
• Tooftaalee oomishuu kompaawundot orgaanikii adda addaa ni ibsu
• Gosoota walnyaatiinsa keemikaalaa kompaawundootni orgaanikii geggessan kanneen beekamoo ta’an ni tarreessu.
• Ga’ee orgaanik keemistiriin oomisha adda addaa keessatti qabu ni ibsu.
Hiika Keemistirii Orgaanikii fi qoodama isaanii
Keemistiriin Orgaanikii dame keemistiri waa’ee caasaa fi amaloota kompaawundota karbooni kan qo’atu dha. Haa ta’u malee kompaawundootni karboonii kanneen akka ashaboolee
karbooneetii(CO32-), CO, CO2, fi CN- of keessaa qaban kompaawundoota orgaanikii keessatti hin ramadaman. Atoomotni kaarbooni dandeetti addaa hidhoo keemikaalaa wali wali isaani s ta’e atoomota biro kanneen akka oksijinii, naaytiroojinii, salfarii waliin caaseeffama solooloo dheeraa ykn maramaa uumu qaba. Kanaafuu keemistirii orgaanikiin caasaa fi amaloota kompaawundoota kana irratti xiyyeeffata.
Dabalatanis keemistiri n orgaanikii qo’annoo kompaawundota hydirookarbooni (kaarboonii fi haydiroojinii qofa qabu) fi dhaalomoota isaa jedhamuun beekama. Haydirookarboonotni kunis kopaawundota aliifatikii fi aroomatikii jedhamuun bakka lamatti qoodamu. Kompaawundootiin aliifatikii amma illee iddoo lamatti qoodamu isaanis kan cancaala sirrii qaban (alkeenota,alkiinota, alkayinota sarara sirri ) fi kan dameessa’oo ta’an jedhamuun beekamu. Gama biraati n caaseffama kompaawundoota orgaanikii akkaataa wal fakkeenya amala keemikaalaa isaaniin ramaduuf gargaaru garee ma’i baasi jedhama.
 Garee maa’ii baasii :- Garee atoomota kanneen amala keemikaalaa kompaawundicha murteessuu dha.
4.1 Alkeenota, Alkiinota fi Alkayinota
4.1.1 Alkeenota, saykiloo alkeenota fi Garee Alkayilii
Alkeenotni haydirookarboota haydiroojinii quufoo (saturated) kaarbonii-kaarbonii jidduu hidhoo qeenxeen qofa kan ijaaramani dha. Isaaniis hidhoo C-C giddutti wal irra bu’insa orbitaala SP3 qofan kan uumamu dha. Alkeenotni karboonotni isaanii yertuun ykn hundi maraa uumanii argaman saaykilooalkeenota jedhamu. Foormulaan waliigalaa alkeenotaa CnH2n+2 yoo ‘’n’’ lakk. kaarbooni (1,2,3…) yommuu ta’u, Saaykiloo alkeenotni garuu foormulaa waligalaa CnH2n “n” lakk. kaarboni (3,4,5…) qabu. Saaykiloo alkeenotni alkeenota geengoo hin taane irraa haydiroojinii lamaan xiqqatee argama. Kanaafuu alkeeniin inni huda caalaa salphaan CH4 yommuu ta’u, haaluma kanaan C2H6, C3H8, C4H10, – – – jedhee itti fufaa jechuu dha. Maatiin alkeenii hanga kudhani jiru haala armaan gadiin ibsameera.
Iteenii CH3-CH3 Piropeenii CH3-CH2-CH3 Buteenii CH3-CH2-CH2-CH3
Hekseenii CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 Hepteenii CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3
Noneenii CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 Dekeenii CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3
4.1.1.1 Moggaasa Maqaa Alkeenota (Nomenclature)
Jaarraa 19ffaa dura kompawundooti orgaanika moggaasa maqaa isaanii wantota uumama isaanii agarsiisaniin moggaafamu.
FKN: – Aseti k asi diin, Vi negaari irraa argama maqaan isaas jecha Laati ni ‘’aseti m’’ irraa argame.
Maqaan moogaasa akkasi amma maqaa ‘’ walee’’ ykn maqaa ‘’tri vaal’’ jadhamee beekama. Saayinsiin keemistirii orgaanikaa akka guddachaa deemeen mogaasi maqaa tooftaanii kan kompaawundota hundaaf gargaaru moggaasa maqaa IUPAC jedhamuun bakka bu’e.Innis kan ta’e wali galtee dhaabbata ‘’ International Union of pure and Applied chemistry ‘’ jedhamuun waan ta’eef dha.Tooftaan IUPAC kun garee ma’i bastota hundaaf kan gargaaru dha.
 Maqaan keemikaalaa sirna IUPAC kuun kutaa sadii qabu. Isaanis :-
 Dursoo (prefix) – Iddoo itti argama garee maa’i baastota ykn dame (hidhattoota) molekulicha keessatti aargaman agarsiisa.
 Hadhoo (parent)- Lakkoofsa atoomii karboonii cancala dheera keessatti argamu agarsiisa.
 Damee (suffix)- Garee ma’i baastota molekulichi qabu agarsiisa.
Alkeenoti walxaxoo fi dameessa’oo ta’an moggaassuuf tarkaanfilee barbaachisaa ta’an:-
1ffaa Haayidiroo kaarboonii hadhoo ykn maatii filachuu.
 Cancala -C-C- solooloo hunda caalaa dheeraa ta’e molakiyulicha keessaa filachuu. Maqaa isaa akka maqaa haadhootti fayyadamu.
Maqaa maatii Hekseenii
Maqaa maatii Okteenii
 Yoo cancaloonni lama dheerina wal qixa qabaatan argaman isaa haadhoo isaa irraatti dame hedduu qabu filachu.
2ffaa Cancala C-C dheera akka hadhootti filame kaarboonii isaaf lakkoofsa kennuu.
 Lakkoofsa kennanun gama damen dhiyaate argamuun eegalu.
CH2CH3 2 1 5 6
 Dameen gama lamanuu yoo fageenyaa walfakkataa irratti kan argamu ta’e lakkoofsa kennuun gama ida’amni bakka dameewwanii gad- anaa ta’een eegala.
3ffaa Dameewwan lakkoofsaa kaarbonif kennaman adda baasuu
 Dameewwan (garee alkaayilii) kanneen alkeenota irraa haydiroojini tokko hirr’isuun kan uumamu fi foormulaa waligalaa CnH2n +1 qabu dha.
Alkeenii Garee Alkayilii
Formula Maqaa Forumula Maqaa
CH4 Miteeni CH3- Mitayilii
CH3CH3 Iteenii CH3CH2- Itayilii
CH3CH2CH3 Piropeenii CH3CH2CH2- n-piropayilii
 Bakka damee isaani irratti hunda’un piropaayiliin karaa lamaan ibsama.
 Bakka damee garee alkaayili irratti hunda’uun buteeni n garee alkaayili adda addaa afur qaba.
 Gareewwaa alkayilii karboonii 5-qaban
 Dameen garee alkaayiliin alaatti fayyadu
Cl- Kilooroo I- Ayoodoo
 Dameen ykn hidhattotni walfakkaataa ta’an yoo kan jiran ta’e dursi toota kanneen akka
day (2), tiray (3), tetira (4) fi kkf fayyadamuun baayina isaanii ibsu.
Fkn 3, 4, 7-tiraymitayilii
 Lakkoofsota kaarbooni hadhoof kennaman irratti hunda’uun bakkaa fi maqaa damewwanii waliin walitti hidhuun moggaasuu.
Br C-CH2-CH-CH-CH2-CH3 H
4ffaa Maqaa kompaawundichaa akka jeecha tokkootti barreessi.
 Dursoowwan adda basuuf sarara sarara xiqqaa (-) fi lakkoofsota adda basuu qoodduu (,) fayyadamu.
 Barreeffamake keessatti dameewan tokko ol-yoo jiraatan tartiba qubee isaaniin ka’i.
 Dameewwan wal fakkatan lama fi lama ol-yoo jiraatan dursoowwan, day, tiray, teetra
– – kkf fayyadamuun al-lma, sadii , afur ta’uu isaa agarsi su.
 Qubeen tartiibessuu keessatti dursoowwan kana fayydamu dhiisu.
Seerota armaan oli iratti hundau’uun maqaa guutuu kompaawundota moggaasuu.
5 CH2 3 2 1
3-itaayil- 4- mitaayilhepteenii
6-Biromoo- 3- itaayil- 4- mitaayilokteenii
Kanneen armaan gadii maqaa IUPC moggasi
CH2-CH2-CH3 F/ (CH3)3CCH2CH2C(CH3)3
CH3-CH-CH3 CH2-CH3 CH3-CH-CH-CH-CH3
Caasaa kampaawundoota armaan gadii barreessi
A) 2, 4 -Daymitayil penteenii
B) 5 -Itayil -2- mitayil hepteenii
C) 3 -ayiso piropayil okteenii
D) 2,3,4 – Tiraymitayil dekkeenii
E) 3,3 – Day ayiso piropayil hepteenii
4.1.1.2 Moggasa Maqaa Saaykiloo alkeenota
 Saayikiloo alkeenootni kan moggaafaman maqaa alkeenota irratti jechaa saayikiloo jedhu dabaluni ta’a.
 Kanneen damee dabalataa qaban maqaa dameetiin jalqabuun moggaasuu
 Dameen lamaa fi isaa ol yommuu jiraatu karaa isa dhiyoo ykn gabaaba ta’en lakkoofsa kennuun moggaasu.
1,3-daymitayilsaaykiloohekseenii 1,5-daymitayilsaaykiloohekseenii Sirrii Dogoongora
 Yoo lakkoofsi karbooni maraa hin uumne isaa maraa uumeen gad ta’e, akka dameetti lakka’ama.
CH -CH -CH -CH -CH CH3-CH2-CH2-CH-CH2-CH3
4.1.1.3 Amaloota fiizikaalaa
Tokkoon tokkoo alkeenotaa isa itti aanu irraa kan adda ba’an garee walfakkataa –CH2 (Hariiroo homoologasii) qabu. Alkeenotni sababa humni harkisa elektiroonii jidduu isaaniitti argamu humna dadhabaa Loondoni ta’ef kompaaundotni isaani mit-poolara’oo dha.Qabxiin danfina fi qabxiin baqinaa alkeenota akka hangi molekularawaa isaani dabala deemeen dabala deema. Alkeenota dameessa’oo (hidhata qaban) fi solooloo yeroo ilaal u akka dameessa’uun dablaa deemeen qabxi n baqinaa fi danfinaa hir’achaa deema. Faalkaan fiizikala isaanii warri jalqabaa arfaan gaasota, kan itti aanani dhufan hamma karboni 18 titti kan jiran dhaagala’oo yoo ta’an kan karbonii olaanaa qaban jajjaboo dha. Alkeenotni bishaan keessatti hin bulbulamani (bishaan poolara’oo waan ta’eef) garuu, kanneen akka beenzinaa keessatti ni bulbulamu.
4.1.1.4 Amaloota Keemikaalaa
Alkeenoti yeroo baayyee ‘’ Praffins’’ jedhmani wamamu. Innis jecha laatini ‘’ parum affins’’ jedhu irraa dhufe. Hiki isaaniis, fedha walnyaatinsa xiqqoo qofa Kan agarsiisan jechuu dha.
Haata’u malee alkeenoti oksiji ni fi kiloorini wajji n sirritti walnyaatu. Wal-nyaatinsi alkeenotni ittiin beekaman wal-nyaatinsa bakka bu’iinsa jedhama. Fakkeenyaaf wal-nyaatinsa haloojinota waliin taasisuu keessatti haydirojinii alkeenotaa halojiniin bakka buusuun haydiroo halik asiidii uuma. Saffisni halojinotni walnyaatinsa kana keessatti ittin hirmatan garagarummaa qaba. Innis F2>Cl2>Br2>I2.
CH4 + Cl2 ifa(uv ) CH3Cl + CH2Cl2 + CHCl3 + CCl4 + HCl
Fkn:- CH4 (g) + Cl2 (g) HCl(g) + CH3Cl(g),Kiloroomiteenii CH3Cl(g) + Cl2 (g) HCl(g) + CH2Cl2(l),Daykiloroomiteenii CH2Cl2(l) + Cl2(g) HCl(g) + CHCl3(l), Tiraaykiloroomiteenii CHCl3(l) + Cl2(g) HCl(g) + CCl4(l), Tetiraakiloroomiteenii
Wal-nyaatinsi gubiinsa haala armaan gadiitiin ibsama.
Waliigla: C H
 3n 1 O
(n+1) H O + ho’a
  2 2 2
Fkn:- CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O + 213Kcal/mol
4.1.1.5 Uumaamaan Argama Alkeenotaa fi Saaykiloo alkeenota
Uumamaan burqaan isaanii beekamoo ta’an gaasii uumamaa, petiroliyemii fi dhagaa cilee dha.Gaasiin uumamaa makaa gaazotaa garaagaraa ti. Innis yeroo hedduu petiroliyemii waliin argama. Kan inni uumamuus diigama kompaawundota organikii waggaa miliyoonaan lakkaa’amu keessatti ta’uni. Hedduminaan miteenii, iteenii, piropeenii fi buteenii akkasumas kanneen biro kan akka CO2,N2 fi H2S of keessaa qaba. Petiroliyemin haftee biqilootaa fi bineeldotaa ti. Innis zayita kelloo gara gurrachatti deemu dha. Itarii fi beenzinii (C6H6) keessatti nii bulbulama H2O keessatti garuu, hin bulbulamu. Ni boba’a, petiroliyemi n makaa alkeenotaa, saykiloo alkeenotaa fi kompaawundota aromatikii of keessaa kan qabu dha. Petiroliyemiin distileeshinii firakshiniin gara ruqoolee isatti dhiilama.
Gaaffii:- Roqooleen distileeshinii firaakshinaalaa petirooliyemiin uumaman tarreessi?
4.1.1.6 Oomisha Alkeenota (synthesis of Alkanes)
A. Halayidota alkayilootaa LiAlH4 waliin walnyaachisuun. (R-X keessatti R- garee alkaayilii, X- haloojinoota F,Cl, Br, I ta’an )
R-X + LiAlH4  R-H
CH3Cl + LiAiH4  CH4
 Walnyaatinsi kun adeemsa redaakshini ta’e haloojinoota halaayidoota alkaayilii bakka buusuun uumama.
CH3CH2-Br + LiAlH4 CH3CH3
Itaayil Biroomyidii Liitiyeem aluuminiyeem Iteeni
B. Halaayidota alkeenota, sibiilaa maaginiiziyeemii waliin wal-nyachisuun firii uumamu irratti bishaan dabalun.
CH3CH2Br + Mg CH3CH2MgBr H2O CH3CH3 + MgBr(OH)
 Firiin walnyatinsa haalaayidii alkeenotaa fi sibila maginiziyeemi gidduutti uumamu ri’eejenti
4.1.2 Alkiinota ykn oliifiinota
Alkiinoti Haayidirookarbonota haydiroojinii miti-quufoo (unsaturated) kan ta’an fi yoo xiqqatee xiqqaate hidhoo dachaa tokko hidhoo kaarbonii-karbonii gidduutti qabani dha. Alkiinotni alkeenota karboni walfakkata qaban irraa Haayidiroojini lamaan hi r’atu. Foormulaa wali galaa CnH2n ta’e qabu. Yoo n = lakk. Karboni ta’ee fi n 2 ta’e. Haaluma kanaan alkiinii inni salphaan jalqaba itayiliinii (C2H4) ta’a.
4.1.2.1 Moggasa Maqaa Alkiinota
Moggaasni alkiinota alkeenota irraa adda kan inni ta’u saafiksi n alkeenotaa “eenii” jedhu gara”- iinii”ti jijjiirma. Alkiinota moggaassuuf tarkaanfilee barbaachisaa ta’an:-
1ffaa Maqaa haayidirookarboonii haadhoo moggasuu Cancala C-C hidhoo dachaa qabatee hunda caalaa dheeraa filachu.
Maqaa Maatii Heptiinii
2ffaa Cancala dheeraa filatameef lakkoofsa Kennuu. Lakkoofsa kennuun gama hidhoo dacha dhiyaate jiruun eegala.
 Yoo hidhoo dacha gama laman fageenya walfakkatu irratti kan argamu ta’e gama dameen dhiyaate jiruun eegalu.
3ffaa Maqaa guutuu, bakka dameewwan lakkoofsota kennameen agarsiisu.
Dameewwan kanneeni s tarti ba qubee isaani n kaa’u. Bakka hidhoo dacha lakkoofsa isa xiqqaan gasrsiisu. Hidhoo dachaan tokko ol-yoo jiraate, bakka hidhoo dacha kanneenii agarsiisuuf maxxatuu booda –daa’inii, tira’iinii, teetra`iinii jedhu fayyadamu.
4ffaa Saaykiloo alkiinotni hidhoo dachaan C1 fi C2 gidduu bifa ta’uu danada’un dameen karaa itti dhiyaatee jiruun moggaafama. Maqaan saaykiloo alkiinota hidhoo isaanii dura jechi saayikiloo jedhamu itti dabalama.
5ffaa Alkiinotni dameen walfakkaataa naannoo hidhoo dachaatti hidhame yoo jiraate fi dameeleen kun gama tokkoo irratti argame ‘Siis’ yoo faal aa wali ta’an ‘tiraansii’ jechuun moggaasuu.
Siis-1,2-daaykilooroo itiinii Tiraansii-1,2-daaykilooroo itiinii
2 CHCHCH3 CHCH3
CH3CHCH2CH3 B/CH3CH2CH2CH CHCHCH2CH3
C/ H2C CHCHCCH3
CH2-CH2-CH3 G/ H2C=CH-CH-CH=CH-CH3
H/ I/ Br
C/ 3-itayili-2,2-daymitayili-3-heptiinii D/ 4,5-diymitayilisaaykilooheptiinii
G/ 3,4-dayayisoopiropayil-2,5-mitayil-3-heksiinii H/ 2,3,3-Tiraymitayil-1,4,6-okatatiraa’iinii
4.1.2.2 Amaloota Fiizikaalaa
Qabxiin baqinaa fi danfinaa akkasumas rukkinni alkiinotaa lakkoofsa kaarbonii waliin dabala. Alkiinotni bishaan keessatti hin bulbulaman, alkeenota garuu hanga tokko ni caalu. Bulbula orgaanikii Kan akka C6H6, CCl4 keessatti akka gaaritti bulbulamu.
Gaaffii:- Alkiinotni maaliif bishaan keessatti bulbulamu hafe kanneen akka C6H6, CCl4 keessatti akka gaaritti bulbulamu?
4.1.2.3 Amaloota Keemikaalaa
Sirni hidhoo dacha ( π) hidhoo tokkee ( δ ) caalaa saffisan walnyaatinsa gaggeessa. Hidhoo dachaan hidhoo tokkee caalaa tuulama elektiroonii waan qabaniif kennitoota elektiroonii cimoo dha. Walnyaatinsi alkiinotii fi alkaayinootaa yeroo hedduu irra caalaa adeemsisan walnyaatinsa ida’insaa ti. Kanaafuu hi dhoo tokkee caalaa walnyaatinsa ida’insaaf of kennoo dha. Kuunsi oliifiinonni niiwukiloofiilota waan ta’ani f elektiroofiilota wali n saffisaan walnyaatu.
FKN:- Gasiin iteeyiliinii bulbula biroomiiniitti bulbula CCl4 keessatti yoo gadhiifame 1,2
daybiroomoo eteeniin uumama.
CH2=CH2 + Br2 CCl4 BrCH2-CH2Br
 Haloojineeshiniin alkiinotaa biroominii waliin geggeeffamu akka qor-hidhoo dacha ta’uun tajaajila. Walnyaatinsa kana keesstti halluu dhabuun biroominii jiraachuu hidhoo dacha mul ’isa. Adeemsi kun alkeenota alkiinota irraa adda baasuuf gargaara.
Alkiinotni bakka si’eesssituun sibiilota kanneen akka Pt, Pd, Ni jirutti haydirojini ofitti dabaluun alkeenii uumu.
H2C=CH2 + H2
Bakka asi dotni kan akka bulbula cal abba’aa H3PO4, H2SO4 jiranitti bishaan ofitti ida’achuun alkoolota hanga melakiyulawaa gad aanaa qaban uumu. Malli kun idustiriwwan keessatti alkoolota oomishuf gargara. Ida’amni molakiyuli bishaani kun seera Markovnikoov hordofa. Akka seera kanatti gamaa gamana hidhoo dachaatti yeroo bishaan dabaltu gama haydirojinii lakkoofsa xiqqoo ta’e qabuun OH- dabalu gama haydirojinii bayyee qabun haydirojinii dabalu.
Fkn CH3-CH2-CH=CH2 + H2O
Gaaffii:- Wal-nyaatinsa biro alkiinotni geggeessan kitaabolee wabii dubbisuun tarreessi.
4.1.2.4 Tooftaa Oomishaa Alkiinota
a) Alkoolii irraa bishaan dhabamsiisuu (dehydration of alcohols)
Fkn:- CH3-CH2-OH H2SO4 (Ho’a) CH2=CH2 + H2O
• Walnyaatinsa armaan oli kana keessatti alkooli n kan ho’i fame iddoo H2SO4 jirutti dha. Kuni s asi diin salfarikii bishaan xuuxaa cimaa waan ta’eef dha.
b) Hallaayidoota alkaayilii irraa haloojinii fi haayidiroojinii dhabamsiisuun.
Alkayil halayidotni bulbula KOH itanoolii (C2H5OH) keessatti bulbulame keessatti molakiyulii H-X of irraa gad lakkisuun alkiinii uumu. (X’n halojiinii dha)
( Bulbula alkoolii)
CH2=CH2 + KX + H2O
KBr + H2O
• Oomisha alkiinota lameen keessatti walnyaatinsichi dhabamsiisuu jedhama.
4.1.3 Alkaayinoota (Alkynes)
Alkaayinootni haayidirookaarbonetota cancala isaanii keessatti yoo xinatee bakka tokkotti hidhoo sadee qaban dha. Foormulaan waligala alkeeyinootaa CnH2n-2 dha .yoo n> 2 ta’e. Alkaayini n salphaa fi inni jalqabaa asetayilinii ykn itaayinii (HC≡CH) jedhama. Hidhoon C-C sadeen kan uumamu wal irra bu’insa orbitaala diqaalaa sp-sp gidduutti ta’uun dha.
4.1.3.1 Moggaasa Maqaa IUPAC Alkaayinoota
Moggasni maqaa IUPAC alkayinoota dhawatuma kan alkeenota fi kan alkiinotaa hordfuun ta’a. Garagarummaa jiru maxxantuu alkeenii irraa ‘-eenii’ gara ‘– aayinii’ itti jijjiiru qofa dha.
CH3-CH2-CH-CH2C C-CH2-CH3 CH3
 Alkayiniin hidhoo sadee lama qabu maqaa maati irratti ‘daayinii jechuun moggaasu.
CH3C C-CH2C CH
HC CHCH2CH CH-CH3
A/ CH C-C C-CH-CH-CH3
C/ HC C-CH2-CH=CH2
D/ CH3-C C-C-CH3
B/ (CH3)3C-CH2-C C-CH-CH2-CH3 Cl
A/ 1, 1-daykiloroo-5-mitayil-3-heksaayinii C/ 3, 3, 6, 6-tetiramitayil-4-oktaayinii
B/ 3, 4-daymitayil-1, 4-heptadaayinii D/ 1-biromoo-5-itayil-2-mitayil-3-heptaayinii
4.1.3.2 Amaala fiizikaalaa Alkaayinota
Amalli fiizikaalaa isaanii akkuma alkiinota kanneen akka qabxii danfina qabxii baqinaa lakkoofsa karbonii dabaluun dabala deema. Akkasumaas yeroo dameen dabala deemuun qabxiin danfina fi qabxi n baqinaa hirr’achaa deema.
4.1.3.3 Amaala Keemikaalaa Alkaayinota
Alkayinotni akkuma alkiinootaa walnyaatinsa keemikaalaa walfakkataa ida’iinsa elektiroofiliikii gaggeessu. Alkiinota caalaa si’awoo dha. Kuniis sababa elektiroonota nannaa hidh-sadee jiran irraa kan ka’e (-C≡C-) dha. Walnyaatinsa alkaayinotni ittiin beekaman keessaa muurasni haala armaan gadiin ibsameera.
A/ Haydiroojineeshinii: – Bakka si’eessituun jirutti haydiroojini mooli lama ofitti ida’achuun gara alkeenitti jijjiirama.
R-C C-R + 2H2 Pt, Ni R-CH2-CH2-R
CH3-CH2-CH2-C CH + 2H2 Pt CH3-CH2-CH2-CH2-CH3
Alkaayinotni molakiyulota haloojinii lama waliin walnyaachuun jalqaba dayhaloo alkiinii ittii aansuun tetirahaloo alkeenii uumu.
R-C C-R CCl
R-C-C-R X X
Alkaayinootni bakka si’eessituun H2SO4 fi HgSO4 jirutti H2O wajjin walnyaachuun seera Markoovnikovi n inooli uuma, inooli n uumame suka’aa waan hin taaneef gara kitoonitti jijjiirama.
H SO , HgSO
2 4 4 Inoolii Kitoonii
Adeemsa itaayiniin mooliin sadii uraa sibiila liidii (Pb) keessaa darbuun beenzinii uumu dha.
3HC CH Ho’a
Alkaayinootni akkuma alkiinotaa fi alkeenota oksijinii keessatti gubachuun CO2, H2O fi ho’a guddaa uumu.
2C2H2 + 5O2 4CO2 + 2H2O + Ho’a
4.1.3.4 Haala Oomisha alkaayinoota (synthesis of alkynes)
a) Daayhalayidota Irraa
 Beezii cimaa kanneen akka KOH itaanolii keessatti bulbulame fayyadamuun daayhalayidota irraa haydiroojinii hir’isu.
KOH/C2H5OH CH C CCH
b) Teetirahalayidota Irraa
 Teetirahalo alkeenotni daakuun ziinkii bakka jirutti gara alkayinotattii jijjiiramu.
C) Walnyaatinsa H2O fi kaalsiyemkarbayidii
Laboraatorii keessatti aseetiliniin (C2H2) kaalsiyemkaarbaayidii (CaC2) bishaanitti dabaluun qopha’a.
CaC2(s) + 2H2O(l) C2H2(g) + Ca(OH)2
4.2 Kompaawundota Aroomatikii
Kompaawundotni aroomatikii wantoota maraa beenzinii fi kenneen akka beenzinii amala adda fooli ‘’aroomaa ‘’ qaban dha. Gama biraati n kompaawundootni aroomatikii kompaawundota beenzinii fi dhalamoota isaa jedhamuun beekama. Kompaawudoti aroomatikii elektiroon mit quufoo (unsaturated) ta’an il ee amala adda qabu. Kuniis alkiinotnii fi alkaayinootni walnyaatinsa ida’insa yommuu geggeessan aroomatikotni garu, walnyaatinsa bakka buusiin beekamu. Caasaan maramaa beenzinii keessatti hidhoowwan dacha atoomota karboonii jahan iddoo murtawaa waan hin qabneef caasaa qam-makoo uuma. Kun immoo suka’ummaa maraa beezini akka inni ri’eejentoota beekamoo ta’an wali n akka alkiinota fi alkaayinoota walnyaatinsa ida’i nsa hin geggeesine godha.
4.2.1 Moggaasa maqaa kompaawundota Aroomtikii
Kompaawudota orgaanikaa hunda caalatti, kompaawudoti aroomatikic maqaa tiraayivaalentiin ykn maqaa waleen moggaafamu. Isaan keessaa muraasni:-
Tooliyunii Fenoolii Aniliinii
Aseetoophenoonii Beenzinsafooniik asiidii Naaftaaliinii
Beenzooyik asiidii Ortoo-Zaayilinii
Maqaan IUPAC kompaawundota aroomatikii dhawata armaan gadiin kennama
 1ffaa Dhaalamoon beenziin dame tokko qofa qaban haayidirookaarboonota biro waliin haala walfakkatuun moggaafama. Beenzinii akka maqaa hadhootti fayyadamuun moggafama.
Br CH2CH3 NO2
 2ffaa Kompaawudota beenzinii dame alkaayilii yeroo bayyee areenii jedhamu. Beenzinoonni akkasi hamma garee alkaayili irratti hunda’uun, gareen alkeeyili karboon jaha ol-yoo qabate akka alkaanii feenaayiliin bakka buufametti moggaafma. Akkasumaas gareen C6H5 akka hidhootti yeroo argamu feenayilii jedhama.
 3ffaa Beenzinoonni dame lama qaban dursoo ortoo (O), meettaa (M), paaraa (P) jedhamanii moggaafamu.
P Ortoo-daayibiromoobeenzinii Mettaa-daaymitaayilbeenzinii Paraakiloroobiromoobeenzinii
 4ffaa Beenzinoonni dame lamaa ol-qaban kaarboonii qubeelaa beenzinichaatiif lakkoofsi erga kennemeen booda, bakka dameewwan agarsiisuun moggafamu. Lakkoofsa kennuun gama dameewwan lakkoofsa xiqqaa irratti gama argamuun eegala.
4- biroomoo-1,2-daaymitaayiilbeenzinii( sirriidha ) 4-biroomoo-1,6-daaymitaayiilbeenzinii( sirrii miti )
D/ C6H5 E/
A/ P-Biromookiloroobeenzinii B/ P-Biromootoliyunii C/ m-Kiloroo’anaalinii
D/ 1-kiloroo-3, 5-daymitayilbeenzinii E/ O-naaytiroo’analinii
4.2.2 Amaloota kompaawundota Aroomatikii
Kompaawundoti aroomatikii micireewwan elektiroofaayilii waliin walnyaatinsa bakka buusii raawwatu. Kuni s micireewwn elkitroon hir’uu (elektiroofayili ), qubeelaa beenzinii elektiroonii quufaa qabu waliin walnyachuun H isaa bakka buusa. Wal-nyaatinsi bakka bu’i nsa aroomatikii kopaawundota aroomatikii irraa dhalamoota isaanii qopheessuuf oola.
Beenziniin HNO3 waliin bakka H2SO4 jirutti walnyaachuun naaytiroobeenzinii uuma.
+ HNO3        H2SO4 50-550C
Beenziniin H2SO4 cunqina olaanaa qabu wajjiin walnyaachuun beenziin safooniik asiidii kenna.
+ SO3        H2SO4 250C
Bakka aluminiyem kilooraayidii (AlCl3) jirutti beenziniin alkaayil halayidota wajjin walnyaachuun alkayil beenzinoota uuma.
Bakka AlCl3 jirutti kiloorayidotni karboogziliik asiidii beenzinii waliin walnyaachuun alkaayil feenayil kitoonii uuma.
Fkn:- + H3C-C-Cl
4.2.3 Haala Oomisha Beenzinii
 Beeniziinii saayikiloohekseenii bakka si’eessituu pilaatiyaami jirutti ho’isuun adeemsa haayidiroojinii baauun oomishama.
4.3 Garee Alkoolii ykn Haayidrooksaaylii (OH)
Gareen haayidirooksaayili garee ma’i baasi alkooli fi feenooli ti. Alkoolonni kompawudota garee “–OH” karbooni sp3 diqaalometti hidhame yoo ta’u fenooli n garee “– OH” qubeelaa aroomaatikiitti hidhame qaba.
4.3.1 Moggaasa Maqaa Alkoolota
Alkoolotni yeroo tokko tokkoo maqaa walee alkayil alkoolii jedhamuun moggaafamu. Garee alkayili –OH itti hidhame jiru waamuun dhuma irratti jecha alkoolii jedhu dabaluun moggafamu.
Mitayil alkoolii Itayil alkoolii H
 Lakkoofsa garee alkaayilii kaarbooni garee haryidiroosilii qabate irratti hunda’uun
 Garee alkayilii tokko qabu alkoolii sadarkaa 1ffaa (10), (Primary alcohol)
 Garee alkayilii lama qabu alkoolii sadarkaa 2ffaa (20), (Secondary alcohol)
 Garee alkayilii sadi qabu alkoolii sadarkaa 3ffaa (30), (Tertiary alcohol)
R C OH R C H H
OH R C OH R”
CH -CH -CH-CH
Dhawaata itti moggasa maqaa alkoolii seera IUPAC irratti hunda’uun
1ffaa Cancala C-C garee haayidirooksayili (OH) qabatee fi hunda calaa dheeraa ta’e filachuu. Maqaa haadhoo isaas alkeeni wal fakkatu irraa maxxantuu dhuma isaa “–eenii” gara ‘-noolii’ jijjiiru moggasu.
2ffaa Lakkoofsa kaarbonni dheeraa gama haaayidirooksilitti (OH) siiquu jiruun eegalu.
3ffaa Maatii tokko irratti gareen OH iddoo lama fi isaa ol irra yoo jiratan day-oolii (2), tira-oolii
(3) jedhu moggasu. Akkasumaas hidhoon dacha ykn sadee yoo jiraate iddoo argama isaa agaarsiisu.
H C=CHCH OH
OH 2 2 H
4ffaa Feenoolonni akka kompaawundota aroomatikii dameess’ootti feenoolota akka maqaa haadhootti fudhachuun moggaafamu.
Alkoolota armaan gadii sadarkaa 1ffaa, 2ffaa ykn 3ffaa jechuun qoodi.
A. 3,4-Daymitayil -2- heksanoolii
B. 2- Butanoolii
C. t-Butayil alkoolii
D. (CH3)2 COH CH2CH3
A/ CH -CH -CH-CH -CH-CH HO
G/ H3C H3C
Caasaa kampaawundoota armaan gadii barreessi A/ Heksaan-1, 5-dayoolii
B/ 2, 4, 6-Tiraynaayitiroofeenolii
4.3.2 Amaloota fiizikaalaa Alkoolota
Alkoolonni fi feenolonni akka haayidroojiniin bishaanii garee orgaanikii biroon bakka bu’eetti fudhatame ilaalamuu danda’ama. Alkoolonni fi feenoolonni keemistirii isaanii qofa soo hin taanee amaloonni fiizikaalaa isaanii haayidiroo karboonii isaanii irraa adda dha. Qabxiin danfinaa alkoolii alkeenota karboonii walqixa qaban waliin yommuu ilaalaman Kan alkooliitu caala.
 Sababiin isaas alkoolotiin hidhoo haayidiroojinii waan uumaniifi dha.
Hidhoo haayidioojinii uumuu alkoolotaa
 Alkoolotni fi fenoolotni qabxii dafinaa olaanaa Kan qabaatan sababa hidhoo haayidiroojinii uumaniif dha.
Alkoolotni kompaawundota poolara’oo waan ta’ani f bulbulaa poolara’oo kanneen akka bishaani keessatti ni bulbulamu. Bulbulamummaan isaanii garuu akkuma lakkoofsi karboonii dabala deemeen hir’acha deema. Alkoolotni jalqabaa yookiin hanga molakiyularawaa gad aanaa qaban dhangala’oo fooli urga’aa addaa qabani dha. Qabxi n danfina isaani s akkuma lakkoofsi karbooni dabalaa deemeen dabala.
Maqaa Caasaa Lakk. Karboonii Qabxii baqinaa(0C)
Mitaanoolii CH3OH 1 64.5
Itaanoolii CH3CH2OH 2 78.3
Piroopanoolii CH3CH2CH2OH 3 97.0
Butaanoolii CH3CH2CH2CH2OH 4 118.0
4.3.3 Amaloota keemikaalaa (Walnyaatinsa Alkoolota)
A/ Haydiroojinhalaayidota waliin
Alkoolotni HI, HBr ykn HCl waliin walnyaachuun halaayidota uumu.
Fkn:- CH3CH2CH2OH + HCl CH3-CH2-CH2-Cl + H2O
B/ Alkoolii Goggosuu
Alkoolotni H2SO4 ykn H3PO4 wali n yeroo ho’ifaman gara alkiinitti jijjiiramu
R-OH H2SO4 ykn H3PO4 C H + H O
Fkn:- CH3-CH2-CH2-OH H2SO4 CH3-CH=CH2 + H2O
C/ Oksideeffamuu Alkoolii
 Alkoolotni sadarkaa 1ffaa gara aldihayiditti oksideeffamu.
 Alkoolotni sadarkaa 2ffaa gara kitoonitti oksideeffamu.
 Alkoolotni sadarkaa 3ffaa gara haala beekama keessatti hin oksideeffamu
Alkoolii sad.1ffaa Aldihayidii
R-CH-R’ R C
CH3-CH2 C H
Fkn:- CH3-CH2-CH-CH3 [O] CH3
[O] Hin oksideeffamu
[O] Bakka bu’ee oksideeshinii
Gaaffii: – Walnyaatinsa alkooloni geggeessan kanneen biro kitaabota wabii dubbisuun barreessi.
4.3.3 Tooftaa oomishaa Alkoolota
A/ Rideekfama karboonyil kompaawundota
Tooftaan oomisha alkooli inni yeroo baayyee hoji irra olaa ta’e, garee kaarbonayilii liitiyeem aluuminiyeem hayidirayidiin (LiAlH4) tiin rideeksuun dha.
O Rideeksaa (LiAlH4) OH
1) LiAlH4 H CH
CH3 C   3
2) H2O OH
B/ Haydiroojineeshinii aldihayidota fi kitoonota
R C H + H2 Ni/Pt
Fkn:- CH3-CH2 C H O
C/ Haydireeshinii Alkiinotaatiin
Fkn:- CH3-CH2-CH=CH2 H2SO4
D/ Walnyaatinsa alkayil halayidii fi NaOH
R-X + NaOH H2O R-OH + NaX
H2O CH3-CH2-OH + NaCl
4.4 Aldihaayidota fi Keetonoota
Aldihaayidotni fi keetonotni kompaawundota orgaanikii kanneen garee ma’i baasi karboonayili
( C ). Gareen kaarboonaayilii kopaawundoota karboonii fi oksijinii gidduutti hidhoo dachaa kan
O Karboonayil Oksijinii Karboonayil Karboonii
Karbooni n garee karboonayilitti hidhatan lama qabu keessaa tokkoo haaydiroojini yoo ta’e aldihaayidii yommuu jedhamu hidhatni lammanu alkayili ykn arayili yoo ta’e immoo keetonii jedhamu.
R C R’
4.4.1 Moggaasa Maqaa Aldihaayidootaa fi Keetoonota
A) Moggaasa Maqaa Aldihaayidoota
Aldihaayidotni maqaa walee (commen name) jecha Aldhihayidii jedhu dhuma irratti dabalun moggafamu ni danda’u.
Moggasa IUPAC aldehayidota keessatti maqaan hadhoo aldeehaayidota maxxantuu booda
“-eenii” alkeenota lakkoofsa karboon walfakkaata qabanii gara “–aanaalii” ti jijjiiruun kennama.
 Cancala kaarboonii dheeran yeroo mara garee –CHO kan qabte ta’ee, yoomiyyuu kaarbooni n garee karboonayilii irraa lakkoofsa eegalu.
Etanaalii Piroopanaalii 5 4
CH -CH -C-CH -CH
CH3-C-CH2-CH2 C H
CH2=CH-CH2-CH2-CH2-CH2 C H
 Aldehayidoota walxaxoo gareen –CHO qubeelatti hidhamee jiruuf maxxantuun boodaa
karbaaldhaayidii maqaa isaanii keessatti gala.
CHO CHO C H
Saaykiloohekseen karbaaldihaayidii 2-Naaftaaliin karbaaldihaayidii
B) Moggaasa Maqaa Keetoonota
Keetoonota akkuma aldihaayidota maqaa walee garee alkayil ykn arayilii itti hidhatee dursuun dhuma irratti jecha keetoonii jedhu itti dabaluun moggasuun ni danda’ama.
Fkn:- H3C C
Aseetoonii Itayilmitayil keetoonii Itayilpiropayil keetoonii Fenayilpiropayil keetoonii
 Moggaasa IUPAC keetonii keessatti maqaa hadhoo isaanii maxxatuu booda “–eenii “alkeenota karboon walfakkaataa qaban gara “-aanoonii” ti jijjiiruun moggaafama.
 Cancalli dheeran akka maqaa haadhootti filatamu garee karboonayilii keetoonii qabachuu qaba.
 Lakoofsa kennuun gama garee kaarboonaaylii itti siiquun eegalama.
CH CH CCH CH CH
Piroopaanoonii 3-heksaanoonii 4-heksiinii-2-aanoonii
 Kompaawundotni keetoonii muraasni maqaa walee (common name) isaanii akka maqaa IUPAC itti kan fudhataman ni jiru.
A/ CH -CH C CH-CH
B/CH3-CH=CH-CH2-CH2 C H C/
COCH3 CH -CH-CH -C-CH G/
CH -C-CH -CH-CH -CH
F/ 3 2 3
A/ 3-mitayil-3-butiinaalii B/ 3-mitayilbutanaalii
C/ 4-kiloroo-2-pentanoonii D/ 2, 2-daymitayilsaaykilooheksenkarbaaldihayidii
4.4.2 Amaloota Fiizikaalaa
Gareen karboonayilii ( C
) hidhoo sigma (δ) karbooni fi karbooni jidduu akkasumas
hidhoo payi (π) karbooni fi oksijini jidduu waan jiruuf wal-harkisa bant-lamee uumuun poolara’oo ta’u.
Ykn C O
Qabxiin danfina fi qabxiin baqina aldihaayidota fi keetoonota kan alkeenoota lakkoofsa karboonii wal qixa bani ni caala. Kunis kan ta’u danda’e sababa poolariti garee karboonayili qabanifi dha. Haa ta’u malee, qabxi n danfina aldihaayidota fi keetonoota kan alkoolota fi karboogziliik asi dotaa ti gadi dha. Kun immoo kan ta’u danda’e sababa alkoolotni fi karboogzili k asi dotni hidhoo cimaa haydiroojinii yommuu qabaatan aldihaayidotni keetonotni garu hin qaban.
 Cimina wal-harkisa jidduu molakiyulotaan:
< Aldehayidota fi ketoonota (Poolara’oo)
Gama birootiin qabxiin danfina aldihaayidota fi keetoonota hanga molakiyularawaa waliin dabala deema. Oksijiniin garee karboonayilii irratti argaman aldihaayidota fi keetoonota bishaan waliin hidhoo haydiroojinii akka uuman godhe jira. Kanaafuu, aseetonii fi aseetaldihaayidii guutumma guututti bishaan keessatti bulbulamu.
4.4.3 Amaloota Keemikaalaa
Sadhataaan walnyatinsa keetoonii fi aldehaayidii
Walnyaatinsa ida’insaa nukiloofilikii keesatti aldehayidotni keetoonii caalatti saffisaan walnyaatinsa raawwatu. Kuniis yommuu dhiibbaa isteerikii elektiroonotatiin ibsamu. Keetoonii keessatti karbooni n elektroofilikii ta’e gareewwan alkaayili lamatti hidhamee jira waan ta’eef
caalatti sukaawaa dha. Kuniis yommuu sukaawummaa kaarbookaatayiniin ibsamu. Karbookaatayonni 20 caalatti sukawaa dha ykn walnyaatinsatti hin ariifatu.
C R’ R
suka’aa gad-aanaa saffisaan wal-nyaata.
baay’ee suka’aa suuta wal-nyaata.
Walnyaatinsa keetoononni fi aldehaayidoonni yeroo baayyee raawwatan ida’insa nukuloofilikii ti.Akka maqaan isaa agarsi suu, kuun ida’insa nuukiloofaayili (-: Nu) elektirofaayiliitti hidhu agarsisa. Elektiroofayiliin karboonii karboonaayilii ti. Nuukiloofayiloonni ri’ejentoota hedduu kaneen akka, OH- , H-, R3C-, H2O, H2N, ROH fi k.k.f ta’uu danda’u.
A/ Ida’iinsa Haydirayidii (H-): Ridaakshinii
Aldihaayidotni bakka soodiyemboroohaydirayidii (NaBH4) yknAluminiyemlitiyemhaydirayidii (AlLiH4) jirutti haydirayidii (H-) yommuu itti ida’amu alkooli sadarkaa 1ffaa kenna. Haaluma walfakkaatuun keetooniin alkoolii sadarkaa 2ffaa itti rideekfama.
R C H H3O+
Aldihaayidii 10 Alkoolii Keetoonii
C H NaBH4
C CH -CH
B/ Ida’iinsa Girignaard Ri’eejentii
Girignaard ri’eejenti n halayidota orgaanikii sibiila Mg wali n bulbula itari keessatti walitti makuun uumama( R-MgX). Ri’eejenti n kun aldihaayidota fi keetoonota wali n wal-nyaachuun alkoolii uuma.
R- Mg+X +
C O R-C-O-MgX
Aldihaayidii ykn Keetoonii
Ayoonii Alkoosayidii Alkoolii
Fkn:- CH3-CH2 C H
CH -CH-CH C H +
2, H3O+ 3 2 2
C/ Ida’iinsa Haydiroojin Siyaanayidii (HCN)
Walnyaatinsi kun ayooniin siyaanayidii nukiloofilikii waan ta’eef karbooni karboonayili hanqina elektirooni qabutti ida’ama. Ayooni n alkoosayidii uumamees H+ ofitti dabaluu n siyaanoohaydirini uuma. Walnyaatinsi kun si’eessitu beezi itti fayyadamuun cunqina CN- dabala.
D/ Ida’iinsa Alkoolota
Alkoolotni bakka asi dii cal abba’aa HCl jirutti aldihaayidota fi keetoonota wali n walnyaachuun kompaawundota suka’aa hin taanee dura duubaan hemi’aseetali fi hemikeetali kennu. Kopaawundotni kunis itti fufiinsaan alkooli wali n walnyaachuun kopaawundii suka’aa duraa duubaan aseetalii fi keetaalii kennu.
Aldihaayidotni bakka CrO3 jirutti haala salphaan gara karboogzili k asi diitti (RCHO→ RCO2H) yommuu oksideeffaman, keetoonotni garuu hin oksideeffaman. Garaagarummaan kunis kan ta’u danda’e caasaa aldihaayidii keessatti adeemsa oksideeshini n haydiroojini n salphaan yommuu dhabamsiifamu keetoontini garu haydiroojinii dhabasiifamu hin qaban.
Walnyaatinsi hin raawwatu
CH3CH2CH2CH2CH2 C H
Heksanaalii Heksanoo’ik asiidii
Gaaffii: – Walnyaatinsa biro aldihaayidootni fi keetoonotni geggeessan kitaaboota wabii irraa dubbisuun barreessi.
4.4.4 Qophii Aldihaayidotaa fi keetoonotaa Alkoolota Oksideessuu
Tooftaan keetonotaa fi aldehaayidota itti oomishaman inni tokko alkoolii oksideessuu dha. Alkoolonni sadarkaa 1ffaa (alkaayilii tokkoon (10)) gara aldehaydiitti oksideeffama. Alkoolonni sadarkaa 2ffaa (alkaayilii lama (20)) gara ketoonitti oksideeffamu. Haala asiidawaa keessatti wantootni kanneen akka CrO3, K2Cr2O7 akka oksideesatti garaaru.
R C OH CrO3 R C H
CH CHCH CH CH
4.5 Asiidota Karboogziliikii fi Dhaalamota Isaanii
Asidii karbogizilikii gareen karboogzilii (-COOH) of keessatti kan qabu dha.Karboogziliik
asiidotni formula waliigalaa R-COOH ykn RCO2H ( R C OH ) ittiin ibsamu. Akkuma asiidota
inorgaanikii waraqaa litmasii cuquliisa gara diimaatti jijjiiru. Akkasumas beezii waliin walnyachuun ashaboo fi bishaan uumu. Wantootni beekamon tokko tokko kanneen jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti itti gargaarammu asiidii organikii of keessaa qabu.
Fkn:- Foormiik asiidii (HCOOH) – Ilbiisota kanneen akka tussee keessatti argama.
Aseetiik asiidii (CH3COOH) – Farsoo dhangagga’ee keessatti ni argama
Butayriik asiidii (CH3CH2CH2COOH) – Dhadhaa dhangagga’ee keessatti ni argama.
4.5.1 Moggasa maqaa Asiidotaa Karbogzilikii
Asidii karbogizilikii sasalphaan hanga karboonii shanii qofa qaban maqaa beekamaan yeroo heddu waamamu.
HCOOH Formik asiidii (Maqaa laatiinii Formikaa ykn Tussee)
CH3COOH Asetik asiidii (Maqaa laatiinii Asetam ykn Dhangaggoo )
CH3CH2COOH Piropiyonik asiidii (Maqaa Giriikii Piroto ykn Jalqaba)
CH3CH2CH2COOH Butayrik asiidii (Maqaa Laatinii Butayrami ykn Dhadhaa)
CH3CH2CH2CH2COOH Valerik asiidii (Maqaa Lelariyaa ykn Gosa biqiltuu)
CH3CH2CH2CH2CH2COOH Kapiroo’i k asi dii (maqaa Laatini kappeer ykn fooli gogaa re’ee keessatti argama.
Moggasa maqaa IUPAC Asidii karbogizilikii
 Maqaan maati ta’u danda’u isaa dheeraa fi walitti fufaa ta’e garee karboogzayili of keessatti kan qabu ta’u qaba. Akkasumaas maqaa alkeenotaa irraa “ii” dhumaa hir’isuun dursituu “Oyiik” jedhutti jecha asi dii jedhu dabalun moggafama.
 HCOOH Metanoyiik asiidii
 CH3CH2COOH Piropaanoyiik asiidii
 CH3(CH2)5 COOH Heptaanoyiik asiidii
 Yeroo Asidii karbogizilikii damee dabalataa qaban moggafanu gama garee karboogzilikii (COOH) irraa jalqabunlakkoofsi itti kennama.
CH3CHCH C OH
3- kiloroo -4,5-Daymitayilhegzanoyiik asiidii
 Asidii karbogizilikii alkiini ykn hidhoo dachaa of keessaa qabu maqaa alkiini irraa “i ” dhuma gara “oyi asi dii” itti jijji ru fi bakka itti argama hidhoo dacha lakkoofsaan agarsi suu.
4- mitayil-3-heksiinoyiik asiidii 6-biromoo-4-itayil-7-fenayil-4-oktiinoyiik asiidii
 Saaykiloo alkeenotni garee karboogzayilii itti hidhate qaban moggaafamni isaanii saaykiloo alkeenkarboogzili k asi dii jechuun ta’a. Akkasumaas lakkoofsi bakka gareen COOH hidhame jiru irraa tokko jedhee eegala.
3,3-daymitayilsaaykiloohekseenkarboogziliik asiidii 2-saaykiloopentiinkarboogziliik asiidii
 Gareen karboogzili garee ma’i baasii biro kan akka haydirooksii (garee alkoolii) waliin jiraate gareen karboogzilii akka maatitti fudhachuun garee haydirooksii akka damee maqaa haydirooksii jedhamuun moggaafama.
CH3-CH2-CH-CH-CH2 C OH
 Gareen karboogzilii aroomatikitti hidhame yoo jiraate aroomaatik asiidii (Ar-COOH) yommuu jedhamu moggaasni maqaa isaaniis beenzooyiik asiiditti moggaafamu.
Beenzooyiik asiidii Cl Cl
 Asidiin karbogizilikii garee karboogzili (COOH) lama yoo qabaatan “dayoyi k” asi dii itti dabaluun moggaasuu. Lakkoofsi gama hidhaatni dhiyaatuun eegalu qaba.
A/ CH3-C-CH2(CH2)3-CH2-C-COOH C/
A/ 2, 2, 5-tiraymitayilheksaanoyiik asiidii B/ P-biromoobeenzoyiik asiidii
C/ 4, 5-daymitayil-3-fenayiloktaanoyiik asiidii D/ 2, 4, 6-tiraynaytiroobeenzoyiik asiidii
4.5.2. Amaloota Fiizikaalaa Asiidotaa Karbogzilikii
Asidotni karbogizilikii kompaawundota poolarawoo dha. Poolara’ummaan isaani s haala adda ta’en poolara’umma cimaa garee ma’i baasi lama irraa uumama. Isaani s haydirooksayili (-OH) fi karboonyilii (C=) dha.
Asidotni karbogizilikii salphaa ta’an kanneen lakkoofsa karbooni saddeeti (8) gadi qaban tempireechera dareetti dhangala’oo hal uu dhabeessa yommuu ta’an, kanneen lakkoofsa karbooni ol-aanaa qaban jajjaboo dha. Qabxiin danfina karboogziliik asiidota kan alkoolota lakkoofsa karboonii wal-qixa (hanga molakiyularawaa wal-qixa) qabanuun ni caala. Kuni s kan ta’u danda’e karboogzili k asi dotni wali isaani jiduutti hidhoo haydiroojini cimdii uumuun suka’ummaa cimaa ni uuma.
Fkn: – Formiik asiidiin hangi molakiyularawaan isaa 46 dha. Kan itaanooliis hangi molakiyularawaan isaa 46 yommuu ta’u qabxi n danfinaa formic asi dii 1000c yeroo ta’u kan Itaanolii 780c dha. Akkasuma hangi molakiyularawaa piroppanoyiik asiidii fi butaanoolii lachuu 74 dha. Qabxiin danfinaa isaanii duraa duubaan 1410c fi 1180c dha.
Gama birootiin karboogziliik asiidotnibishaanii wajjiin hidhoo haydiroojinii cimaa uumuun beekamu. Sababa kanaaf Asidotni karbogizilikii lakkoofsa karboonii gad-aanaa qaban haala salphaatti bishaan keessatti bulbulamu. Haa ta’u malee bulbulamummaan isaani akkuma lakkoofsi karbooni dabaluun hirr’acha deema.
4.5.3 Amaloota keemikaalaa Asiidota Karboogziliikii A/ Ashaboo uumuu Asiidota karboogziliikii
Asidotni karbogizilikii beezota cimaa, karboonetoota fi baaykaboonetoota waliin wal-nyaachuun ashaboo karboogzleetii fi bishaan uuma.
2 H3C C OH
2 H C C ONa + H O + CO
B/ Isteerii uumuu asidota karbogizilikii (Isteerifikeeshinii)
Bakka asiidii cimaan jirutti karboogziliik asiidotni alkoolii waliin wal-nyaachuun isteerii uumu. Adeemsi kuniis isteerifikeeshinii jedhama.
R C OR’
CH -CH -CH -COOH + CH3-CH2-OH HCl
C OH + CH3-OH
C OCH3 + H2O
C/ Jijjiirama gara amayiditti ta’u
Bakka ho’i jirutti karboogziliik asi dotni amooniyaa wali n walnyaachuun amayidoota uumu.
R C OH +
O Amayidii O
Fkn:-CH3-CH2-CH2 C OH
NH3 Ho’a CH3-CH2-CH2 C
D/ Jijjiirama gara asayil halayiditti ta’u
Karboogziliik asiidotni bakka tayonayil kiloorayidii (SOCl2), PCl5 ykn PCl3 jirutti walnyaatinsa geggeessuun asayil kiloorayidii uuma.
CH3COOH + SOCl2 CH3COCl + HCl + SO2 CH3CH2CH2COOH + PCl5 CH3CH2CH2COCl + HCl + POCl3
E/ Jijjiirama gara asiid anhaydiraayidii ta’u
Karboogzili k asi dotni lama bakka fosforees penta’oksaayidii (P2O5) jirutti bishaan keessaa goggoossuun asiid anhaydiraayidii uumu.
Gaaffii: – Qophii karboogziliik asiidota beekamoo ta’an kitaboota wabii dubbisuun dareef dhiyeessi.
Isteeri n dhalamoota karboogzili k asi dii ta’e, gareen “OH” karboogzili k asi dii garee “OR” (alkooksi ) bakka bu’uun kan uumamu dha. Foormulaan waligalaa isteeri RCOOR’ ykn RCO2R’
Isteerotni baayinaan kompaawundota uumamaan argamani fi dhangala’oo fooli gaari qabani dha. Isteerotni hedduun fuduuraalee fi kompaawundota dhugaatii adda addaa keesstti foolii gaarii kennuun beekamu. Isteerota uumamaan argaman keessaa muuraasni gabatee armaan gaditti kennamaniiru.
Maqaa IUPAC Caasaa kompaawundicha Wantootni foolii uumaaman keessatti argamu
Mitayilbutanoyeetii CH3(CH2)2COOCH3 Anaanaasii
Ayisoopentayilasiteetii CH3(CH)CH3CH2CH2COOCH3 Muuzii
Okatayilitanoyeetii CH3COO(CH2)7CH3 Burtukaana
4.6.1 Moggasa maqaa IUPAC Isteerota
Maqaan isteerotaa jechoota lama of keessaa qaba inni jalqabaa maqaa alkoolii irraa kan fudhatamee fi inni lammataa maqaa karbogzilik asiidii irraa kan argamu dha.
R C O R’
kuta karboogzilii kuta alkoolii
 Moggaasa maqaa IUPAC isteeri keessatti jalqaba irrtti kutaan alkooli dhuma isaa “oli ” jedhu gara “yil” jijji ruun kanneen akka mitayil,itayil, butayil fi kkf fayyadamu.
 Itti aansuun kutaa karboogzili k asi dii dhuma isaa “asi dii” jedhu “oyeeti ” n bakka buusuun moggaasu.
Istariin kun itayil alkoolii fi piroopanoyiik asiidii irraa waan uumameef dura maqaa alkayil alkoolii irraa dhufee itayili waamuun kan asi dii irraa argametti “oyeeti ” dabaluun Itayil piroopanoyeetii jennaan.
Piroopanoyiik asiidii fi t-butayil alkoolii irraa waan uumameef maqaa guutuun isaa t- butayilpiroopanoyeetii ta’a.
Fkn:- CH CHCOCHCH O
3 3 COCH CH Cl
CH3 2 2
4.6.2 Amaloota Fiizikaalaa Isteerota
Isteerotni kompaawundota poolarawoo dha. Sababa hidhoo haydirojinii oksijinitti hidhate hin qabneef molakiyulootni isaani hidhoo haydiroji ni cimaa ta’e wali n hin uuman. Sababa kanati f qabxiin danfinaa isteerota kan karbogiziliik asiidiitiif kan alkoolotatii gad dha. Qabxiin danfinaa isteerotaa kan aldihaayidotaa fi keetonota hangi isaanii walitti dhiyaatutti kan siqe dha.
Maqaa Caasaa Qd(0c) Qd(0c) Bulbulamumman
Mitayil formeetii HCO2CH3 -99 31.5 Bayyee bulbulama
Itayil formeetii HCO2CH2CH3 -79 54 Ni bulbulama
Mitayil asiteetii CH3CO2CH3 -99 57 24.4
Itayil asiteetii CH3CO2CH2CH3 -82 77 7.39
Piropayil asiteetii CH3CO2CH2CH2CH3 -93 102 1.89
Butayil asiteetii CH3CO2CH2(CH2)2CH3 -74 125 1.0
Itayil piropanoyeetii CH3CH2CO2CH2CH3 -73 99 1.75
Isteerotni hanga molekiyularawaa salphaa qaban haala salphaan bishaan keessatti bulbulamu. Bulbulamummaan isaaniis akkuma hangi molakiyularawaa dabaluun hirr’acha deema.
4.6.3 Amaloota Keemikaalaa Isteerota
Walnyaatiinsi beekamoon istarootni geggessan bakka bu’i nsa niwukilotilikii jedhamuun beekama. Akkuma dhaalamoota karboogziliik asiidotaa kanneen biro istarootni niwukilofaayiloota walin salphatti walnyaatu.
Isteerotni bakkaa bulbula asiidii cimaan ykn beezii cimaan jirutti bishaan ofitti dabaluchuun haydiroolisisii jedhama. Haydiroolisisiin isteerota bakka asiidii cimaa kanneen akka H2SO4 jirutti taasifamu karboogziliik asiidii fi alkoolii kenna.
R’ + H2O
R’-OH O O
OCH3 + H2O
Mitayilbeenzoyeetii Beenzoyiik asiidii
Haydiroolisisiin isteroota bakka beezii cimaan jirutti taasifamu ashaboo karboogziliik asiidii fi alkoolii kenna. Haydiroolisisiin beezii cimaa kanneen akka NaOH ykn KOH waliin taasifamu sappoonifikeeshinii ykn saamuna uumuu jedhamuun beekama. Saamunaan haydiroolisisii cooma bineeldota ykn zaayita (isteerii) fi beezota irraa argama.
R’ + NaOH
R C ONa + R’-OH
B/ Aminoolisisii: – Walnyaatiinsa istarii fi amoniyaa giddutti geggeffamun amayidoota uumu dha.
C + R’-OH
R’ + NH3
Fkn:- CH3CH2CH C
C/ Rideekfama isteerotaa
Isteerootni bakka litiyeem aluminiyem haydirayidiin (LiAlH4) jirutti gara alkoolii sadarkaa 1ffaa tti rideekfamu. Rideekfamni isteerotaa haala kana keessatti taasisaan alkoolii lama tokko kuata karboogziliik asiidii irraa inni biro immoo kutaa alkoolii irraa uumama.
O 1, LiAlH
4.6.4 Qophii Isteerota
Malli beekaman isteerota oomishuuf oolu walnyaatiinsa karbo0gizilik asiidii fi alkoolii ti. Walnyaati nsicha bakka si’eessituun asi dii cimaa jirutti karboogzili k asi dii fi alkooli n taasisaan isteerifikeeshinii jedhamuun beekama.
R C OH + R’-OH
R C O R’ + H2O
Gaaffii: – Qophii isteerota kanneen biroo kitaboota wabii dubbisuun barreessi.
Itariin kompaawundii orgaanikii atoomii oksijinii karboonota lamatti hidhate argamu dha. Gareen Iterii formula waliigala R-O-R, ykn R-O-R’ qabu. Yoo R’ garee alkaayil ykn garee araayli ta’e. Gareen alkayili ykn araayili (R ykn R’) lammaan walfakkataa yoo ta’an itari semetiriikaa (itarii garee wal-fakkataa) yomuu jedhamu gareen lamman adda addaa yoo ta’e immoo itarii ansemetiriikalaa (itarii garee wal hin fakkatne) jedhama.
Fkn:- CH3CH2-O-CH2CH3 CH3CH2CH2-O-CH3
Itarii semetiriikaalaa Itarii ansemetiriikaalaa
R R Caasaan itarii caasaa bishaani waliin wal-fakkataa
Moggasa Maqaa IUPAC Itarota
Tooftaalee adda addaa lamaatti fayyadmuun maqaa IUPAC itari kennuun ni danda’ama. Itarootni sasalphoo ta’ani f gareewwan lamaan oksiji nitti hidhaman akkaata duraa duuba maqaa isaani adda basuun jecha iterii jedhu itti dabaluun moggaasu.
Itaroonni walxaxoo ta’an ykn garee ma’i basi tokko ol qaban, seera IUPAC itararotan akka akooksii alkeenii, alkooksii alkiinii ykn alkooksii alkayiinii fayyadamuun moggaasu.
A/ CH CCH OCH CH B/
E/ (CH3)3COCH2CH2CH3 F/
A/ Itayil ayisopiropayilitarii
B/ 2-Itooksii-4, 5-daymitayildekeenii
C/ 2-kiloroo-4-itooksii-2- mitayil-1-heksiinii
Kompaawundotnii tetirahaydiroofuranii fi furanii garee itariitti ramadamu caasaa kopaawundota kana barreessi.
4.7.1 Amaloota Fiizikaalaa Itaroota
Itaroonni kompaawudota dhaalamoo bishaanii Kan Haayidiroojiniin isaa lamaan garee orgaanikii biroon bakka bu’ani dha. Caasaan gi’oometiri isaani Kan bishaani wali n walitti siiqa. Atoomiin oksijinii SP3 Kan diqaalaa’e dha. Itaroonni gree -OH waan hin qabanneef hidhoo haayidiroojinii hin uuman. Kanaafuu qabxii danfinaa gad-aanaa qabu. Atoomiin harkisa elektiroonii cimaa qabu oksijinii waan qabaniif daayipoolii uumu. Kanafuu qabxiin danfinaa isaanii Kan alkeenotaa xiqqoo caala. Itaroonni hidhoo walnyatinsatti saffisaa ta’ee π waan hin qabnneef akkasumas pirootonii salphatti gadhiisu sababn hin qabanneef walnyaatinsatti dhadhaboo dha. Garuu akka bulbulaa organikaatti gargaaru.
Wal-bira qabiinsa qabxii danfina itarota, alkoolota fi alkeenota.
Caasaa Maqaa Hanga molakiyularawaa Qabxii danfina 0C
CH3OCH3 Mitayil itariii 46 -25
CH3CH2OH Itanoolii 46 +78
CH3CH2CH3 Pirooppeenii 44 -42
CH3CH2OCH2CH3 Dayitayil itarii 74 +35
CH3CH2CH2CH2OH 1-Butanoolii 74 +118
CH3CH2CH2CH2CH3 n-penteenii 72 +36
4.7.2 Amaloota Keemikaalaa Itaroota
Itarootni orgaani k keemistiri keessaatti ri’eejentoota adda addaa wali n walnyaatinsa geeggeessuuf si’awoo miti. Haa ta’u malee dayalkayil itarootni asiidota cimoo kanneen akka HI, HBr wali n ho’isuun wal-nyaatinsa cabu hidhoo karboonii fi oksijiinii uuma.
R-O-R + HI R-OH + R-I
Fkn:- CH3OCH2CH3 + HI CH3CH2OH + CH3I
4.7.3 Qophii Itarootaa A/ Alkoolii goggogsuu
Si’eessituun asi dii cimaa bakka jirutti alkoolotni gara alkiinitti goggogsuun akka danda’amu kanaan dura ilaal e jirra. Haa ta’u malee tempireechera of eeggannoon gargaaramuun alkoolota gara itaritti jijjiruun ni danda’ama. Goggogsuun alkooli gara itari goggogsu alkooli gara alkiini caala tempireechera gad-aanaa irratti raawwata.
ROR + H2O
B/ Walnyaatiinsa sodiyem Alkooksaayidii fi alkayil halayidotaa
Sodiyem alkooksayidotni alkooli n sodiyemi wali n walnyaachisuun qophaa’u. Inni s alkayil halayidoota waliin salphatti walnyaachuun itaroota simeetrikii (R–O–R) ykn kanneen ansimeetrikii (R–O–R’) uumu.
ROH + Na RO-Na+
RO-Na+ CH3CH2Br CH3CH2OR +NaBr
CH3-CH2-CH2-CH2-O-H + Na CH3-CH2-CH2-CH2-O-Na
CH3-CH2-CH2-CH2-O-Na + CH3-Br CH3-CH2-CH2-CH2-O-CH3 +
Amaayinotni kompaawundota orgaanikii (RNH2, R2NH fi R3N) ta’ani akka dhaalamoo amooniyaa, kan haayidiroojiniin amooniyaa gareewwan orgaanikii tokkoo fi tokkoo oliin bakka buufamani ti. Amaayinootni garee orgaanikii naytiroojinitti hidhate jiru irratti hunda’un amaayini sadarkaa 1ffaa garee alkayilii tokko kan qabu (RNH2), amaayinii sadarkaa 2ffaa garee alkayilii lama kan qabu (R2NH), fi amaayinii sadarkaa 3ffaa garee alkayilii sadi kan qabu (R3N) jedhamuun beekama.
H   H C-H C
H3C-H2C N 3 2
H Amaayinii 30
4.8.1 Moggaa Maqaa IUPAC Amaayinii
Moggaasnii maqaa amaayinii sadarkaa 1ffaa (RNH2) alkaayilamiinii ykn alkeeniiamiinii haala jedhamuun yommuu ta’u, maqaa haadhoo isaas alkeeni wal fakkatu irraa maxxantuu dhuma isaa “–eenii” gara ‘-amiinii’ itti jijjiiruun moggaasu. Gareen amaayinii karboonii cancaala dheera qabu irrati kan hidhame fi hidhatni biro maatii irratti hidhame yoo jiraate lakkoofsaan agarsiifamu qaba.
Itaayilamiinii ykn Iteenamiinii
1-mitaayilbutaayilamiinii ykn 2-peentanamiinii
Moggaasnii maqaa amaayinii sadarkaa 2ffaa fi 3ffaa haala dursoo N- amaayinii itti hidhate jiruutti moggaafama. Gareen alkayilii tokkoon tokkoo atoomii N itti hidhame jiru akka maqaa N-alkayil jedhamuun moggaafama. Hadhoon isaa garee amaayinii isaa qabuu fi cacala karboonii dheera qabu filatachuun lakkoofsa kennu.
Gareen amaayini kompaawundii garee ma’i baasi biro qabu wali n ta’e, -NH2 akka amiinoo, – NHR akka N-alkayilamiinoo fi –NR2 akka N, N-dayalkayilaminoo itti moggaafamu
4.8.2 Amaloota Fiizikaalaa Amaayinoota
Amaayinootni sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa wali isaani jidduuttis ta’e bishaani wajji n hidhoo haydiroojinii yommuu uuman amaayinootni sadarkaa 3ffaa garuu bishaanii wajjiin malee walii isaani jidduu hidhoo haydiroojini uumuu hin danda’an. Amaayinootni molakiyularawaa salphaa qaban sadarkaa 1ffaa , 2ffaa ta’e 3ffaan haala gaari n bishaan keessatti bulbulamu. Haa ta’u malee akkuma hangi molakiyularawaa isaani dabalaa deemeen bulbulamummaan isaani hirr’cha deema.
4.8.3 Amaloota Keemikaalaa Amaayinoota A/ Amala beezummaa amaayinii
Garee amaayinii keessatti elektirooniin hidhoo hin uumne (lone pair of electrons) atoomii naaytiroojinii irratti argamu amaayiniin amala nukiloofilikii fi amala beezummaa akka qabaatu taasise. Beezummaan alkayil amaayiniin sadarkaa 1ffaa amooniyaa ni caala.
Amaayinii akka nukiloofilikitti
R N + CH3-I
R N CH3 + I-
Amaayinii akka beezitti
R N + H-Cl
beezi H asiidii
B/ Ashaboo uumuu amaayinoota
R N H + Cl-
Amaayinootni kompaawundota beezawoo waan ta’ani f asi dota inorgaanikii wali n walnyaachuun ashaboo uumu.
CH3CH2-NH2 + HCl CH3CH2-NH3Cl
Itayilamiinii Itayilamooniyem kiloorayidii
C/ Walnyaatinsa asiid- kiloorayidii waliin taasiisan (Asiileeshinii)
Amaayinootni sadarkaa 1ffaa asiid- kiloorayidii waliin walnyaachuun amaayidii hidhata N- qabu yommuu kennan walnyaatinsii asiid- kiloorayidii amaayinii sadarkaa 2ffaa waliin taasiisu immoo
amaayidii hidhata N, N- qabu kenna. Amaayinootni sadarkaa 3ffaa garuu asiid-kiloorayidii waliin walnyaachuun amaayidii kennuu hin danda’an.
Gaaffii: – Walnyaatinsa amaayinootni geggeessu danda’an kitaabota wabii dubbisuun barreessi.
4.8.4 Qophii Amaayinoota
A/ Walnyaatinsa alkayil halayidota fi amooniyaa
Makaan amaayinoota (10, 20 fi 30) amooniyaa alkoolii keessatti bulbulame alkayil halayidota wali n walnyaachisuun ni qopha’u.
Fkn:- NH3 + CH3I CH3NH2 + HI
CHNH2 + CH3I (CH3)2NH + HI
(CH3)2NH + CH3I (CH3)3N + HI
B/ Wal nyaatinsa alkoolii fi amooniyaa
Bakka aluminaa (Al2O3) tempirecheera 4000C ho’e keessaati hurka amooniyaa fi alkooli dabarsuun makaa amaayinoota (10, 20 fi 30) qopheessuun ni danda’ama.
Fkn:- NH3 + CH3OH CH3NH2 + H2O CHNH2 + CH3OH (CH3)2NH + H2O (CH3)2NH + CH3OH (CH3)3N + H2O
Garee orgaanikii armaan gadiitiif formula waligalaa garee ma’i baasi isaani barreessi
B/ Aldihaayidii C/ Keetoonii
D/ Karboogziliik asiidii E/ Itarii
G/ Asiid-kiloorayidii H/ Amaayidii
Caasaan armaan gadii teetiraasayikiliiniin antibayootiksii dhukkuboota bakteeriyaan dhufaniif kennamu dha.Gareewwan ma’i baaftuu qorcha kana keessaa shanaan tarreessi.
Caasaawwaan armaan gadii kennamaniif maqaa IUPAC isaanii moggaasi.
CH3CHCH2CH3 A/ CH3CH2CHCH2CH3
G/ CH3CH2CH2CH=CHCHCH2CH3 H/
Maqaa IUPAC armaan gadii kennamaniif caasaa isaanii barreessi A/ 3-Itayil-2, 2-daymitayilhepteenii
B/ 3, 4-Dayayisoopiropayil-2, 5-daymitayil-3-heksiinii C/ 2, 3, 3-Tiraayitayil-1, 4, 6-Oktaatiraa’iinii
D/ 1-Mitayil-1, 3-saaykiloopentadaa’iinii E/ 2, 2-Daymitayil-2-pentayiini
F/ 2-Mitayil-2-heksaanoolii G/ 3-Saaykilooheksiin-1-oolii
H/ 2, 4, 6-Tiraaynaytiroofenoolii I/ 3-Mitayil-3-butiinaalii
J/ 2, 2-Daymitayilsaaykiloohekseenkarbaaldihayidii K/ 4-Kiloroo-2-pentaanoonii
L/ 2, 3-Daymitayilheksaanoyiik asiidii M/ O-Haydrooksiibeenzoyiik asiidii
N/ 2, 2-Daymitayilpiropanoyil kiloorayidii O/ N-Mitayilbeenzamaayidii
Walnyaatinsa armaan gadii xumurii
A/ CH3-CH2-CH3 + Cl2 Ho’a
C/ CH C=CHCH CH
F/ CH3CHBrCHBrCH3 2KOH/C2H5OH
I/ CH3CH2COOH + CH3OH H2SO4
K/ 1, LiAlH4
Poliimeerota, Coomaa fi Zayita
Boqonaa kana keessatti poliimeerotaa fi gosoota poliimeerota barana.
Poli meeri kan jedhu jecha Giri kii irra dhufe ta’ee poli jechuun baayyee yeroo ta’u meri jechuun immoo yuunitii jechuu dha.Poliimeerii jechuun molaakiyuloota hanga molakiyularaa guddaa qaban ta’ani yuunitoon xixiqoon(monomer) irra dedeebiin walitti hidhamuun uumamu.Monoomeri jecha Giri kii irraa dhufe ta’ee monoo jechuun tokkoo yeroo ta’u meri immoo yuunitii dha. Monoomerii yuunitoota xixiqoo walitti hidhamuun poliimeerii uumani dha.
Poli meerootni akkaataa argama isaani irratti hunda’uun bakka lammatti qoodamu. Isaanis poliimeeroota uumamaa fi poliimeroota namitolchee jedhamu. Poliimerootni uumama kanneen akka pirootinii, kaarboohayidireetii, gommaa uumamaa(natural rubber) ,jirbii fi kkf dha. Poliimerootini nam-tolcheemoo kanneen akka kirrii nam-tolchee(synthetic fibers),politaayilinii, gommaa nam-tolchee fi kkf dha. Akkasumas poliimerootni adeemsa uumamuu isaanii irratti hunda’uun bakka lammatti qoodamu. Isaanis poli meeri ida’amaa (addition polymer) fi poliimeerii cuunfamaa (condensation polymer) jedhamu.
Poliimeerii ida’amaa(addition polymer)
 Adeemsa monoomeriin wal-nyaachuun poliimeerii yeroo uumu atoomiin bahu hin jirredha.
 Monoomeroota hidhoo dhachaa fi isaa ol qaban keessaatti uumama.
 Poliimeerootni nam-tolchee baayyinaan adeemsa kanaan uumamu. Fkn:- polaayiitayileenii, polaayiveenaayilii fi kkf.
Poliimeerii cuunfamaa (condensation polymer)
 Monoomeriin wal-nyaachuun molakiyuulota xixiqoo kanneen akka bishaanii, karboondayoksaayidii fi kkf of keessaa baasuun poliimeerii uumamudha.
 Adeemsa kana keessatti hangi hir’atu ni jiraata
Fkn:- poliimeeroota uumamaa kanneen akka pirootinii, kaarboohayidireetii fi kkf dha.
Xumura boqonnaa kanatti barattootni
• Adeemsa uumamuu poli meeri isaanis poli meeri ida’amaa fi poli meeri cuunfamaa ni ibsu.
• Poliimeerota uumamaa fi poliimeerota namitolchee fakeenyota isaanii ni tarreesuu.
• Geraagarumaa poliimeerota namitolchee fi poliimeerota uumamaa ni ibsu.
• Poli meerota namitolchee kanneen poli meerota ida’amaa fi poli meerota cuunfamaa ta’an fakeenya kennuun monoomeroota isaanii adda baasu.
• Amaloota fi faayidoota pilaastikii,kaarboohayidiretii fi pirootinii ni addeessu.
5.1 Poliimeerota uumamaa
Poliimeerotni uumamaa uumamaan piqilootaa fi bineensota keessatti kan argamanidha. Fakeenyaaf pirootinoota,kaarboohayidiretoota,gommaa uumamaa,jirbii fi kkf tanidha.
Jechi pirootini jedhu, jecha Giri kii ‘proteios’ irraa kan dhufe dha. Hi kni isaas faayida qabeessa jalqabaa (of first importance) jechuu dha. Kunis pirootiinonni molekiyuloota orgaanikii faayidaa adda addaa lubbu-qabeeyyi f kennani ta’uu agarsi sa. Pirooti nonni hundi poolimeroota ami noo asiidotaati. Amiinoo asiidonni immoo elementoota hayidiroojiinii, oksijiinii, kaarboonii fi naayitiroojiinii irraa ijaaramu. Kana jechuun pirootiinonni elementoota kanneen kan of keessaa qaban yommuu ta’u darbee darbee salfari fi foosforesi ni qabaatu. Pirooti nota uumamaan mul’atan keessatti ami noo asi dota gosa 20’tu jiru. Baay’inni pirooti notaa garuu murta’aa miti. Kunis sababiin isaa pirooti ni n tokko baay’ina,tarti baa fi gosa ami noo asi dii of keessaa qabuun kan biroo irraa waan adda ba’ee amala mataa isaa qabaatuufi dha. Pirootinootni adeemsa polayimarizesuu cuunfaamaan uumamu.monomerootni isaanis amiinoo asiidoota dha.
Polaayi aminoo asiidii Pirootinii
Rn + 2
Ami noo asi donni foormulaaa wali galaa kan qaban ta’ee,foormulaa kana keessatti atoomii kaarboonii alfaa, garee kaarbooksaayilikii (-COOH), garee amiinoo (-NH2), atoomi hayidirooji ni fi garee ‘R’ tu (jijijjiiramaa) haammatama. Amiinoo asiidiin tokko kan biroo irraa garee R kanaan gargar baha.
Foormulaa waliigalaa amiinoo asiidii
Amaloota aminoo asidii
• Bu’uura caasaa pirootinii ti .
• Monomerii pirootinii ti .
• Biqiloota keessatti uumamaan argamu .
• Monomerootni bu’uurra pirootinaa ta’an α– amiinoo asiidii jedhamu.
• Ami noo asi donni hidhoo koovalenti ti n walitti hidhamuun pirooti ni → Hidhoon amiinoo asiidota gidduutti uumamu kun hidhoo peeptaayidii jedhama.
• Hidhoowwan peeptaayidii hedduun walitti hidhoo pooliipeeptaayidii
• Peptaayidotin amiinoo asiidota saddeeti(8) ol-qaban poliipeptaayidii jedhamu.
• Poliipeptaayidotni amiinoo asiidota 50 ol-qaban pirootinii uumu .
• Pirootiniin pooliipeptaayidii jedhamu.
Amiinoo asiidoota alfaa 20
H2C OH NH2
Gly G sayistenii
HS CH OH
CH OH NH2
CH3O CH OH
CH OH NH
piroolinii O HOOC CH OH
H N OH Ser S
asidii gulatamikHi O
CH OH NH2NH
• Caasaalee qaamaa ijaaruuf: fkn- Keeraatinii, mayoosinii, kollaajinii
• Walnyaatinsa keemikaalaa meetaabolizimii si’eessuuf; fkn- Inzaayimii
• Qaama irraa balaa ittisuuf: fkn- Farra qaama alagaa
• Walqunnamtii seelotaaf: fkn- hormoonota
• Sochii qaamaatiif: fkn- pirootiinota maashaalee
• Sochii wantoonni membireenii seelii keessaan taasisan deeggara
• Oksijiinii qaama keessa geejjibuuf : fkn-Hemoogiloobinii
Kaarboohayidireetoonni molekiyuloota orgaanikii elementoota kaarboonii,hayidiroojinii fi oksiji ni irraa uumaman ta’ani akka wali galaatti foormulaa wali galaa (CH2O)n qabu; ’n’ n baay’ina atoomi kaarbooni bakka bu’a. Kaarboohayidireetootni polaayimeroota uumamaa lubbu qabayii keessatti argaman keessaa isa gudda dha.
Kaarboohayidireetoonni baay’ina sukkaara of keessaa qaban irratti hundaa’uun bakka gurguddoo sadiitti qoodamu. Isaanis:
• Sukkaar-tokkee (monosaccharides)
• Sukkaar-lamee (disaccharides) fi
• Sukkaar-hedduu (polysaccharides) dha
Sukkaarota-tokkeen kaarboohayidiretii sukkaara (saccharide) tokko qofa qabani dha.Isaanis baay’ina atoomi kaarbooni ofkeessaa qaban irratti hundaa’uun akkaataa armaan gadiitti qoodamu.
• Tiriyoosii (3C) • Peentoosii (5C) • Heptoosii (7C)
• Teetiroosii (4C) • Heeksoosoo (6C)
Caasaa banamaa (Open chains) sukaarota heeksoosii sadan
Guluukoosiisn yommuu bishaan keessa jiru haala caasaa banamaa gulukoosii (0.02%), gulukoosii aalfaa (36%) fi gulukoosii beettaa (64%) gidduutti ikuyilibiremiin argama.Isaan boodaa lamaan caasaa qubeelaa (ring form) dha.
OH guubbaa yeroo oolu
b.S ukkarota- Lamee
tokkeen, walnyaatan adeemsa polaayimeriizesuu cuunfamaan uumamu.
Poliimeerizesuun cuunfamaa adeemsa yeroo wantoonni walnyaatan bishaan keessaa bahuu dha. Hidhoon keemikaalaa
sukkaarota lammaan gidduutti uumamu hidhoo gilaayikoosidikii jedhama
Suukuroosiin monoomerii giluukosii fi monoomerii furuuktoosii adeemsa poliimeerizesuu cuunfamaan walitti hidhamuun uumama.
• Fakeenyota suukaarota lamee , Maaltoosii ,Sukuroosii fi Laaktoosii
Sukaarota-hedduun walitti hidhama sukkaarota tokkee hedduu irraa uumamu.Qaama lubbu- qabeeyyi keesstti baay’inaan akka kuufama soorataatti (fkn Istaarchi fi Gilaayikoojini ) fi caasaalee qaamaatti (fkn Seelulosii) tajaajilu. Sukkaarota-hedduun baay’inaan beekaman: Fakkeenya: istaarchii,seluuloosii ,gilaayikooginii fi kkf dha.
o Poolimerii gulukoosii alfaati
o Biqiloota keessatti bakka kuufama soorataa beekamaa dha
o Salphaatti gara gulukoosiitti caccabuun gubama soorataaf oola.
o Bifa lamaan argamuu danda’a; amaayiloosii fi amaayiloopeektinii dha
Amaayiloosiin polaayimaroota giluukoosii hidhoo α(1-4) kaarbooniin uumamu.
Amaayiloopeektinii polaayimeroota giluukoosii ta’ee hidhoo α(1-4) fi damee hidhoo α(1-6) Kaarbooniidhan uumama.
• Akka biqilootaaf istaarchii jennu,bineeldotaaf gilaayikoojinii jenna
• Guluukoosii alfaa hedduu walitti hidhaman irraa uumama
• Baay’inaan tiruu fi maashaa keesstti kuufama
• Gara guluukoosiitti diigamuun isaa hormoonii insuuliiniitiin to’atama
• Poaayimooroota giluukoosii qaama bineeldotaa keessatti kuufamudha.
• Walnyaatinsa gulukoosii beettaa irraa uumama
• Caasaa qaamaa (fkn cichaa seelii biqilootaa) ijaaruuf gargaara
• Molekiyuloota orgaanikii lafarratti argaman keessaa isa ol’aanaa dha
• Orgaanizimoota akka baakteeriyaa fi fangasii keessatti madda soorataa ni ta’u
5.1.3 Gommaa uumamaa(natural rubber)
• Laafaa fi walqabataa ta’ee muka gommaa jedhamura irra argama.
• Yeroo yaa’u kan dheeratu ta’ee dandeeti bakka jalqabaatti deebi’uu qaba.
• Caasaan isaa ayisoopireenii ykn 2-metaayilii-1,3-butaadaayinii dha.
nCH2 C CH CH2
C CH* CH2 *
n gommaa uumamaa
• Amala gommaa uumamaa saalpherii wali n ho’isuun fooyyessuun ni danda’ama.
• Adeemsi kun volkaanayizeshinii jedhama.
S 2 CH CH2 C CH CH2
-H2C C CH
CH CH2 CH CH
Gommaan volkanayizeshinii ta’e amaloota armaan gadii qaba.
• Cimaa fi kan waliihinqabanedha.
• Pilaastikumaan isaa ni dabala
• Bulbuloota keessatti hin bulbulamu.
• Salphaatti hin oksideeffamu.
5.2. Poliiimeerii namtolchee
Poliimeeroota uumaman hin argamne koompaawundoota orgaanikii irra oomishamanidha.
• Poliimeerootni namtolchee baayyinaan oomishamanii gabaa dhaaf dhiyaatu.
• Amalaa fi faayidaa olaanaa qabu.
• Pilaastikootni hundi polaayimeroota nam tolcheedha.
Poli meerootni namtolchee beekamon kanneen akka poli teeni ,fo’aa namtolchee(synthetic fibers),gommaa namtolchee fi kkf dha.
5.2.1. Fo’aa namtolchee(synthetic fibers)
Fo’aan namtolchee(synthetic fibers) warshaa keessatti kalaqa namaan kan oomishamudha. Amaloota fo’aa namtolchee(synthetic fibers)
• Baasi gadi bu’an argamu.
• Walitti hin shuntuura’an
• Maashinootaan miicamu.
Fkn naayileenii,pilaastikii hafata lafaa,jaaketa naayileenii fi kkf.
Poli taayileeniin poli meerii adeemsa poli meerii ida’amaan monoomerii itaayileenii irraa uumamudha.
C C C C *
• Hurgaas fooliis hin qabu.
• Ulfaatina hinqabu
• Kanneen biro waliin yeroo ilaalamu gatii salphaadhan argama.
Fkn insuuleetera elektirikaa,qodaa dhiqanaa bishaanii,ujummoo polaayiitayileenii boorsaa polaayiitaayileenii fi kkf dha.
5.2.3 Gommaa namtolchee:
Gommaan kan uumamu adeemsa poliimeerizeshinii konjugeetii daayensii(conjugated dienes) bakka siyeestuun jirutii ykn kopolaayimerizeshinii konjugeetii daayinsii kompaawundoota oleefiinikii(olefinic) gara birii ni dha.
Fkn niyoopireenii (neoprene),gommaa staayireenii butaadayinii,gommaa butaayilii fi kkf dha. Niyoopireenii(neoprene) :
niyoopireeniin 2-kilooroo-1,3-butaadaayinii adeemsa poli meerizeshiinii ida’amaan uumama.
nH2C C CH
CH2 * CH2 C CH CH2 *
5.3 Coomaa fi Zayita
• Coomni kompaawundoota orgaanikii ta’ee garee warra annisaa guddaa qaban keessatti ramadama.
• Baayyinaan kan argamu tichuu orgaanikaa keessatti dha.
• Coomni teempireechera daree keessatti jajjaboodha
• Zayitiin teempireechera daree keessatti dhangala’oodha.
• Coomni biqiloota irra argaman dhangala’oo(zayita)dha.
• Coomni bineensota irraa argaman garuu jajjaboo(cooma)dha.
• Coomnii fi zayiiin beezii wajjin walnyaatinsa geggeessuun saamunaa laatu.
• Wal-nyaatinsii haayidiroolaaysisi tiraaygilaayiseerayidii bakka si’eesituun asi diin jeruttii gilaayiseerolii fi coomaa asiidii kenna.
• Coomaa fi zayinii annisaa keemikalaa lubbu qabeeyii keessatti kuufamudha.
• Adeemsi haayidiroolaayisiisii beezii wajjiin geggeeffaamu gilaayiseeroolii fi ashaboo cooma asiidii kenna.
• Coomaa fi zayitni tiraayigilaayiseerayidii dha.
• Caasaan isaa asiidii coomaa sadii fi gilaayiseroolii qabata.
Jechoo armaan gadiif hiika kenni.
A. Monoomerii B. Kopolaayimerii C. Poliimeerii uumamaa D. Poliimeerii namtolchee
Kanneen armaan gadii poliimeerii uumamaa ykn poliimeerii namtolchee jechuun adda baasi.
A. Gilaayikoojinii B. Insuulinii C. Seluuloosii d. DNA E.Pliivinaayilikiloorayidii
Caasaa poliimeeroota armaan gadii kaasuun monoomeroota isaanii adda baasi.
A.Pirootinii D.Seeluuloosii C.Istaarchii D.Gommaa uumamaa E.polaayiitaayileenii
Adeemsa poli meerizetion ida’amaa fi cuunfamaa kantaan fakeenya isaanii kennii.
Garaagarumaa coomaa fi zayitii adda baasi.
Keemistirii fi Nannoo
Boqonnaa Shaan keessatti waa’ee Poli marootaa,Coomaa fi Zayitaa barattani jirtu akkasumaas polimaroota uumamatiif poliimaroota nam tolchee adda baafattaniittu jennee yaanna.Boqonnaa kana keessatti immoo qabiyyeewwan ijoo kan akka keemistirii naannoo , yaada rime naannoo, marsaa bishaanii, marsaa oksijiinii, marsaa naayitiroojiinii, faalama biyyee, ol-ka’insa ho’a addunyaa, taatee mana magariisaa(green house effect), qabeenya uumamaa( natural resource) fi anni saa kkf kan ilallu ta’a.
Dhuma boqonnaa kanatti leenjifamtootni.
Hiika Nannoo nii kennu
Marsaawwan niwutireentoota bebbekamoo nannoo keessatti geggeeffamanii nii ibsu.
Saboota gurgoddoo faalama bishaanii,qilleensaaf biyyee addaan nii baafatu.
Qabeenyaawwan uumamaa hin haaromfamnef kanneen haromfamaan adda baasanii nii beeku.
Sababoota gurguddoo ol ka’i nsa ho’a addunyaa ni ibsu hari roo taatee mana magariisaa waliin isaan qabaniis nii addeessu.
6.1. Yaada Rimee Naannoo
Nannoon keenya wantoota nutti marsanii jiraan kanneen nam tolchee fi kan uumamaa jiraan hunda kan hammate dha.Qo’annoon waayee naannoo qo’annoo wali galaa dhimma hawwasummaa,qabeenyaa uumamaa fi namtolfee ,adeemsota baayoolojikalawaa,adeemsota fiizikaa fi keemikaala nannoo keessatti geggeeffamaan hunda kan hammatu dha.
Naannoon kuni s kan biqilootni,bineensotni fi lubbu dhabeeyyi n hundi keessa jiraataan ta’ee naannoo uumama, naannoo hawaasummaa fi naannoo nam- tolchee of keessaatti haammata. Wantoonni kunis kan gargar hin baaneef tokko isa biroo irratti kan hundaa’u akkasumas walitti bu’insa (interaction) kan gaggeessan dha.
Dameen Keemistiri waa’ee madda, sochi , walnyaatinsa keemikaalaa fi dhiibbaa walnyaatinsi keemikalaa naannoo irratti qabu qo’atu keemistirii naannoo jedhama.wantoonni naannoo keessatti rgaman kanneeniis atimoosfera naannoo lafaa haguugee jiru, haayidiroosferii kan galaana, Garba, haroo fi lageen, Liitoosferii– dachee gogduu fi lubbu qabeeyii hunda kan hammata.
Qaamni dachee biyyee,lafa(land),bishaanii fi atmoosfarii dachee aguugee jiru hunda of keessatti hammate kan orgaanizimootni lubbuu qaban hundi keessa jiraatan bayoo isfeerii jedhama.
6.2. Marsawwan uumamaa Nannoo Keessaa
Marsaawwan uumamaa nannoo keessatti geggeffamaan gurguddoon Marsaa Bishaanii,Marsaa Naytiroojiinii,Marsaa Oksijinii fi Marsaa Karbonii dha.
6.2.1. Marsaa Bishaanii:
Lubbu qabeeyyiin qaama isaanii keessatti bishaan baayinaan ni qabu. Kanaafuu lubbu qabeeyyi keessatti bishaan iddoo guddaa qaba jechuudha. Haaluma kanaan baayinni bishaanii biqilootaa fi bineeldota keessaa 65% – 95% ta’a jedhamee tilmaamama.Qabiyyeen bshaani seelota namaa keessaa dhibbantaa saddeettama(80%) ni ta’a.Bishaan wal nyaatinsa seeli keessatt geggeeffaman keessatti qooda ni fudhata.
Dachee keessatti harka afur keessa harki sadii bishaaniin haguugamee argama. Wantoonni marsaa bishaaniif barbaachisoo ta’an:
Hurka ,Coba ,Finiina bishaanii,Bishaan gara bakka kuufama isaatti deebi’uu dha.
Marsaan bishaani (hydirological cycle) kan uumamu annisa ho’aa aduu irraa madduun ta’un ni beekama.Bishaan wantoota adda addaa irraa annisaa aduutin hurkuudhaan qilleensatti makama.
Annisaan aduu irraa maddu
Bishaan lagaa fi k.k.f keessa jiru hurka bishaaniitti jijjiira.
Karaa biraatiin qaama biqilootaa fi bineeldotaa irraa bishaan karaa adda addaa hurkuudhaan qilleensa naannootti makama. Hurki bishaanii rukkinni isaa kan qil eensaati gadi waan ta’eef qilleensa naannoo keessa bakka tempireecherri gad-aanaa ta’etti ol-baha.Hurki bishaanii kun wayita lafa irraa ol-fagaachaa deemu qil eensa diilalaa’a wajjin wal qunnama.Hurki bishaani qil eensa dilalaa’a wajjin wal make gara duumessatti jijjirama.Suuta suutaan duumessi uumame gara coba gurguddootti jijjirama. Cobni bishaanii kun yeroo walitti kuufamaa deemu ulfaatina argata.kana booda humna harkisa lafaati n gara lafaatti harkifamuun bokkaa ta’ee rooba. Roobni roobu kun garba, galaana, haroo fi lageenitti dabalama.Bineeldoti fi biqilootni rooba roobu kanatti ni gargaaramu.Karaa biraatiin haala adda addaatiin bishaan qaama biqilootaatii fi bineeldotaa keessa bahun qilleensa naannootti makama.Haaluma wal fakkaatuun ademsi ho’a aduu irraa madduun bishaan gara hurkaatti jijjiramuun itti fufa.
Walumaa galatti bishaan ho’a aduuti n hurkuun gara qil eensa naannootti makama. Sana booda haala adda addaa keessa darbuun duumessatti jijjiramuun dacheef rooba.Kan roobee kuniis deebi’ee hurka. Adeemsi akkasii kun marsaa bishaanii jedhama.
6.2.2. Marsaa Oksijinii
Marsaan oksiji nii wantoota gurguddoo lama irratti hunda’a. Isaanis
Gubiinsa Soorataa fi
Qophii Soorata biqiloota magariisaan adeemsifamu irratti.
Adeemsa gubachuu soorataa keessatti lubbu qabeeyyiin oksijiinii offitti fudhachuun CO2 , H2O fi ATP kennu.Adeemsi kun rispaayireeshiinii jedhama.
Adeemsa footoosenteensii keessatti biqilootni magariisi karboondaayi oksaayidii fi bishaan offitti fudhachuun gilukoosii fi oksijiinii kennu.
6.2.3. Marsaa Naytiroojiinii
Baakteriyotni marsa kompaawundootaa fi elementoota uumamaan jiranu keessatti ga’e ol-aanaa qabu.Hirmaannaan bakteriyaa kunis jireenya lubbu qabeeyyiidhaaf haala mijeessa.
Marsaan Naayitiroojiinii tartiiba armaan gadii qaba.
Naayitiroojiinii fikseessuu(Natrogen fixation):- Naayitiroojiinii fikiseessuu jecchuun naayitiroojiinii atimoosferii keessa jiru gara kompaawundii amooniyaa jedhamutti jijjiruudha.Dandeetti kana kan qabanu baakteeriyaa qofa.
Adeemsa naayitiroojiinii fiikseessuu haala adda addaatiin adda addatiin raawwachuu danda’a.Isaanis:
Karaa baakteeriyoota utubduutiin(Mutualism bacteria )
Karaa baakteeriyota of-danda’otiin(free living bacteria)
Bakaakkaadhaan(lightening):- Taatee kanaan naayitireetiitu uumama.
Indaastirii keessatti adeemsa haaberii keessatti
Diinaayitirifikeeshiinii:- Adeemsa kompaawundii Naayitiroojiinii gara molukiyuulii naaytiroojiinii atimoosferaatti(N2) jijjiruu jechuudha.
6.2.4. Marsaa Karbonii
Karbooniin bifa kompaawundoota orgaanikiitiin qaama lubbu-qabeeyyi keessaa fi du’aa wantoota orgaanikii keessatti argama.Kompaawundiin karbooniitishuu lubbu-qabeeyyii keessa jiru haftee boba’atti jijjirama.Hafteen boba’aa kun akka boba’a, zayita, gaazii uumamaa of-keessatti qabata.karbooniin kompaawundoota inorgaanikii kan akka dhgaa hoofii, sheelii orgaanizimootaa keessatti lee ni argama.Krbooni n lubbu qabeeyyi f barbaachisaa ta’e adda addaatti kuufamee argama.
Dagaaginni indastrii fi magaalotaa waliin walqabatee yeroo ammaa keemiikaalonni naannoo hubuu danda’an hedduutu gara naannootti gaddhi famaa jiru. Keemi kaalonni kun gara naanoo
yeoo seenanni qabiyyee uumamaa naanoo sanaa jijjiiruun lubbu qabeeyyii fi jireenyaa fi fayyaa dhala namaaf kan hin mijoofne taasisu.
Dhi bbaan dhal i namaa dachee kana irran ga’u hedduu fi gad-fagoodha. Wantoonni bu’aa gochaalee jiruu fi jireenya dhala namaa tahanii hamoo fi yeroo dheeraaf naannoo keessa turuu danda’an hedduutu naannoo jireenyaa dhala namaa fi lubbu qabeeyyi keess tamsaa’ani fi kuufamani argamu.Issan kan keessaa bay’ee hamoo kan ta’an sibiilota ulfaatoo fi kompaawundoota organokiloriinii. Wantoonni kun turtoru/bososuu meeshaalee ittisuuf dirrawwan dibata(paint),orgaanikii tiinii dibamanii fi aguugamanii jiran keessatti kkufamanii argamu. Fakkeenyaaf kan akka bidiruu, garaa jalaa fi cina daandii xiyyaarri irraa ka’uu fi irra qubatuu, garaa jalaa fi cina daandii konkolaataa, laandifiilii, fi kkf.
Haalota baay’ee keessatti, baqqanni biyyee irra keessaa midhaan biqilchuuf tajaajilu xurawaa warshaalee, xaa’oo foosfeetii, bobba’a namaa fi kkf falamanii ni argamu.
6.3.1. Faalama Qilleensaa
Qilleensi qulqulluun jireenya namaa fi lubbu qabeeyyii maraaf baay’ee barbaachisaa fi muteessaa dha. Haa ta’u malee wantoonni hubatii fidanii fi qilleensa qulqulluu faalan warshaalee fi gubiinsa boba’aa adda addaan gara naannootti gad- lakkifamuun qileensi naannoo akka faalamu godhu. Haalli kun faalama qilleensaa jedhama. Faalamni qilleensaa uumamuu kan danda’u yoo hammi kuufamni wantootaa baay’ee ga’aa ta’ee atimoosfariin akka summaa’u godhudha. Faalamni qilleensaa lubbu qabeeyyii naannoo keessa jiraatan irratti hubaatii adda addaa irraan ga’uu danda’a. Fakkeenyaaf keemikaalonni gaazii ta’an tokko tokko atimoosfariitti yoo gad- lakkifaman qilleensa faaluun namoota, biqiloota , bineeldota , gamoowwan , biyyee fi bishaan irratti miidhaa fidu. Nama irratti , dhukkuba sombaa , dhukkuba sirna hargansuu , dhukkuba sammuu fi narvii illee fiduu danda’a.
Wantoota faalama qilleensaa fidan
Faaltonni qilleensaa: gaazii, dhangala’oo yookaan jajjaboo ta’uu danda’u. Waatoonni faalama qileensaa fidan :-
Aara warshaalee adda addaa keessaa bahanii dhuma irratti qilleensatti gad- lakkifaman
Ilbiisota dhukkuba dabarsan ajjeessuuf jecha farra ilbiisota adda addaa biifaman.
Dhukkee bubbeedhaan lafa irraa olka’u qilleensatti makamuun qilleensa naannoo faalu.
Gaazota summaa’oo ta’an kanneen akka salfardaayoksaayidii fi oksaayidoota naayitirojiinii ( NOx ), CO2, fi CO yammuu cileen gubatuu fi gaaziin gubatu uumamuun qilleensatti makaman.
Kompaawondoota liidii (Pb) konkolaataa keessaa bahan qilleensa naannootti makamuun. Namni qilleensa naannoo kompaawondii liidiin faalame harganu rakkina fayyaa gara garaatiif saaxila baha.
Gaasota CO2 fi CO, kilooroofilooroo kaarboonii (CFC) gara qilleensaatti makamuun dhi bbaa adda addaa nama irraan ga’uu danda’a. Faalamni qil eensaa madaal i sirakkoo naannoo murtaawaa tokko irratti taatee mul’atu fiduu ni danda’a.
Taateewwan faalama qilleensaa keessaa tokko tokko akka armaan gadiitti ibsamaniiru.
Gaazonni kanneen akka salfardaayoksaayidii fi oksaayidoonni naayitirojiinii (NOx) bokkaa asiidawaa qilleensa keessatti uumuudhaan biqiloonnii fi bineeldonni adda addaa akka hubaman taasisu.
Lubbu qabeeyyiin adda addaa bishaan keessa jiraatan akka du’an godha.
Kaarboondaayoksaayidiin baayinaan qilleensa keessatti kuufamuun tempireechariin qilleensa naannoo addunyaa akka dabalu godha.
Gaaziin akka kaarboonmonooksaayidii fi suudonni dhukkee qilleensa waliin gara keessa qaamaatti si’a fudhataman dhukkuboota sirna hargansuu namatti fiduu ni danda’a
Maloota ittisa faalama qilleensaa
Maloonni ittisa faalama qilleensaa maal fa’a ta’uu danda’u ? Faalama qilleensaa karaa adda addaa ittiisuun ni danda’ama . Isaanis :
Xuraawaa fi gaazota adda addaa warshaalee keessaa bahan calaluu fi gingilchuun bifa badii qaqqabsiisuu hin dandeenyetti jijjiiruu .
Ilbiisotaa fi aramaa balleessuuf keemikaalota farra ilbiisotaa fi farra aramaa fayyadamuu irra malleen to’annaa baayolojikaalawaa ta’an gargaaramuu
Gaazota konkolaataa fi motora adda addaa keessaa bahan to’achuu fi xiqqeessuun faalama qilleensaa ittisuu fi hirisuun ni danda’ama .
6.3.2. Faalama Bishaanii
Faalama bishaani jechuun “jijjirama bayolojikaalawaa, keemiikaalawaa fi fiizikaalaawaa kamiyyuu qulqullina bishaan irratti raawwatuuf miidhaa hamaa lubbu qabeyyii irran gahu ykn bishaan fayidaa barbaadameef akka hin oolle taasisuu dha”.
Qaamonni bishaan garaa garaa faalootaaf karaa addaa addaa kana saaxilamaanii dha. Faaltota bishaani summaa’oo i rran kan ka’e bashanannaaf il ee i ttifayyadamuun rakkisaa ta’ee jira. Faalamni bishaanii akkataa garaa garaan qoodamuu ni danda’u:
Madda isaanii irratti hundaa’uun: Faalama bishaanii madda beekamaa:
Faaltonni bishaanii yeroo kallattiidhan daandii bishaaniitti qajeelfaman kan uumamu. Fkn:- Ujummuu warshaa irraa bishaan xurawaa summawaa ta’e gara laggeeniitti kal attin dhangalaasu. Faalama bishaanii madda hin beekamnee:
Faaltonni yeroo lolaadhaan bakka garaa garaati haramuudhaan gara laggeeni tti gadii yaa’an kan uumamuudha. Fkn:-lolaan yeroo oyiruu irraa xaa’oo keemi kaalotaa fi pestisaayidoota gara lagaatti gad yaasu.
Akaakuu faaltotaa irratti hundaa’uun:
Faalama bayolojikaalaa:-kanneen akka bakteeriyaa ,vaayirasii ,fangasii fi raammoo kkf
Faalama keemiikaalota:-sibiilota olfaatoo, niwutirentootaa, peestisaayidootaa fi xuraawoo dabalatee
Faalama fiizikaalaa :- kanneen akka biyyoo, ho’aa fi meeshaalee haftee raadiyoo’aktiivtii ta’ani
Faaltonni baayoloojikaalaa kan akkaa bakteeriyaa, vaayirasi , raammoo fi pirootoozo’aa ni haammata. Waantoonni dhukkuba namatti fiduu danda’an kun gara naannoo fi bishaanii kan seenan balfaa namaa fi beeyiladootaa seera malee qabuu fi gatuu irraan kan ka’eedha. Faaltonni dhukkuboota gosa hedduutiif nama saaxilu.
Waggoota dheeraatiif, keemiikaalonnii hedduun garaa bishaan keenyyatti jal’ifamuudhaan bishaan keenya faalaa jiru. Faalamni bishaanii keemikaalaa sababoota gadiitiif uumamuu ni danda’u
Maal nadhibdeen keemiikaalotaa gara bishaanitti gatuu.
Yeroo hujummowwani fi meeshaan kuusaan keemi kaalotaa urachuudhaan/tarsa’uun keemiikaalota kana gara bishaan boollaa, fi laggeeniitti dhimmisan;
Sababa bala tasaa warhaalee irra gahuun keemiikaalonni akka malee gara daandii bishaniitti naqaman;
Yeroo faaltonni qileensa kessa jiran bokkaan gadi dhiqaman.
Keemiikaalonni biyyee faalamaa keessaa yeroo bishaniin bulbulamanii gara qamota bishaniitii coccophan.
Faalama keemi kaalaa kan baakka afurittii qooduun ibsuun ni dandaa’ama:
Siibiilota ulfaatoo: Yeroo bishaan sibiilota ulfaatoo summa’oo ta’ani n faalamu kan uumamuudha Faalama keemiilaalaa bishaani beekamaa ta’e bakka kan bu’ani dha. Kanneen gaditti tarreefaman sibilota ulfaatoo beekamoo bishaan keessatti argamaniidha: Merkurii (Hg), Liidii (Pb), kadimiyemii(Cd), Arsenikii (As).
Nutirentii biqilootaa: raamaddii faalatota keemiikaalawaa bishaanii lammaffaadha. Nutirentoonni biqilootaa beekamoon lameen naayitirojinii (N) fi foosfaras (P) dha. Maddi nutirentoota kanaa, balfaa beyiladootaa, lolaa oyiruu irraa loala’u, fi dhangalwaa bobba’a namaati. Nutirentoonni kun yoo baay’inaan qaama bishaanii seenan lubbu qabeeyyii bishaan keessaa mi dhuu danda’u.
Zayita: Faalama keemikalawaa biro yeroo hujummowwanii fi meeshaan kuusaan keemiikaalotaa lafa jala uwwaalamanii jiran urachuudhaan keemiikaalota kana gara qaamota bishaaniitti dhimmisan kan uumamuudha. Waggaatti, gocha dhala namaatiin tilmaamaan zayita meetirik toonii miliyoona sadii hanga jahaatti qaama bishaanotaa gurguddaa kan akka garbaatti gad-dhangalaafamu. Gochaan kun naannoo fi lubbu qabeeyyii hedduu bishaan keessaa jiraatan irraan balaa geessisaa jira.
Xurawaa raadiyo’aktivii (radioactive waste): Gosti faaltota bishaanii keemiikaalawaa biro xurawaa raadiyo’akti vi titi. Fkn:- ayisootoppota kanneen akka ayoodinii, raadonii,
yuraniyeemii, siziyeemii fi tooriyeemii. Keemiikaalonni kun gara sirnakkoo bishaanawoo (aquatic ecosystems) kan gad-dhiifaman bakka maddaa huumna nukilaaraa, bakka oomisha yuraaniyeemii fi uumamaan.
Seedimentii: Faalamni bishaani fizikaalawaa bay’ee barbaachisaan caccabaa meeshaalee inorgaanikii fi orgaanikii jajjaboo bishaan keessatti hin bulbulamne irraan dhufuudha. Maddeen seedimentii kanneen akka dhiqama biyyee, cirama bosonaa qonnaa fi pirojektii hayidiroo’elektirikii kkf dha. Seedimenti n haroowwan, kuufamoota bishaani fi naannoo bishaanii biro cuqqaaluu fi adeemsa footoosintesisin itti geggeeffamu jeequun fi weebii nyaataa bishaan keessaa jeeqa. Seedimentiin dabaltaa peestisaayidootaa , baakteriyaa fi wantoota miidhaa fiduu danda’an biroollee gara qaamota bishaaniitti dabaluun faalama dabalataa fiduu ni danda’a.
Ho’a: Faalamni ho’aa hamma oksi jini bishaan keessatti bulbulamee jiruu hir’isuudhaan lubbu qabeeyyii bishaan keessa jiraatan rakkoo biroof saaxila.
Biyyeen xurawaa/faaltota hedduu haala addaa addaatiin ofitti fudhata. Fakkeenyaaf irra jireessi salfar daayoksaayidii gubiinsa boba’aa irraa gad-dhi famuu xumura irratti salfeeti biyyee ta’uun dhaabbata. Oksaayidoonni naayitiroojinii atimoosfiiraa gara naayitireetiitti jijjiiramuudhaan biyyee irra tuulamu. Biyyeen NO fi NO2, ofitti qabachuun biyyee keessatti gara naayitireetiitti oksideeffamu. Kaarboon monoksaayidiin gara CO2 fi iiti aansuun gara bayoomasiitti baakteeriyaa fi fangasii biyyee keessatiin jijjiirama. Ruqooleen liidii(Pb) aara konkolaataa fi naannoo liidiin qotamee qulqulleeffamutti maddan sadarkaa olaanaan biyyee naannoo sanaa keessatti argamu. Biyyeen xurawaa balaa fiduu danda’an hedduu li cheeti laandifi li , boolla kuusaa bobba’aa fi maddoota biro irraa dhufan kan ofitti fudhatuudha. Yeroo tokko tokko akka mala gatiinsa fi diigami nsaa xurawaa orgaanikii hamoo ta’an biyyee irra afu. Meeshaaleen diigamuu danda’an kun adeemsa maayikiroobiyaali n biyyee keessatti diigamu. Si weeji fi xaa’oon si coo si weejiin guutamee biyyee irratti fayyadamuun ni mul’ata. Naannoo warshaalee fi daldalaan dagaaganitti kopaawundoonni orgaanikii hurka’aa (Volatile organic compounds (VOC)) ta’an kan akka “benzene”, “toluene”, “xylenes”, “dichloromethane”, “trichloroethane”, and “trichloroethylene”,
biyyee naannoo sanaa faluu ni danda’u; keessumaa biyyoota seerri cimaan isaan to’atu hin jirreetti. Maddii faaltota kanaa baa’ee beekamaa ta’e tokko dhimmuu taankii kusaa keemi kaalotaa lafa jala owwaalamee jiruut. Laandifiilota seeronnii fi danbileen yeroo ammaa jiran hojii irra hin ijaaraman fi bubultoonni(solvents) seera malee gatamaniis madda “VOC” biyyeetti.
Qonnaan ammayyaa irratti peestiisayidoonni(insektisaayidii, erbisaayidii,fangisaayidii, fi kkf) bal’inaan fayyadamuun ni mul’ata. Peesti sayidoonni kun kan akka bokkaa, qil eensaan fi laggeeniin dhiqamanii haraamuun garaa qammota bishaanii garaa garaatti gad-nammu bishaan kana faaluu danda’u. Keemi kaalonni kunis lubbu qabeeyyi bishaan keessa jiraatan irraan mi dhaa qaqqabsi suu ni danda’u. Peesti sayidoonni ilbiisota garaa garaa bal eessuuf fayyadamnu keessaa 90% dhimma akeekameef hin oolu jedhamee tilmaamama. Peestisaayidoonni hafteen isaanii biyyee keessa yeroo dheeraaf turuu danda’ani fi dhi bbaa fi summaa’umma yeroo dheeraa naannoo irraan gahuu danda’an adda bahan biyyota garaa garaatin to’annaa adda godhamaa jira. Peestisaayidoota kun kannen gadii hammatu: DDTs, “Chlordanes”, “Dieldrin”, “Endrin”, “Aldrin”, HCB’s, “Heptachlor” fi “epoxide”, fi “Endosulfan”,
6.4. Ol ka’iinsa Ho’a addunyaa
Gaffii Marii:-Dhibbaa olka’i nsi ho’a addunyaa baroota kana keessa biyya keenya kessatti fi akka addunyatti geessisaa jiru tarreessuun erga irratti mar’attaniin booda dareef dhiyeessa.
Kaarboondaayoksaayidiin atimoosfarii keessa baay’ee xiqqeenyaan kan argamuu fi lubbu qabeeyyi irratti balaa kan hin geessifne dha. Haa ta’u malee, yeroo ammaa kana akka malee babal’ina warshaalee irraa kan ka’e boba’aan gubatee warshaalee keessaa bahu , cileenii fi gaasiin uumamaa yeroo gubatan hammi CO2 uumamee atimoosfariitti makamu dabalaa jira. Kana malees
, ciramee baduun bosonaa gaasiin kun atimoosfarii keessatti akka baay’atu godha.
Hammi kaarboondaayoksaayidii atimoosfarii keessaa yeroo dhaa yerootti dabalaa deemuun kun taatee mana magariisaa ( green house effect ) fida. kaarboondaayoksaayidiin atimoosfarii keessatti dabalaa dhufe kun xiyyoonni ifa Aduu anniisaa guddaa qaban lafa erga ga’anii booda akka ol balaqqeessa’anii atimoosfarii olii keessatti hin xuuxamnee fi naannoo lafaatti akka hafan gochuun qilleensi naannoo akka ho’u godhu.
Ho’insi qilleensaa kun yeroo babalachaa deemu , ho’insi qilleensa naannoo addunyaa akka dabalu godha. Haalli akkasii kun ho’insa addunyaa (global warming ) jedhama.
Dhiibbaa haphinni baqqaana ozoonii qilleensa addunyaa irratti fidu maal ?
Baqqaanni ozoonii naannoo kuufama molekiyulii ozoonii ( O3 )ol fageenya kiiloomeetira 11 – 50 dachee irraa istiraatoosfarii keessatti argamu dha . Baqqaanni ozoonii uumamaan dachee haguugee kan argamu yoo ta’u innis xiyoota ifa Aduu anniisaa cimaa qaban lubbu qabeeyyii irratti hubaatii ga’uu kan danda’an atimoosfarii istitaatoosfarii keessatti xuuxuun kan hambisu dha.
Ozooniin kutaa atimoosfarii istiraatoosfarii keessatti gocha (action) ifni aduu molekiyulii oksijiinii irratti raawwatuun kan uumamuu dha. Ozooniin haguuggii atimosfarii dachee ta’uun lubbu qabeeyyii balaa xiyyoota ifa Aduun dhufan irraa kan ittisu kun sababa faalama qilleensaan urachuu fi hir’achuu danda’a. Kunis kan ta’uu danda’u karaa lamaan :
1. Karaa uumamaa :- Kun raawwi ifni aduu molekiyuli ozooni irratti raawwatuun kan ta’u dha. O3 + UV ↔O2 + O
Yookaan walitti bu’insa ozoonii fi molekiyuloota oksijiinii biroo atimoosfarii keessa jiran wajin godhamuun ta’a . O3 + O à 2O2
2. Keemikaalota nam – tolcheen : keemikaalonni namaan oomishamanii gara qilleensaatti makamuun baqqaana ozoonii hirisuun kan beekamu
Kilooroofiloorookaarboonii ( CFC ) dha. CFCn keemikaala amooniyaa summaawaa ta’e bakka buusuuf kan oomishamee fi akka qorrisisaatti kan gargaaru dha. CFCn garee keemikaalotaa ta’ee kaarboon teetiraa kilooraayidii fi kilooroofoormii kan of keessatti qabate dha . CFCn kun suuta suutaan dirree dachee irraa gara istiraatoosfariitti ol bahuun xiyyoota ifa Aduun caccabee ( diigamee ) kilooriinii gad lakkisa . Kilooriiniin kun ammoo dabaree isaa molekiyulii ozoonii ( O 3
)waliin wal- nyaatinsa keemikaalawaa gaggeessuun ozoonii gara molekiyulii oksijiiniitti jijjiiruun baqqaana ozoonii hir’isa. Adeemsi kun hir’achuu (haphachuu) ozoonii ( ozone layer depletion ) jedhama .CClF + UV à CCl + Cl
Cl + O3 à ClO + O2 ClO + O à Cl + O2
6.5. Taatee Mana Magariisaa ( Green house effect)
Tempireecharri naannoo lafaa qabattoota afur irratti hundaa’a.Isaanis:
Hamma xiyya aduu lafti ofitti fudhattu.
Hamma xiyya aduu lafa irraa balaqqeessa’u.
Hamma ho’aa atimoosferiin of-keessatti qabachuu danda’u
Hurka fi qabbanaa’uu bishaanii irratti.
Maddi anniisaa lafaa aduu dha.Anniisaan aduu atimoosfeer qaqqabu keessa %50 kan xuuxamu ykn balaqqeessa’u qil eensa naannoo,O3 fiO2 “Uv” aduu irra maddu xuuxuun balaqqeessa’u.Xiyyootni lafa qaqqaban madaana ifa mul’atuu fi “IR”irrati.Lafti xiyya kana xuuxuun galaanaa fi naannoo ishee ho’ifti.Akka giddu galeessatti tempireechara lafaa 150C yeroo ta’u kan hawaa naannoo ishee immoo -270C dha. Sababa kanaaf naannoo ishee ho’isuuf ho’a laatti. Osoo adeemsi lafa kana irratti raawwatu kan qofa ta’ee maaltu ta’a ture jettee yaaddaa? Saffisi lafti itti ho’a laattu dachaan saffisa isheen itti ofitti fudhattu dha. Osoo adeemsi raawwatu kana qofaa ta’ee lafti baay’ee qabbanooftuu ykn qorrituu kan jireenyaaf hin mijoofne taati ture. Ho’i lafa irraa baqlaqqeessa’u % 84 atmosfeeti keessatti xuuxamuun gara lafaatti deebi’ee akka isheen ho’itu taasisa. Ho’i kun hubaati giri nhaawusi jedhama. Kaarboon day oksaayidii, hurka bishaanii fi gaasotni biro kan akka CH4,CFCS,N2O fi O3 ho’a lafa irraa balaqqeessa’u of keessatti qabachuun gara lafaatti deebisuun akka lafti ho’itu taasisu. Sababa kanaaf gaasota mana magariisaa jedhamu. Gaasonnii kun xiyyaa aduu irraa dhufu akkuma jirutti yeroo of keessa dabarsan kan lafa ga’ee gara samitti oldeebi’a.
6.6. Qabeenyaa uumamaa,Annisaa fi Nannoo
Wantoonni lubbu qabeeyyi fi lubbu dhabeeyyi ta’ani addunyaa kana irratti argamani fi lubbuu utuban qabeenya uumamaa jedhamu.
Qabeenyi uumamaa jireenyaa fi badhaadhina ilma namaaf murteessoo dha. Fakkeenyaaf: bishaan, qilleensa, biyyee, albuudota, ifa aduu, bosona, bineeldota fi wantoonni nuti qabnuu fi itti gargaaramnu hundi qabeenya uumamaa irraa argaman. Qabeenyi uumamaa bakka bu’uu danda’uu fi bakka bu’uu dadhabuu isaani irratti hundaa’uun bakka gurguddoo lamatti qoodamu.
Isaanis: a) Qabeenya uumamaa kan haaroman (renewable natural resources)
b) Qabeenya uumamaa kan hin haaromfamne (non- renewable natural resources)
Qabeenya uumamaa kan haaroman
Qabeenyi uumamaa kan haaromuu danda’an warra hammi saffisinni (reeti n) itti fayyadamummaan isaani reeti bakka of buusa isaani gadi ta’e fi naannoon isaani mijataa ta’ee jirutti, warra bakka of buusaa deemanii dha. Kanaafuu hanga sirriitti eegamanii (qabamanii) argamanitti osoo hin manca’i n itti fayyadamanu dha. Fakkeenya: bosona, bineensota bosonaa, biqilootaa fi biyyee.
Qabeenya uumamaa kan hin haaromfamne
Kanneen hammaan murtaa’aa ta’ani fi yoo haala wal irraa hin cinneen itti fayyadamaman kan dhumani fi bakka bu’uu kan hin dandeenye dha. Fakkeenya: Albuudota, zayita, gaazi uumamaa fi boba’aa haftee.
Qabeenyi uumamaa hedduun kan bakka bu’uu hin dandeenyee fi hin haaromfamne yookaan salphaatti haaromuu kan hin dandeenye dha. Fakkeenyaaf:
Bishaan yoo faaltotaan akka malee faalame, haaromuu hin danda’u
Biqiloonnii fi bineeldonni yoo sanyiin isaanii lafa irra jiraate wal-horuun bakka bu’uu danda’u, garuu haalota adda addaati n yoo sanyi n isaani lafarraa bade (dhume) bakka bu’uu hin danda’an.
Qabeenya uumamaa kan muraasaan argamani fi bakka bu’uu hin dandeenye xiqqaachuu yookaan immoo dhumuu waan danda’ani f sirnaan qabachuu fi eegumsa barbaachisaa ta’e gochuun dirqama nama kamirraayyuu eegamu dha.
6.6.1. Muka Qabeenya uumamaa guudicha haroomfamu
Qoraan boba’oo hunda caalaa boba’aa baayyee barbachisaa ta’ee waggoota kumatamaaf ilma namaa gargaaraa tureera.Sababa guddina teknoolooji irraan kan ka’e itti fayyadamni boba’oowwan madda annisaa haftee bineensota fi biqiloota irra argamanii akkasumaas boba’owwan bu’aa Walnyaati nsa niwukilaaraa babal’achuu irraan kan ka’e itti fayyadamni mukaa gadi bu’aa dhufee jira .Hata’u malee biyoota guddatani s ta’e kanneen bodatti hafoo keessaatti mukti amma illee burqaa annisaa addunyaa kanaa isa olaanaa dha.
Guddinni teknoolooji addunyaa muka akka burqaa annisaa elektiri kaa fi ho’atti gargaaramuu danda’uun isaa faayidaa mukti akka qoranitti qofa qabu hir’isee jira.Bara kana keessa faayidaa mukti akka boba’atti qabu dabalaa jira kuniis
1/Gatin isaa yeroo boba’oowwan haftee (fossil fuel)bira qabamu gadi aanaa ta’uu.
2/Faayidaa mukti qorannii faalama nannoo irratti qabu yeroo kanneen biro bira qabamu gad aanaa ta’uu.
3/qabeenya uumamaa kan haaroomfamu ta’uu isaa.
Oomiishni muka qoraaniif ooluu faayidaa hawwasummaa illee nii qaba innis adeemsa hojii uumuu keessumattuu nannoo badiyyaatti fi akkasumaas mukti karboonii hinbabsawaa (carbon neutral) dha jechuun ni danda’ama.kuni s karboon dayoksaayidiin muka gubudhaan uumamu karboonii qilleensa keessaa biqiladhaan xuuxame dha .Kanaafuu marsaan uumamaa irratti dhiibbaa guddaa hin qabu.Annisaan muka irraa argamu karaa lamaan umama.
Adeemsa termookeemikaalatiin kan geggeeffamu dha.Adeemsa ittiin mukti oksijinii keessatti gubachuun gara CO2 fi H2O fi annisatti itti jiijjiramu dha.
2/Gaazifikeeshinii ykn Payroolisisii
Adeemsa termookeemikaalaa ta’ee muka gara boba’oowwan biro dhangala’oo ykn gaazawoo ta’anitti jijjiruuti.Buba’oowwan gaazawoo ykn dhangala’oo ta’an kanneen yeroo lammaffaaf gubachudhaa kan annisaa maddisiisaan ta’a.
Gara fuula duraatti adeemsa bayooolojikaalaa fi keemikaala gargaramuudhaan muka iraa itaanooli oomishuun bakka boba’oo konkoolattotaa buusuuf itti deemamaa jira.Guubiinsi mukaa tarkaanfiilee gurguddoo sadii keessa ba’a.
1/iGoggoogsuu.Suudowwan mukichaa akka ho’an taasisuun bishaan akka hurkaan keessaa ba’u gochuu.
2/payroolisisi ,gaazifikeeshini fi gubachuu wantoota hurkoo ta’ani. 100°C fi 105°C gidduutti adeemsi payroolisisii,gaazifikeeshini ni jalqaba qaamni mukaa hurkoo ta’an muka keessaa akka hurkani ba’an taasisuu. 500°C fi 600°C gidduutti gaazootni hurkoon gubachuutti ka’u daeemsi
kunif labooba ibiddaa uumamu irraa ni mul’ata Annisaan muka irraa argamu garri irra caalu (75
80%)wantoota hurkoo irraa kan uumamu dha.
3/Boba’uu Cilee.Nannoo 800 – 900°C gidduutti cileen uumame gubachuun daratti jijjirama.Walumaagalatti mukti gutummatti gubateera kan jedhamu.
-Yoo annisaa olaanaa hanga kennuu qabu kenne.
-Hamma annisaa gubiinsaaf barbachisuu yoo xiqqeesse.
-Yoo CO fi wantoota hurkoo hin gubatiin muraasa qofa nannotti gadilakkise
-Hammi cileen gara daaratti hin jijjiraminii xaqqate.
-Yoo aara fi taarii nannootti gadi lakkifamu xiqqeesse dha.
6.6.2. Maddota Annisaa Adunyaa
Dhagaa cilee,zayitaa fi gaasiin uumamaa boba’oo hambaa“fossil fuels” jedhamuun beekamu.Sababni maqaan kun kennameefis kan isaan uumamaan haftee biqilootaa fi bineensotaa waggota miliyoonaan lakka’amani f dirra lafaa keessatti ukkamamaani turan irraa ti.Waliigalatti boba’owwan sadan kanneen 66% annisaa elektiri kaa addunyaa keenya kanaa akkasumaas 95% annisaa waliigalaa addunyaa keessa jirannuu kannen kennanii dha.
Dhagaan Cilee 28% aanisaa addunyaa yeroo laatu zayitni annisaa addunyaa nannoo 40% kan ta’u laata.Dhuubbaan zayitaa petirooliyeemii jedhama. Petirooliyeemiin yeroo dhagaa cilee bira qamamu salphatti dachee lafaa keessaa ba’uuf hoji irra ooluu danda’a,kuni s ujummoo gargaaramuun dha,akkasumaas illee gatii salphaadhaan bakkaa bakkatti sochoosuun nii danda’ama.
Gaasi n uumamaa annisaa tilmamaan parsanti 20% ta’u annisaa addunyaa keenyaaf kenna.
Bu’awwan boba’owwan haftee gargaaramuun qabu
Humni elektiriikii guddaa ta’e salphaatti fi baasi xiqqoon irraa uumamuu danda’a.
Zayitaa fi gaasii gara bakka annisaan itti oomishamuutti(power sation)geessuun baasii guddaa hin gaafatu.
Buufata oomisha annisaa kanneenii eessattuu(bakka kamittuu) ijaaruun ni danda’ama.
Buufata annisaawwan kanneen oomishuuf oolu baasii salphadhaan ijaaruun ni danda’ama.
Rakkowwan itti fayyadama boba’owwan hambaa waliin walqabatan
Rakkoo olaanaan itti fayyadama boba’owwan haftee wali n walqabate faalama keessumattu faalama qilleensa dha.
Gubiinsi boba’owwan haftee isa kamuu karboon dayoksaayidii uuma iiniis taatee mana magarisatiif sababa tokko ta’uun olka’i nsa ho’a addunyaa fida.
Dhagaa cilee gubuun salfardaay oksaayidii uuma innis rooba asiditiif sababa ta’a.
Ujummowwan dhubbaa zayitaa baatan dhowuun galaanaaf qamoota bishaanii faaluu.
Dhagaa cilee qotanii baasuun balaa nama irratti fiduu irra iyyuu mucucachuu dirra lafaatiif sababa ta’ee argama.
Poweer isteeshinootni heedduun qorrisisuuf jecha nannoo galanatti ijaaramu kun immoo ho’a bishaan galanaa waan dabaluuf lubbuu qabeeyyi keessa jiratan irratti dhiibbaa olaanaa fida.
Bobba’oowan hambaa annisaa uumamaa kannen bakka hinbuufamne(hin haromne)dha.
Bu’awwani fi dhi bbaa burqaalee annisaa kanneen armaan gadii kitaabota dubbisuun burqaalee odeeffannoo akka intarneetii kkf gargaaramuun ibsi.
A/Annisaa Qilleensaa B/Annisaa Bishaanii C/Annisaa Jiyootermaalii D/Annisaa aduu
1/Badiin kallattii sababa haphachuu baqqana ozonitiin dachee aguugee argamuu irraa kan ka’e dhufu kami?
A/Tempireecharri giddugaleessaa dachee suuta akka dabalaa deemu godha.
B/Qabiyyeen oksjinii atmoosfara keessaa akka hir’atu godha. C/Xiyyootni UV hammi guddaan akka dirra lafaatti gadi darban taasisa.
D/Galanni sababa cabbiin polarii irraa baqee itti dabalamuuf akka guutanii godha.
2/Gaasota dacha dachaan tarra’an kanneen keessaa rooba asiditiif sababa kan ta’an warra kami? A/Miteenii fi Ozoonii B/Oksijinii fi naytiraas oksaayidii
C/Miteenii fi salfar day oksaayidii D/Karboon dayoksaayidii fi salfaar dayoksaayidii 3/Rakkoo olaanaani fi inni jalqabaa sababa haphachuu baqqana ozoni irraa kan ka’e fayyaa ilmaan namaa irra ga’u kami?
A/Hubaatii inni sirna bul a’iinsa nyaataa irratti qabu C/Dhukkuba sammuu
B/Kaansarii tiruu fiduu isaa D/Kaansarii gogaa irratti fiduu isaa 4/ Kosi (waste)jajjaboo iddoo malee gatuu irraa kan ka’e faalamoota qaqqabaan kanneen keessa bayyee hamaa kan ta’e isa kami?
A/Faalama qilleensaa B/Faalamuu bishaan dirra lafaa keessaa C/Faalama nannoo jireenyaa D/Taatee lafa qonnaaf oolu irratti qabu.
5/Gaazota kanneen keessaa cunqina olanadhaan kan atmoosfara dachee keessatti argamu kami. A/Oksijinii B/Naytiroojiinii C/haydiroojiinii D/Karboon dayoksaayidii
6/Sababa olkaa’i nsa ho’a addunyaa irraa kan ka’e kan hin qaqqabne kami? A/Galaanni guutuu fi yaa’uu B/Bu’aan lafa qonnaa irraa argamu dabaluu C/Taatee hamaa fayyaa namaa irratti qabachuu
D/Saffisaa fi cimina balaa sababa bakakkaa irraa ka’e dhufu dabaluu 7/Taatee mana magarisaa keessatti kan qooda olaanaa hin qabne kami? A/Karboon dayoksaayidii B/karboon mono oksaayidii
C/Kilooroofilooroo karboonoota D/Miteenii E/Naytiraas oksaayidii
Haphachuun baqqana ozonitiif sababni gaasii isa kami? A/Naytiraas oksaayidii B/Karbaan day oksaayidii
C/Kilooroo filoorookarboonii D/Miteenii E/Hunduu Deebii dha.
Burqaalee annisaa kanneen armaan gadii keessaa addunyaa keenya irratti parsantii olanadhaan kan hojii irra oolaa fi dhumaa jiru isa kamai.
A/Petirooliyemii B/gaasii uumamaa C/Dhagaa Cilee D/Annisaa bishaanii
11/ Peestisaayidoota hafteen isaani biyyee keessa yeroo dheeraaf turuu danda’ani fi dhi bbaa fi summaa’umma yeroo dheeraa qaban keessatti kan ramadamau kami?
A/DDT B/Chlordanes C/Dieldrin D/Endrin E/Hunda
12/ Siibiilotni ulfaatoon sababa faalama bishaani ta’uu danda’an qofa kan hammate filannoo isa kami?
A/Merkurii, Liidii, Kadimiyemii, Arsenikii B/Soodiyemii,Tiinii,Iskaandiyemii,Mangaaneezii C/Kalsiyemii,Korandamii,Tangistanii,Tantaalamii D/Maangaaneezii,Warqee,Koopparii,Taantalamii
Ebbing D.D. 1998 , General Chemistry, Houghton Mifflin Company , USA.
Brady E. and Humsiston E. 1982, General Chemistry, John wiley & sons, Inc USA
Masterton W.L and Hurley C.N, chemistry: Principles and Reactions
Atkins P.W. Beran J.A 1991, General Chemistry
Miller F.M. 1984 , chemistry: Structure and Dynamics, McGraw Hill Inc. USA.
Silberberg, M.S 2000. The Molecular Nature of Matter and change, 2nd ed. McGraw-Hill Companies, IC. USA.
J.D. Lee 1977, a new concise inorganic Chemistry, 3rd Edition (or better) ELBS)
H.J Emeleus and A.G shape, 1973, Modern Aspects of Inorganic Chemistry, University Bookstall, New Delhi, 4th ed.
G.F Liptrot, 1983, Modern Inorganic chemistry, 4th ed. Collins educational
P.C Kamboj, 1979, Selected Topics in Advanced Inorganic chemistry, Central Book Depot Allahabad.
K.N. Upadhyaya. A text Book of Inorganic Chemistry, 2nd edition, Vikas Publishing House Pvt. LTD, 1990
J.E. Huheey, 1983 Inorganic Chemistry, 3rd ed. Happer International SI edition.
F.A Cotton and G. Wilkinson P.L., 1993, Basic Inorganic Chemistry, 3rd ed.